Bollywood ဖြင့် ဇာတ်ကား100 ကား
IMDb rating : : 7.6ဒီတစ်ခေါက် ပရိတ်သတ်ကြီးကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ အကျော်အမော် သရုပ်ဆောင်ကြီး အမီတာဘဂျမ်းရဲ့ အသစ်စက်စက် ရုပ်ရှင်ကားကြီး တစ်ကားနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ. . .ဒီကားရဲ့ ထူးခြားချက်ကလေးတွေကို အရင်ဆုံး ကောက်နှုတ်ဖော်ပြပေးပါရစေဇာတ်လမ်းထဲက အမီတာဘဂျမ်းရဲ့ အသက်က 102 နှစ်ရီရှီးကပူးရ်ရဲ့ အသက်က 75 နှစ်27 နှစ် ကွာခြားပာတယ်
တကယ့်အပြင်မှာတော့ မင်းသားကြီး ရီရှီးကပူးရ်က အမီတာဘဂျမ်းထက် ၇ နှစ်သာ ငယ်ပါသတဲ့ဒီအချက်ကိုတော့ မင်းသားကြီး အမီတာဘဂျမ်းနဲ့ ရီရှီးကပူးရ်တို့ Ajooba 1991 ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားရဲ့ နောက် နှစ်ပောင်း ၂၇ နှစ်ကြာမှရုပ်ရှင်ဖန်သားပြင်မှာ အတူတကွ တွဲဖက်ပြီး ပြန်လည်သရုပ်ဆောင်တဲ့အမှတ်အသားတစ်ခုအဖြစ် ထည့်သွင်းထားတာ ဖြစ်ပါတယ်
တိုက်ဆိုင်စွာပဲ ဒီကားရိုက်ကူးစဉ်မှာမင်းသားကြီး အမီတာဘဂျမ်းဟာ အသက် 75 နှစ်ရှိနေပါပြီဒီကားကို 2016 ခုနှစ် အလယ်လောက်မှာ ရိုက်ကူးဖို့ လျာထားခဲ့ပေမယ့် ဇာတ်ညွှန်းအပြောင်းအလဲကြောင့် 2018 ခုနှစ်ကျမှ ရိုက်ကူးပြီးစီးခဲ့ပါတယ်ရီရှီးကပူးရ်ရဲ့ ဇာတ်ကောင်ဖြစ်တဲ့ ဘာဘူလားနေရာမှာ မူလက ပါရက်ရှ်ရာဝဲလ်ကို ထည့်သွင်းရိုက်ကူးဖို့ စီစဉ်ထားခဲ့ပေမယ့် ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူးဒီကားကို Saumya Joshi ရဲ့ Gujrati ဆိုတဲ့ ပြဇာတ်ကို အခြေခံကာ အပြောင်းအလဲ
အနည်းငယ်ဖြင့် ရိုက်ကူးပုံဖော်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်လူ့ဘဝဆိုတာဟာ အသက်အရွယ်ကြီးလာချိန်မှာ မိသားစုသိုက်သိုက်ဝန်းဝန်းနဲ့ သားသမီးတွေမြေးတွေဝန်းရံပြီးပျော်စရာစိတ်ချမ်းသာစရာတွေနဲ့ နေရရင်အတော့်ကို ကံကောင်းပါတယ်ဒီထက်ပိုပြီး ကိုယ်အသက်အရွယ်ရလာချိန်ကိုယ့်မှာ ဖခင် သော်လည်းကောင်းမိခင်သော်လည်းကောင်း သက်ရှိထင်ရှားရှိနေသေးရင်
ပိုလို့တောင် ကံကောင်းတယ်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်ဘာဘူဆိုတဲ့ အဘိုးကြီးက အသက် 75 နှစ်အသက်နဲ့စိတ်က အတူတူပဲ 75 နှစ်သူ့ဇနီးသည်ကဆုံးပါးသွားပြီဖြစ်သလိုတစ်ဦးတည်းသောသားကလည်းအမေရိကားမှာ အိမ်ထောင်ကျ အခြေချသွားပြီစိတ်ထောင်းလို့ ကိုယ်ကြေဆိုတဲ့စကားလိုပဲအိမ်အိုကြီးတစ်လုံးထဲမှာ
သူ့ဖခင်ဖြစ်သူရယ်ဆွေမျိုးမကင်းတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်ရယ်နဲ့ အတူနေပေမယ့်သူ့ဘဝဟာ ခြောက်သွေ့လွန်းလှတယ်ကိုယ်တိုင်က ဇီဇာကြောင်တတ်သလိုစိတ်တိုလွယ် စိတ်ထိခိုက်လွယ်တယ်အစွဲအလန်းကလည်း ကြီးတတ်သေးသူ့ဖခင်ကြီးနာမည်က ဒတ္တထရီတဲ့ အသက် 102 နှစ် လူအသက်က 102 စိတ်အသက်က 26 နှစ်ဒီအသက်အရွယ်အထိ နှစ်ပေါင်းများစွာ နေလာနိုင်တဲ့ သူ့ရဲ့ လိျှု့ဝှက်ချက်က ပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့ အကျင့်ကြောင့်များလား မသိ. .
.အကျဉ်းကျနေတဲ့ သားဖြစ်သူရဲ့ စိတ်ကိုအရင်အတိုင်း ပြန်ဖြစ်သွားအောင် လုပ်ပေးဖို့ဒတ္တထရီ စဉ်းစားတယ်အိမ်ကိုတွယ်တာလွန်းတဲ့ သူ့သားဘာဘူ့ကို ဂင်းနစ်မှတ်တမ်းအကြောင်းပြပြီး ဘိုးဘွားရိပ်သာပို့ဖို့ ခြိမ်းခြောက်တယ်ဒါမှ ကမ္ဘာပေါ်မှာ သားဖြစ်သူကို ဘိုးဘွားရိပ်သာပို့တဲ့ ပထမဆုံးဖခင် ဖြစ်လာမှာကိုးဒီအကြောင်းကို သိသွားတဲ့ ဘာဘူ့ခမျာဖခင်ကြီး တကယ်လုပ်မှာကို ကြောက်နေတယ်ဒတ္တထရီကလည်း အလျှော့မပေးသူခိုင်းတဲ့ စမ်းသပ်မှုတွေ မအောင်ရင် တကယ်ပို့မယ် တကဲကဲပထမ
တတိယ စမ်းသပ်မှုတွေကို ကျော်ဖြတ်အပြီးနောက်ဆုံးသော စမ်းသပ်မှုမှာဘာဘူရင်ကွဲရပြီနှစ်ပေါင်းများစွာ ကွဲကွာနေပြီးအခုမှ ပြန်တွေ့ရမယ့်သူ့သားဖြစ်သူအာမိုးနဲ့ သူ့အဖေက မတွေ့ရဘူးတဲ့လေဘာကြောင့်များပါလိမ့်အနှစ်ချုပ် ပြောရရင်”မင့်သားက ငါ့သားကို အနိုင်ယူအလဲထိုးသွားတာမျိုးငါခွင့်မပြုနိုင်ဘူး”တဲ့ဖခင်တစ်ယောက်က ပြောတဲ့နှုတ်ထွက်စကားဟာ ဒီကားလေးရဲ့ အသက်ဖြစ်သွားတယ်အစကနေ အလယ်လောက်အထိစိတ်ဝင်စားစရာတွေနဲ့အဘိုးကြီးနှစ်ယောက်ကြား
က အလွဲတွေကြောင့် တသောသော ရယ်မောခဲ့ရပြီးနောက်ပိုင်းရောက်လေလေစိတ်ထိခိုက်ရလေလေပါဖခင်တစ်ယောက်ရဲ့ မေတ္တာနဲ့လူအိုကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ မျှော်လင့်ချက်ကြားက လွန်ဆွဲတဲ့ပွဲမှာဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ စမ်းသပ်မှုတွေကို
ကျော်ဖြတ်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားရင်း ဘာဘူတစ်ယောက် ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဘိုးဘွားရိပ်သာကိုပဲ ရောက်သွားမလား…???ဖခင်ဖြစ်သူကို အဆင်ပြေအောင် လုပ်ပေးနိုင်မလား..ဆိုတာကိုတော့…ဇာတ်ကာားလေးကို ဆက်လက်ကြည့်ရှု ခံစား
လိုက်ပါ.. (ဇာတ်လမ်းအညွှန်းကိုတော့ Movie Like Movie Choice FB page မှ ကူးယူဖော်ပြထားတာဖြစ်ပြီး ဘာသာပြန်သူကတော့ကိုဇော်ထူးပါ)
2018 ခုနှစ်ထွက်ရှိထားပြီး အခုလောလောလတ်လတ် ရုံတင်နေဆဲဖြစ်တဲ့၁၉၂၁ ဆိုတဲ့ အိန္ဒိယ အချစ်သရဲ သဲထိပ်ရင်ဖိုကားကြီးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ဇာတ်လမ်းလေးက အချစ်ကြီးရင် အမျက်ကြီးတယ်ဆိုတဲ့ အတိုင်းပဲ
အချစ်ကို ကိုးကွယ်မိရာမှ တဏှာ လွန်တော့ အရူးဖြစ်ပြီးသေပြီးတာတောင် စွဲလမ်းစိတ်ကြောင့် မကျွတ်လွတ်နိုင်ပဲသရဲဘ၀ နဲ့ ချစ်ရသူကို တပါးသူ မိန်းကလေးလက်ထဲ မပါသွားအောင်လိုက်လံ နှောင့်ယှက်ပုံ တွေကို ရိုက်ကူးပြထားတာပါဇာတ်လမ်း အကျဉ်းလေးကတော့ – အိန္ဒိယမှ ထူးချွန်တဲ့ ပီယာနိုပညာရှင်လေး အာရွတ်ရှ်ကိုသူ့ရဲ့သူဌေးက လန်ဒန်ကို ဂီတပညာသင်ဖို့စေလွှတ်ခံခဲ့ရတယ်။လန်ဒန်မှာရှိတဲ့သူ့အိမ်ကိုလည်း စောင့်ရှောက်စေရင်းနဲ့ပေါ့။ ဒါပေမယ့် တစ်နေ့မှ
ာ အာရွတ်ရှ်ကအမှားတစ်ခုလုပ်မိသွားပါတယ်။ အဲ့ဒီအမှားကြောင့် သူနေနေတဲ့အိမ်ကြီးမှာသရဲတစ္ဆေတွေရဲ့ခြောက်လှန့်ခြင်းကို ခံရပါတော့တယ်။ သူတစ်ယောက်တည်းဒီပြဿနာတွေကြုံနေရင်းမှတစ်နေ့သတင်းစာထဲမှာ ဝိဉာဉ်တွေနဲ့စကားပြောတတ်တဲ့ ရို့စ်ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်အကြောင်းဖတ်မိတဲ့အချိန်မှာ သူ့အတွက် မျှော်လင့်ချက်တွေရှိလာပါတယ်။ဘောလိဝုဒ်ရဲ့ နာမည်ကြီးသရဲကားရိုက်တဲ့ဒါရိုက်တာ Vikram Bhatt ရိုက်ကူးထားတာပါ။သရဲကားကြိုက်သူတွေ
အတွက် တကယ်ကိုထိန်လန့်မှုတွေပေးစွမ်းစေမယ့် ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားပါ။အသံချဲ့ပြီး အိမ်ထဲမှာ တစ်ယောက်တည်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ပိုပြီးကြောက်စရာကောင်းမယ်ဆိုတာကြေငြာလိုက်ပါတယ်။
တစ်သက်မှာ တစ်ခါတော့ သူတို့ ယောကျ်ားတွေကို သတ်ပစ်ဖို့ စဉ်းစားဖူးတယ် တဲ့ …..ခင်ဗျားဟာ အိမ်ထောင်သည်ဆိုရင် ခင်ဗျားရဲ့မိန်းမကို မေးကြည့်ပါ ။
အနည်းဆုံး တစ်ကြိမ်တော့ ခင်ဗျားကို သတ်ဖို့ နည်းလမ်းတစ်ခုတော့ သူစဉ်းစားဖူးလိမ့်မယ်တဲ့ …..ကဲ .. ဒါဆို ဘာလို့ ခင်ဗျား အခုထိ အသက်ရှင်နေလဲ သိလား?“ကလေး”ကလေးတစ်ယောက်လောက် ရလိုက်ရင်
မိန်းမတွေဟာ ယောကျ်ားကို ပိုပြီး သည်းခံလာနိုင်လာတယ်တဲ့ … ဒါကြောင့် ခင်ဗျား အခုချိန်အထိ အသက်ရှင်နေတာပေါ့ …..
ဆူဆန်နာ အန်နာမရင်း ဂျိုဟန်နာ ဆိုတဲ့
သူဌေးမ တစ်ယောက် ယောကျ်ား ၆ ယောက်ထိ ယူခဲ့တယ် အကုန်သေကုန်တယ် ။တကယ်တော့ ဆူဆန်နာဟာ
သူ့ဘဝသက်တမ်း တစ်လျှောက်လုံး ထာဝရအချစ်ကို ရှာဖွေခဲ့တာပါ ၊ အရမ်းအထီးကျန်ခဲ့ရပါတယ် ။ သူ မွေးကင်းစအရွယ်မှာပဲ သူအမေ ဆုံးပါးသွားခဲ့တယ် ။ ပြီးတော့ သူအရွယ်မရောက်ခင်မှာဘဲ သူ့အဖေ ထပ်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ် ။ သူ့အဖေက သူအတွက်တော့ အရာရာပါပဲ သူငယ်ချင်းလို.. အမေလို.. အဖေလို.. အစ်ကိုလို ဖြစ်နေခဲ့တယ် ။ သူအဖေဆုံးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ သူ့အဖေလို ယောက်ျားမျိုးကိုတွေ့ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ် ။တကယ်တော့ ဆူဆန် ဘဝက
မကောင်းတဲ့ ယောကျ်ားတွေနဲ့ပဲ ဆုံဖို့ ကံပါလာတယ် ထင်ပါတယ် ။ဆူဆန်နာမှာ သိပ်ချစ်တတ်တဲ့ နှလုံးသားရှိတယ်
အဲဒိနှလုံးသားကြောင့်ပဲ လူ ၆ ယောက်ကို သေနေ့မစေ့ပဲ ကောင်းကင်ဘုံကို စောစောစီးစီး ပို့ပစ်လိုက်တယ်လေ ….ဆူဆန်ရဲ့ အလှက ကြောက်စရာကောင်းတယ်
ဒါပေမယ့် သူ့ကို အရှိအတိုင်း လက်ခံနိုင်မယ့်သူမျိုး …. သူ့ရဲ့ဒုစရိုက်တွေ သုစရိုက်တွေနဲ့ ဒီကြောက်စရာမျက်နှာကြီးကို လက်ခံနိုင်မယ် လူမျိုးကို သူရွေးချယ်တော့မယ် ။အဲဒါကတော့ သူ့ရဲ့ ၇ ယောက်မြောက် ယောကျ်ားပါပဲ ….. (ဇာတ်လမ်းအညွှန်းကို DMO Entertainment Page (https://www.facebook.com/DMO-Entertainment-171295570154166/) မှကူးယူဖော်ပြပါသည်)
ဇာတ်လမ်းနာမည်ကိုက ခပ်ဆန်းဆန်းနဲ့။ကျွန်တော်လည်း ဒီဇာတ်လမ်းစကြည့်တော့ ဘာကားပါလိမ့်ပေါ့။96 ရဲ့ အရှည်က 1996 Batch။၁၉၉၆ မှာ ဆယ်တန်းတက်ခဲ့ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ Reunion အကြောင်း။80 Born. 90 Born တွေဆိုရင် ဒီဇာတ်လမ်းကြည့်ရင် အခြားသူတွေထက် ပိုပြီးတော့ ရင်ခုန်ရမယ်။ ကြည်နူးရမယ်။ လွမ်းဆွတ်ရမယ်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ 90’s Kids တွေကိုး။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း ဒီကားကြည့်တာ တကယ်ရင်ခုန်ရတယ်။ခုနေများ သူငယ်ချင်းတွေ အကုန်ပြန်ဆုံဖို့ဆိုတာ လွယ်မှမလွယ်ဘဲကိုး။သူငယ်ချင်းတွေပြန်ဆုံဖြစ်တာနဲ့အတူတူ ရည်းစားဟောင်းတွေလည်း ပြန်ဆုံနိုင်ကြသေးတယ်။ရည်းစားဦးနဲ့လည်း ပြန်ဆုံနိုင်သေးတယ်။ဖွင့်မပြောဖြစ်တဲ့ Crush များရှိလို့ရှိရင် သူသာ အပျိုကြီးဆိုရင် ရင်ခုန်ခွင့်ရှိသေးတယ်နော့။ဒီဇာတ်ကားကြည့်ပြီး သူငယ်ချင်းတွေ ပြန်ဆုံဖို့တောင် စိတ်ကူးယဉ်မိတယ်။
ငယ်ချစ်နဲ့များ ပြန်ဆုံရလေမလားပေါ့။ဒီဇာတ်လမ်းမှာ မင်းသားက ဓာတ်ပုံဆရာ လူပျိုကြီး၊ မင်းသမီးက သူ့ရဲ့ Crush လက်ရှိမှာ အိမ်ထောင်သည် ကလေးတစ်ယောက်အမေ။သူတို့နှစ်ယောက် ပြန်ဆုံဖို့ ဒီ Reunion က ဖန်တီးလာခဲ့တဲ့အခါ…. အချစ်ဆိုတာ ဘယ်လောက်နူးညံ့သိမ်မွေ့ကြောင်း၊ ဘယ်လောက်ကြည်နူးဆွတ်ပျံ့ဖွယ်ကောင်းကြောင်း၊ မေတ္တာစစ်စစ်နဲ့ ချစ်တဲ့အချစ်တွေရဲ့ တန်ဖိုးက ဘယ်လောက်မြင့်မားကြောင်း ဒီဇာတ်လမ်းထဲမှာ တွေ့ရပါမယ်။အချစ်ဇာတ်လမ်း
ကောင်းကောင်းလည်း ကြည့်ချင်ရင်၊ ဆယ်တန်းတုန်းက ကျောင်းသားဘဝ နဲ့ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းကြီးတွေကို လွမ်းတယ်ဆိုရင် ဒီဇာတ်လမ်းက လက်မလွှတ်သင့်တဲ့ကားကောင်းတစ်ကားထဲမှာ ပါပါတယ်ဗျ။ (ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ့ဘာသာပြန်ပေးထားသူကတော့ Ko Myo Nyunt ပါ)
ဘောလိဝုဒ်ကားတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပရိသတ်မထင်ထားလောက်အောင်လှည့်ကွက်လေးတွေကဆရာကျတတ်ကြပါတယ်။ဇာတ်ကြောင်းဇာတ်အိမ်တည်ဆောက်ပုံကလည်းတောင့်တင်းတယ်ဆိုတာ ဘောလိဝုဒ်ပရိသတ်ကြီးလည်းသိပြီးသားပါ။ဘောလိဝုဒ်ကားအများစုဟာ ဟာသ/ အချစ် / အလွမ်း /ဇာတ်ကြမ်း /လှည့်ကွက် စတဲ့ ရသတွေထောင့်စေ့အောင် တည်ဆောက်ထားလေ့ရှိပါတယ်။ဒီကားလေးရဲ့အညွှန်းကိုမျှဝေရမယ်ဆိုရင်ဖြင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့လျှို့ဝှက်အေးဂျင့်အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ အဖွဲ့ X အကြောင်းလေးနဲ့ပဲစချင်ပါတယ်အဖွဲ့ X ရဲ့ခေါင်းဆောင် ကာနယ်ဟာဆိုရင်ဖြင့့်အာဏာကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီး’ရလေလိုလေအိုတစ္ဆေဆိုသလို’ကိုယ်ကျိုးရှာလောဘသားခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ပါအဖွဲ့ X ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကတော့ ရှရီဆိုတဲ့အရည်အချင်းရှိအေးဂျင့်ပါသူကတော့ မတရားမှုတွေလုပ်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်ရဲ့လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ခွင့်ရဖို့ခက်ခဲနေတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ သူ့သဘောထားကိုသိသွားတဲ့ကာနယ်ကနောက်ဆုံးအနေနဲ့မစ်ရှင်တစ်ခုလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဒါကိုသဘောတူပြီးနောက်ပိုင်းဘာတွေဖြစ်လာမလဲ တစ်ဖက်မှာလည်းဒါရိုက်တာပုံဖော်ပြီးရိုက်ပြထားတဲ့ ဂေါ်ရဗ် ဆိုတဲ့ဝန်ထမ်းလေးတစ်ယောက်အကြောင်းလေးလည်းပြောချင်ပါသေးတယ် သူကတော့ ဘဝကိုအရှုပ်အရှင်းကင်းကင်းနဲ့ရိုးသားစွာဖြတ်သန်းချင်တဲ့သူပါကုမ္ပဏီမှာအလုပ်ကြိုးစားတယ်အိမ်ကောင်းကောင်းတစ်လုံးနဲ့နေချင်တယ် သာမန်နေထိုင်မှုလို့ပဲဆိုရမှာပါ မင်းသမီးကလည်းနာမည်ရေးပြစရာမလိုလောက်အောင် ဘောလိဝုဒ်ပရိသတ်တွေအကြိုက် ဇာတ်ကြမ်း/ အချစ်/အလွမ်း /ဟာသ ဘက်စုံရတဲ့သမီးတစ်လက်ပါ ဒီ character တွေစုပေါင်းလိုက်တဲ့ဇာတ်လမ်းအသွားအလာဘယ်လိုပီပြင်လာမလဲဆိုတာတော့ ဇာတ်ကားပြီးခါနီးလေးမှပဲသိရမှာပါ ဇာတ်အိမ်/ ဇာတ်ကြောင်း/ သရုပ်ဆောင်/ နောက်ခံသီချင်း အပြစ်ပြောရာမရှိအောင်ကောင်းတဲ့ ဇာတ်ကားလေးဖြစ်ပြီးဟာသလေးတွေလည်းပါဝင်ထားလို့ကြိုက်နှစ်သက်ကြမယ်လို့ ယူဆမိပါကြောင်း…….
mmbusticketBollywood ရုပ်ရှင်လောကမှာ နာမည်ကြီး သရုပ်ဆောင်တွေ အလှိုင်လှိုင်နဲ့ တခမ်းတနားတင်ဆက် ရိုက်းကူးတင်ဆက်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားတွေရှိသလိုနာမည်သိပ်မကြီး ဇာတ်ပို့ဇာတ်ရံအဆင့်သာသာပဲရှိတဲ့ သရုပ်ဆောင်အများစုနဲ့ ကုန်ကျစရိတ်နည်းနည်းသာ အကုန်ခံပြီး တင်ဆက်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားတွေလည်း ရှိပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ပဲ ရုပ်ရှင်ကားကောင်းတကားဖြစ်ဖို့ဆိုတာကုန်ကျစရိတ်တွေအများကြီးမလိုဘူးနည်းပညာအကူအညီမလိုဘူးလူအင်အားအမျာ
းကြီးမလိုဘူး ဇာတ်လမ်း ဇာတ်ညွှန်းကောင်းကောင်းနဲ့ စေတနာပါဖို့ပဲလိုပါတယ်ဒီလိုကားတွေက သက်သေပါပဲဘာနာမည်ကြီး သရုပ်ဆောင်မှမပါဘဲစရိတ်နည်းနည်းနဲ့ ကားကောင်းတစ်ကား ဖြစ်ကြောင်း ပြသနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဇာတ်လမ်းကို ပြောရမယ်ဆိုရင် အာရာက ကချေသည်မလေး အနာကလီရဲ့အကြောင်းပါပဲ
ကချေသည်ဆိုတာ သူတို့အိန္ဒိယမှာ ဘယ်လိုသတ်မှတ်သလဲဆိုရင် ပြည့်တန်ဆာနဲ့ ထူးမခြားနားပါပဲသူတို့ဖျော်ဖြေတဲ့သီချင်းတွေက လိင်စိတ်ကြွအောင် အသားပေးထားပြီး လာအားပေးကြတဲ့သူတွေကလည်း မူးမူးရူးရူးနဲ့ အော်ဟစ်ကခုန်နေကြတဲ့သူတွေပါပဲဘောက်ဆူးချသလိုနဲ့ ဟိုနှိုက်၊ ဒီဆွဲနဲ့ အဲဒီဒဏ်တွေကိုလည်း ခံရပါတယ်တနေ့တော့ ရဲစခန်းတစ်ခုမှာ ကပြဖျော်ဖြေတဲ့ပွဲမှာ ပွဲလာအားပေးတဲ့ VIPလို့ပြောလို့ရသူ ခရိုနီဘဲတပွေက မူးရူးနဲ့စင်ပေါ်တက်ပြီး အတင်းအဓ္ဓမဆွဲလားရမ်း
လား လုပ်ပါတယ်လူအများရှေ့မှာဆိုတော့ အနာကလီကလည်း ငြိမ်မနေဘဲ အဲဒီဘဲကို ပါးပြန်ချလိုက်ပါတယ်အဲဒီအချိန်မှာ ပြသနာပေါင်းစုံစ,တတ်တော့တာပါပဲအနာကလီတစ်ယောက် ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်မလဲဒီဘဲကရောဘယ်သူလဲ ဆိုတာကို ….
IMDb rating 8.6 ရရှိထားပြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ်က ထွက်ခဲ့တဲ့အချစ် နဲ့ ဘ၀ အခြေအနေ ဇာတ်ကြောင်းလွန်ဆွဲကြပုံကိုရိုက်ပြထားပြီး လူငယ်လေးတယောက်က မိမိဘဝအခြေအနေနဲ့အချစ်ရေး ၂ခုကြားထဲမှာ ဘယ်ဟာကို ရွေးချယ်ရမလဲဆိုတာကို
ဒွိဟဖြစ်ပုံကို ပညာသားပါပါ ရိုက်ကူးပြသပေးထားပြီးယခုခေတ်လူငယ်တွေ အတုယူကြည့်ရှူသင့်တဲ့ ဇာတ်ကားလေးတစ်ကားကိုတင်ဆက်ပေးခြင်ပါတယ်ဇာတ်လမ်း လေးကတော့ ယခုခေတ် ပါကစ္စတန်ကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့အစပြုထားပြီး သူ့ကောင်မလေးဟာ နိုင်ငံခြား လူနေမှုဘဝကို အထင်ကြီးသူတယောက်ပါတနေ့မှာ ကောင်မလေးက ကောင်လေးကို လက်ဆောင်ပစ္စည်းတစ်ခုဝယ်ပေးဖို့ပူဆာရာမှ ကောင်လေးက သူ့အဖေရဲ့ စကူတာလေးကို ရောင်းလိုက်ပြီး ဝယ်ပေးခဲ့ပါ
တယ်ဒီလိုနဲ့ အဲ့ကောင်လေးဟာ အိန္ဒိယ ကောင်လေးတစ်ဖြစ်လဲ Angrej နဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်မိပြီး ပါတီပွဲတစ်ခုမှာခင်မင်ခဲ့ပါတယ် ဒီလိုနဲ့ Angrej နဲ့ ကောင်လေးစကားပြောကြရင်း Angrej ကိုကောင်လေးက သူ့စကူတာပျောက်သွားတဲ့ အကြောင်းပြောပါတော့တယ် အဲ့မှာ Angrej က ကောင်လေးကို မင်းစကူတာက ပျောက်သွားတာမဟုတ်တဲ့ အကြောင်း ကောင်မလေးကို လက်ဆောင်ဝယ်ပေးလိုက်တာဖြစ်ကြောင်းပြောရင်းAngrej က သူ့ရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးကို ပြောပြပါတော့တယ်ကဲ ပရိတ်သတ်ကြီးရေ Angrej ရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးက လွမ်းမောစရာကောင်းမလားပျော်ရွင်စရာတွေနဲ့ ပြည့်နက်နေမလားဆိုတာကိုတော့ ပရိတ်သတ်ကြီးကပဲဆက်လက် ရှူစားကြည့်လိုက်ပါတော့ ဗျာ
ဒီတခါဘောလီဝုဒ်ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက် အက်ရှင်ခပ်ကြမ်းကြမ်းကားတစ်ကားတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ရုပ်ရှင်ကားကထွက်တာကြာပြီဆိုပေမယ့်စာဖိုင်အမှန်မထွက်သေးလို့ မတင်ပေးနိုင်ဖြစ်နေတာပါ အခုဟာကလည်းအမှန်ဆုံးလို့ထင်ရတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာဖိုင်ကို နားထောင်ကြည့်ပြီးအမှန်ဆုံးဖြစ်အောင်ရေးပေထားပါတယ် ဟန္ဒီ/အူရ်ဒူစကေးသိပ်မကောင်းတော့
အမှားတွေလိုအပ်ချက်တွေပါရင် သည်းခံပေးကြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံထားပါရစေ။—————————————————————————-ဇာတ်လမ်းကတော့ နီဟာဆိုတဲ့မိန်းကလေးတစ်ဦးဟာ သူ့သမီးလေးကို ကျောင်းသွားပို့ရင်းကလေးကို ပြန်ပေးဆွဲခံလိုက်ရပါတယ်။ အချိန်အတော်ကြာအောင် နည်းလမ်းမျိုးစုံနဲ့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်သူ့သမီးကို လုံးဝရှာမတွေ့ခဲ့ပါဘူး အဲ့ဒီအချိန်မှာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၄နှစ်ကျော်ကရည်းစားဟောင်း ရောနီဆီကိုအကူအညီတောင်းခဲ့ပါတယ် ရော်နီတစ်ယောက်
ကလေးလေးကို ရှာတွေ့မလား နီဟာဘာကြောင့်ရော်နီကို အကူအညီတောင်းခဲ့တာလဲ နောက်ကွယ်မှာ ဘာပြသနာတွေရှိနေမလဲဆိုတာပရိတ်သတ်ကြီးကပဲ ဆက်လက်ကြည့်ရှု့လိုက်ကြပါဦး#အက်ရှင်ခပ်ကြမ်းကြမ်းမှကြိုက်တဲ့လူူတွေလုံးဝကို လက်အလွတ်မခံသင့်ပါဘူး
mmbusticketIMDb 8.2/10 Rotten Tomatoes 86%Badhaai Ho (ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ပါတယ်) ဒီစကားလုံးကို ကြောက်လွန်းလို့ ပတ်ဝန်းကျင်ကနေထွက်ပြေးနေရသူ တစ်ယောက်ရှိပါတယ်သူ့နာမည်က နာခူ(လ်)ပါအသက်အရွယ်ရ ၂၀ ကျော်၊ ၁၅ နှစ်သာသာညီတစ်ယောက်ရှိတယ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ရည်းစားတစ်ယောက်ရယ်၊ တည်တည်တံ့တံ့ အလုပ်အကိုင်လည်း ရှိတယ် ဒါဖြင့် ဘာကြောင့်များ ပတ်ဝန်းကျင်က ဂုဏ်ပြုစကားကို ကြောက်နေရတာလဲဂုဏ်ပြုပါတယ်ဆိုတာက သူ့အနေအထားကိုလားဘာကို ဂုဏ်ပြုတာလည်းအဖြစ်ကတော့ ဒီလိုပါဗျာ …တနေ့ ၅၀ ကျော်၊ ၆၀ အရွယ်မိခင်ကြီး နေထိုင်မကောင်းဖြစ်လို့ ဆေးခန်းသွားပြရပါတယ်ဆေးခန်းမှ အိမ်ပြန်ရောက်တော့နာခူလ် – အမေ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဆရာဝန် ဘာပြောလိုက်လဲ အဖေအဖေ – ဆရာဝန်ပြောတာက၊ ဆရာဝန်ပြောတာကလေအိ်မ်ကို ဧည့်သည်တစ်ယောက် ရောက်လာမယ်တဲ့အငယ်ကောင် – ဧည့်သည်လာရင် သားအခန်းတော့ ပြောင်းမပေးနိုင်ဘူးနော် အဖေ၊ ကြိုပြောထားတာအဖေ – ဧည့်သည်သေးသေးလေးပါကိုယ်က ၂၀ ကျော်အရွယ်ရောက်နေမှ အသက် ၅၀ ကျော် အမေက ကိုယ်ဝန်ရှိနေတယ်ဆို ခင်ဗျားဘာလုပ်မလဲ မိတ်ဆွေဒီလောက်ပဲညွှန်းတော့မယ် ကောင်းမကောင်းကတော့ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွေသာကြည့်လိုက်တော့ Top Ten India Movies of 2018 မှာလည်း ပါဝင်ထားတယ်မိသားစုဇာတ်လမ်းဖြစ်တာနဲ့အညီ ဟာသ၊ ဒရာမာ ကောင်းကောင်းဇာတ်ကားတစ်ကားမို့ လက်လွတ်မခံသင့်ပါဘူ
ဒီတစ်ခါတော့ ဘောလီဝုဒ်ဖန်တွေအတွက် ၂၀၁၇ထွက် အလန်းစား တစ်ကားကို တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ #ဒီဇာတ်ကားက အက်ရှင်ဇာတ်ကား တစ်ကား မဟုတ်ပါဘူး #ဒီဇာတ်ကားက အနုအရွလေးတွေပါတဲ့ ဒရာမာကား တစ်ကား မဟုတ်ပါဘူး။ #နှစ်ချို့ဝိုင်လို စူးရှရှ ခပ်ပြင်းပြင်းနဲ့ တကယ့် အနှစ်တွေပါတဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကားပါ (ဝိုင်ဘယ်လို အရသာရှိလဲ မသိဘူးနော် :p) ဒီဇာတ်ကားဟာ ၁၉၄၇ ခုနှစ်မှာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန် အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကို အခြေခံရိုက်ကူးထားတာပါ။ ၁၉၄၇ ခုနှစ်မှာ အိန္ဒိယကို အုပ်ချူပ်နေတဲ့ ဗြိတိသျှနောက်ဆုံး ဘုရင်ခံဟာ အိန္ဒိယ နိုင်ငံကြီးကို အိန္ဒိယ-ပါကစ္စတန် ဆိုပြီး နှစ်နိုင်ကွဲထွက်သွားအောင် နှစ်ခြမ်းခွဲခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံကနေ အစစအရာရာဟာ နှစ်ပိုင်းဖြစ်ပြီး နယ်စပ်မျဉ်း နှစ်ကြောင်းရေးဆွဲကာ သံဆူးကြိုးတွေကာရံခဲ့ပါတယ်။ အရာရာကို နှစ်ခြမ်းခွဲခဲ့ပေမယ့် နယ်စပ်မျဉ်း နှစ်ကြောင်းလုံးပေါ်မှာ တည်ရှိနေတဲ့ အိမ်တစ်ခု ရှိနေပါတယ် အဲ့ဒါကတော့ #ဘေဂွန်ဂျမ်းရဲ့ ဆောင်ကြာမြိုင်ပါပဲ။ #ဘေဂွန်ဂျမ်းဆိုတာ ငယ်ဘဝကတည်းက ဒုက္ခကို မိတ်ဖွဲ့ပြီး ဘဝကို ဒေါင်ကျကျပြားကျကျ ဒူပေဒဏ်ပေခံလာသူ တစ်ယောက်။ #ဘေဂွန်ဂျမ်းဆိုတာ သတို့သမီးဘဝနဲ့ မွေးရပ်မြေက စွန့်ခွာသွားခဲ့ရပေမယ့် ကံကြမ္မာဆိုးကြောင့် ပြည်တန်ဆာခေါင်း တစ်ယောက်အဖြစ်နဲ့ ဇာတိကို ပြန်လာခဲ့ရသူတစ်ယောက်။ #ဘေဂွန်ဂျမ်းဆိုတာ ဥပဒေက သူ့ကို ပြန်ကြောက်နေရတဲ့သူ တစ်ယောက်။ #ဘေဂွန်ဂျမ်းဆိုတာ ဘုရင်ကိုယ်တိုင်က ကောင်းချီးပေးထားရသူ တစ်ယောက်။ အဲ့ဒီလို ဘေဂွန်ဂျမ်းလို လူမျိုးရဲ့ ဆောင်ကြာမြိုင်ဟာ နယ်စပ် စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေ ဆောက်လုပ်မှာမို့ မဖြစ်မနေ နှစ်ခြမ်းခွဲမှကို ဖြစ်လာတဲ့အခါ ဘေဂွန်ဂျမ်းနဲ့ ပြည်တန်ဆာ ၁၁ယောက် ဘယ်လို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းမလဲဆိုတာကတော့ ………့( ဇာတ်လမ်းကတော့ Age Rating က 15+လို့တော့ ပြောထားပေမယ့် ဇာတ်လမ်းထဲမှာ အသုံးအနှုန်းတွေ ကြမ်းပါတယ် တချို့ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေ လန်းပါတယ် မိသားစုနဲ့ ကြည့်ဖို့ ကိုယ်တိုင်အရင်ကြည့်ပြီးမှ ဆုံးဖြတ်ကြပါလို့ ???? )
GghjuBeyond the Clouds(2017) မှောင်မိုက်နေတဲ့ တိမ်တိုက်တွေရဲ့အလွန်မှာဘာတွေရှိနေသလဲ။နေရောင်ခြည်ပြပြလေးတော့ရှိနေမှာပဲ ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့အသက်ဆက်ရှင်နေရတဲ့ လူ့ဘဝကြီးကိုပေါ်လွင်အောင်ရိုက်ပြထားတဲ့ အိန္ဒိယကားကောင်းလေးတစ်ကားနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ဇာတ်လန်းလေးနာမည်ကတော့ Beyond the Clouds (2017)ပါ။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ … မွမ်ဘိုင်းမြို့ရဲ့လမ်းမတွေပေါ်မှာ ဆေးဝါးတွေကိုလိုက်လံပို့ဆောင်ပေးနေတဲ့ ကောင်လေး Amir… အကိုဖြစ်သူAmirကို ရဲလက်ထဲကနေကယ်တင်ဖို့ အကူအညီယူလိုက်ရတဲ့ Taara… Taara ကိုအကူအညီပေးရာမှ အခွင့်အရေးယူစော်ကားဖို့ကြိုးစားရင်း comaဖြစ်သွားခဲ့ရတဲ့ Akshi… ကိုယ့်ကိုထိပါးတဲ့လူကိုပြန်ခုခံခဲ့ရာကနေ Taari တစ်ယောက်ထောင်ကျဖို့ဖြစ်လာရပါတော့တယ်။ အဲ့အချိန်မှာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူသူတို့မောင်နှမ ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲ။ လုံးဝအမှောင်အတိဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာ ရောက်လာနိုင်စရာမရှိတဲ့ အလင်းရောင်လေးကရောရောက်နိုင်ပါ့မလားဆိုတာ ဆက်လက်ကြည့်ရှုဖို့တော်တော်လေးတန်တဲ့ကားလေးတစ်ကားပါ။
ဒီကားလေးကတော့ rating 7.7ထိရရှိထားတဲ့ Bollywood Action, dramaဇာတ်ကားလေး ဖြစ်ပါတယ် ဇာတ်ကားအစမှာတော့ Ra-oneကားလေးအကြောင်း စပြောထားတာပေါ့ Ra-oneကားလေး အားလုံးကြည့်ဖူးကြတယ်မလား မကြည့်ဖူးသေးရင် ဆက်ဆက်ကြည့်လိုက်ပါလို့ တိုက်တွန်းပါရစေနော် ဒီကားလေးကတော့နိုင်ငံရေးဆန်ပါတယ် တိုင်းပြည်ကြီးကလာဘ်စားမှုတွေပြည့်နေတဲ့သကာလပေါ့ အစိုးရရုံးတွေမှာဘာသွားလုပ်လုပ်ငွေမပေးရင် ဘာမှမလုပ်ပေးဘဲရစ်နေတဲ့အချိန်အဲ့မှာ မင်းသားတို့၃ယောက်ကဒါတွေကိုစိတ်ကုန်ပြီး တိုင်းပြည်ကိုပြောင်းလဲမယ်ဆိုပြီး အစီစဉ်တွေဆွဲခဲ့တယ် ဒါပေမယ့်လည်း သူတို့အရာရာမှာ အားနည်းတာကြောင့်အစီစဉ်ဖြစ်မမြောက်ခဲ့ဘူး အဲ့တော့ရှေးရိုးစွဲတဲ့ပုံစံပဲလုပ်ရတာပေါ့ Robin hoodပုံစံလေ ဝတ်စုံပြည့် မျက်နှာဖုံးနဲ့ ခပ်လန်းလန်းပစ္စည်းတွေသုံးမိုက်တယ်မလား အဲ့ထဲကရုံးတွေရစ်ချက်ဆိုပတ်စ်ပို့ထောက်ခံစာရဖို့ ၁လကျော်တယ် ပထမတစ်ခေါက်မင်းသားလာတယ်ကျွန်တော့်ကိုဒါလေးလုပ်ပေးပါတဲ့ မူရင်းဖိုင်လိုတယ် ဒီမှာပါ မင်းရဲ့မွေးရပ်ကရုံးမှာ သွားလုပ်မှရမှာ အာ့နဲ့သွားလုပ်ရတယ် နောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာတော့ ဆရာတောင်းထားတာရပြီ ဒါကိုလုပ်ဖို့ဆို မင်းအိမ်ကိုလိုက်စစ်ဆေးပြီး အတည်ပြုရမှာ ပြုပြီးပြီလေဗျာ မပြုရသေးပါဘူး အဲ့အရာရှိပြောတာတော့ မင်းအိမ်လာတော့သော့ခတ်ထားတယ်တဲ့ မခတ်ထားပါဘူးဗျကျွန်တော်နဲ့တွေ့ခဲ့ပါတယ်ရေတောင်ခပ်တိုက်လိုက်သေးတယ် ဟုတ်လား ဘာရေလဲ ရေခဲရေ အာ့ဆိုမင်းအိမ်မှာ ရေခဲသေတ္တာရှိတယ်ပေါ့ အဲ့လိုကိုရစ်တာဗျာ နောက်ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲသိချင်ရင်တော့ ဆက်ကြည့်လိုက်ပါတော့နော်
Bhoomi ဆိုတာ့ အာဂ်ရမြို့ရဲ့ ဖိနပ်ဆိုင်လေး တစ်ဆိုင်ရဲ့ နာမည်။ ဆိုင်ပိုင်ရှင်နာမည်က အာရွှန်ဆိုတဲ့ အသက်ကြီးပိုင်း လူကြီးတစ်ယောက် ဆိုင်နာမည်ကိုတော့ သူအချစ်ဆုံး မိတဆိုး သမီးလေးရဲ့ နာမည်ကို ပေးထားတာ Bhoomi ဆိုတဲ့ကောင်မလေးကတော့ ပညာတတ်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ အချောအလှလေး အဖေဖြစ်သူက ဖိနပ်ဆိုင်ပိုင်ပေမယ့် ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ်တယ် ချစ်သူကလည်း ရှိတော့ မကြာခင်မှာ လက်ထပ်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားတယ်။ သာသာယာယာ ဘဝလေးထဲကို ဝင်လာတဲ့ ပြသနာကတော့ ဗီရှဲလ့် အင်း့ ဗီရှဲလ်ဆိုတာ ဘူမီတို့ ပတ်ဝန်းကျင်က ရွယ်တူ ကောင်လေးတစ်ယောက့် ဘူမီကို ချစ်ခွှင့်အကြိမ်ကြိမ်ပန်ခဲ့ပေမယ့့် ဘူမီက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်လိုပဲ သတ်မှတ်ပြီး ငြင်းခဲ့တယ့် အယုတ်တမာ ဗီရှဲလ်က လက်မခံပဲ့ သူ့အစ်ကို ဝမ်းကွဲဖြစ်တဲ့ ဒိုလီဆီက အကူအညီတောင်းခဲတယ့် ဒိုလီ့ ” လွယ်လွယ်နဲ့နိုင်မယ့် ကစားပွဲတွေကို ငါဝင်မဆော့ဘူး အရှုံးဆိုတဲ့ အငွေ့အသက်ပါမှ အနိုင်ဆိုတာ ချိုမြိန်တာကွ့” ဒိုလာပူးရ်ရဲ့ လူဆိုးလူမိုက် ဖြစ်တဲ့ ဒိုလီရဲ့ အကူအညီနဲ့ ဗီရှဲလ်ဟာ ဘူမီကို မင်္ဂလာမဆောင်ခင်ညမှာ အုပ်စုဖွဲ့ အဓမ္မကျင့်လိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဒီညမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်တွေကို ဘာဖြစ်လို့ ဖြစ်နေမှန်း ရေရေရာရာ မသိခဲ့ဘူး သတိမေ့နေခဲ့တယ် သူကိုယ်သူ ဘာဖြစ်သွားလဲ သိပေမယ့် ဘယ်သူ့လက်ချက်လဲ မသိခဲ့ဘူး့ မင်္ဂလာဆောင်မှာ အားလုံးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြစ်နေပေမယ့် အသက်မဲ့နေတဲ့ ဘူမီဟာ သူ့ချစ်သူကို အကြောင်းစုံ ပြောပြခဲ့ပါတယ့် ဒီအချိန်မှာ ချစ်လှပါတယ်ဆိုတဲ့ ချစ်သူက မင်္ဂလာပွဲကို ဖျက်ပြီး ပြန်သွားလိုက်တော့တယ့် ရဲစခန်းမှာ အမှုဖွှင့် တရားရုံးထိရောက်ခဲ့ပေမယ့် တရားခံတွေကို ဖမ်းမိခဲ့ပေမယ့် သက်သေအထောက်အထား မပြနိုင်လို့ ပြန်လွတ်သွားခဲ့တယ် တရှက်က နှစ်ရှက်ဆိုသလို အရှက်ကွဲ အကျိုးနည်း ဖြစ်ခဲ့ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မျက်နှာမပြနိုင်အောင် ဖြစ်ခဲ့တယ် နောက်ဆုံး အာရွန်အနေနဲ့ လူယုတ်မာတွေကို သမီးအတွက် ကိုယ်တိုင်အပြစ်ပေးဖို့ ဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ့် (#သမီးတစ်ယောက် အပေါ်မှာထားတဲ့ အဖေတစ်ယောက်ရဲ့ မေတ္တာတရားကို အကောင်းဆုံး ဖေါ်ကြူးတင်ဆက်ထားပါတယ်။ ၁၅၀၀မေတ္တာနဲ့ ၅၂၈ရဲ့ ကွာခြားမှု၊ အရေးအကြောင်းဆို ကိုယ့်ဘေးမှာ ရပ်တည်ပေးနိုင်တာ ကိုယ့်မိဘပဲဆိုတာ အကောင်းဆုံး ပြသသွားပါတယ်။ မင်းသားကြီး ဆန်ဂျေးဒက် နဲ့ မင်းသမီး အဒီသီရာဟို ကလည်း အကောင်းဆုံး ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ အကြိုက်ဆုံးကတော့ လူယုတ်မာကောင်တွေကို အားရပါးရ နွှာတာပါပဲ့ #Bollywood ကားကောင်းကောင်းတွေ ကြည့်ချင်တယ်ဆို ဒီဇာတ်ကားကို လုံးဝ လက်လွတ်မခံပါနဲ့လို ပြောချင်တယ်။)
Drama မင်းသားကြီး အမီတာဘဂျမ်း ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့BLACK ကားဟာဆိုရင် ညီမတို့တွေ ဆယ်တန်းတုန်းက သင်ခဲ့ရတဲ့Hellen Keller ရဲ့ ဇာတ်လမ်းကို ပြန်လည်စိတ်ကူးယဉ်ပြီး ရိုက်ကူးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် ဒီဇာတ်လမ်းဟာ 2005 အိန္ဒိယနိုင်ငံ ရုပ်ရှင်လောကမှာ ဒုတိယဝင်ငွေအကောင်းဆုံးကားတစ်ကားအဖြစ် ရပ်တည်ခဲ့ပြီး2006 ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာလည်း အကောင်းဆုံး အမျိုးသား အမျိုးသမီး ဇာတ်ဆောင်ဆု၊ ဇာတ်ပို့ဆုနဲ့ အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ဆုတွေကိုလည်း ရရှိခဲ့တယ် နိုင်ငံတကာထိပါ ဆုတွေရပြီး အောင်မြင်မှုတွေရခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းကောင်းတစ်ပုဒ်ပါပဲ ထူးခြားချက်ကတော့ ပုံမှန် Bollywood ကားတွေလို သီချင်းဆိုပြီး ကတဲ့အခန်းတွေ မပါတာပါ မက်ဂ်နယ်လီ မိသားစုရဲ့ သမီးအကြီးဆုံးလေး မီရှဲလ်လေး (Rani Mukerj) လူမမယ်အရွယ်လေးမှာအပြင်းအထန်ဖျားနာပြီး အကြားအာရုံဆုံးရှုံးပြီးမျက်စိကွယ်သွားခဲ့ပါတယ် မီရှဲလ်ရဲ့ ဘဝဟာ ဘယ်အရာကိုမှ မမြင်ဖူးမကြားဖူးပဲဘာသံမှမကြားရတဲ့အမှောင်ထုကြီးထဲမှာ အဓိပ္ပါယ်မဲ့ အသက်ရှုင်နေရတဲ့ဘဝ မိဘတွေကလည်း ဒီလို Deaf-Blind ကလေးတစ်ယောက်ကို ဘယ်လိုပြုစုရမယ်ဆိုတာ မသိပဲ မီရှဲလ်ကို ရူးနေတယ်ထင်ပြီးစိတ်ကျန်းမာရေးဆေးရုံကို ပို့ဖို့တောင် ကြံနေကြပါတယ် အဲ့ဒီအချိန်မှာ နောက်ဆုံးမျှော်လင့်ချက်အနေနဲ့ မီရှဲလ်လေးကိုသင်ပေးဖို့ ဆွံ့အနားမကြားကျောင်းကဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ မစ္စတာဆာဟန် ကိုငှါးရမ်းလိုက်ပါတော့တယ် ဘာသံမှမကြားဖူးတော့ စကားဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုတာတောင်မသိပဲအပြုအမူတွေကအရမ်းရိုင်းစိုင်းကြမ်းတမ်းနေတဲ့ မီရှဲလ်ကို အမီတာဘဂျမ်းတစ်ယောက် ဘယ်လိုကြိုးစားပြီး ပြုပြင်မလည်း သာမာန်လူတွေတက်တဲ့ တက္ကသိုလ်ကို တက်ခွင့်ရအောင် မီရှဲလ်ဘယ်လိုကြိုးစားမလည်း အဲ့ဒီ့အချိန်မှာပဲ ဆရာဆာဟန်က အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါဝင်ပြီး အရာအားလုံးကိုမေ့သွားတဲ့အချိန်မှာ မီရှဲလ်တစ်ယောက် သူ့ဆရာကို ဘယ်လိုကယ်မလည်းဆိုတာ ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်ရဲ့ အောင်မြင်မှုတွေကိုရသပေါင်းစုံနဲ့ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်လို့ BLACK ကားလေးကို ညွှန်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်
ဒီကားကတော့အိန္ဒိယကားတွေကိုစောင့်မျှော်နေသူများအတွက် Comedy/Drama ဇာတ်ကားသစ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ Rating လည်း7.2 အထိရရှိထားပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဇာတ်ကားလေးပါ။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ သာမန်ရုံးလုaပ်ငန်းမှာလုပ်ကိုင်ရင်း အကြွေးတွေပတ်ချာလည်နေတဲ့ လင်ယောကျာ်းတစ်ယောက် မိသားစုအတွက် ရုန်းကန်ကြိုးစားနေတဲ့ လင်ယောကျာ်းတစ်ယောက်၊ အိမ်ထောင်ရေးမသာယာလင်ယောကျာ်းတစ်ယောက်၊ သူများမစားတဲ့အသီးကို ထိုးကျွေးခံလိုက်ရပြီးကိုယ့်အတွက်လည်းဘာမှအကျိုးမရှိဘဲ ဝဋ်ခံနေရတဲ့လင်ယောကျာ်းတစ်ယောက်ကို ဦးတည်ရိုက်ကူးထားတာပါ။ အိမ်ထောင်ရေးမသာယာတာကြောင့် အိမ်ကိုစောစောမပြန်ဖြစ်ပဲ ရုံးမှာအနေများတဲ့ Dav တစ်ယောက် ကိုယ့်မိန်းမနောက်မီးလင်းနေမှန်းသိရတော့ တော်တော်စိတ်ထိခိုက်သွားပါတယ်။ ဒီတော့ ဇာတ်ကားနာမည်အတိုင်းဒေးဗ်တစ်ယောက်လက်စားပြန်ချေဖို့ကြိုးစားပါတော့တယ်။ ဟာသလေးတွေနှောပြီး ရိုက်ကူးထားတဲ့အတွက် ရယ်လည်းရယ်ရပါတယ်။ ဇာတ်လိုက်မင်းသားရဲ့ထုံပေပေမျက်နှာပေးဟာလည်း ဇာတ်ရုပ်နဲ့အရမ်းပလဲနံသင့်ပါတယ်။ အားလပ်ချိန် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးကြည့်လို့ရတဲ့ ဇာတ်ကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ Dev တစ်ယောက် ဘယ်လိုအကွက်ချမလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ကြပါဦး။
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကို ပြောပြရရင်လူ့ဘဝအောက်ခြေနင်းပြားအောက် ပြည့်တန်ဆာမိခင်က မွေးဖွားလာတဲ့ လူတစ်ယောက်ရှိတယ် ။ သူအိပ်မက်က ဘယ်လိုနည်းနဲပဖြစ်ဖြစ် ချမ်းသာဖို့ပဲ ။ သူဟာ သူဌေးသိပ်ဖြစ်ချင်တယ် ။ တစ်နေ့ သူဖြစ်တဲ့သူဌေးဘဝကို ရဖို့ သူကြိုးစားနေတုန်းမှာပဲ ကလပ်တစ်ခုက အဆိုတော်မလေးအပေါ် သံယောဇဉ် ငြိတွယ်မိတယ် ။ အဲဒိ ကလပ်အဆိုတော်မလေးဟာ သူ့ဘဝလို မထူးခြားနား ဘဝကနေ လာတယ်ဆိုတာ သူသိသွားတော့ ကောင်မလေးအပေါ် အရာရာ ပေးဆပ်ချင်စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတယ် ။ ဒါပေမယ့်သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ ဆရာ နှစ်ဦးက အချင်းချင်း ယှဉ်ပြိုင်မှုတွေရှိနေတော့ သူတို့ နှစ်ဦးကြားက အနှောက်အယှက် နဲ့ ကြမ်းတမ်းတဲ့ခရီးလမ်း စိန်ခေါ်မှုတွေကို သူတို့ ဘယ်လိုရှင်းမလဲ ဆိုတာ အန္ဒိယရုပ်ရှင် ထုံးစံအတိုင်း အချစ် အလွမ်း အကြမ်း ဟန်မူရာမျိုးစုံနဲ့ ပုံဖော်ထားတတ်တော့ ရုပ်ရှင် ချစ်သူတွေအတွက်တော့ လက်မလွှတ်သင့်တဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ခုပါပဲ ။ အထူးညွှန်းချင်တာကတော့ချစ်စကား ကြိုက်စကား ပြောခန်းတွေမှာ အသေအချာ နှလုံးသားနဲ့ ခံစားသက်ဝင်ပြီး အထူးဘာသာပြန်ထားတဲ့အတွက် ရုပ်ရှင်ချစ်ပရိတ်သတ်များရဲ့ ရည်းစားကို အတုယူ ပြောပြလို့ရကြောင်း အာမခံပြောပြလိုက်ပါရစေ …..
ဒီနေ့တော့ IMDb 8.4 ရထားတဲ့ ဘောလိဝုဒ်ဇာတ်ကားကောင်းလေးတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် မင်းသားကလည်း ပရိတ်သတ်တွေကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ရှာရွတ်ခန် ပဲဖြစ်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းအညွှန်း ကာဘာရ်ခန် ဟာ အိန္ဒိယအမျိုးသားဟော်ကီအသင်းရဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးလည်းဖြစ်သလို နာမည်ကျော်ကစားသမားလည်းတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်..ပထမဆုံးမှာ အိန္ဒိယနဲ့ပါကစ္စတန်တို့ ကမ္ဘာ့ ချန်ပီယံ အမျိုးသားဟော်ကီပွဲကိုယှဉ်ပြိုင်နေကြတာပါ..နောက်ဆုံးမိနစ် ပင်နယ်တီမှာ ကာဘာရ်ခန် တစ်ယောက် လွဲချော်သွားလို့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပေမယ့် ပွဲပြီးတဲ့အခါ ပါကစ္စတန်က ကစားသမားတစ်ဦးကလာရောက်နှုတ်ဆက်လို့ရယ်ပြုံးနှုတ်ဆက်မိတာကို သတင်းထောက် တစ်ယောက်ကဓါတ်ပုံအတိအကျရိုက်ပြီး အမျိုးသားသစ္စာဖောက်ခဲ့တာလားဆိုတဲ့ နာမည်ဆိုးနဲ့ ဖွပါတော့တယ်..ဒီလိုနဲ့ ကာဘာရ်ခန် ဟာပြသနာတွေတက် ပြည်သူတွေကလည်း အမျိုးသား သစ္စာဖောက်အနေနဲ့ ဝိုင်းဝန်းစွပ်စွဲလို့ နေထိုင်ရတဲ့အိမ်ကနေတောင်ပြောင်းပြေးခဲ့ရပြီး နေရာခြားမှာသွားရောက်နေထိုင်ခဲ့ရပါတယ်..ဒီလိုနာမည်ပျက်တွေကြား…အရှုံးတွေကြား သူ့ဂုဏ်အပြင် အိန္ဒိယ နိုင်ငံရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ ပြန်တက်အောင်..ဘယ်လိုလုပ်မလဲ လူအများထင်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားသစ္စာဖောက် ဘဝကနေ ဘယ်လိုမျိုးရုန်းထွက်ကြိုးစားမလဲ ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကြည့်ရှုရမယ့် ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်
ဒီတခါတော့ Bollywoodပရိတ်သတ်တွေအတွက် အလန်းစား စတန့်တွေနဲ့ အက်ရှင်ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေးကို တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ ဒီကားတွေရဲ့ မင်းသား ဗီရွတ်ဂျမာဝဲလ်က စတန့်ခန်းတွေကို ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားသရုပ်ဆောင်ထားတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းကတော့ အိန္ဒိယစစ်တပ်ရဲ့ အထူးတပ်သားတွေဟာ လေ့ကျင့်ရေးဆင်းရင်း မုန်တိုင်းမိပြီး တရုတ်နယ်စပ်မှာ လေယာဉ်ပျက်ကျခဲ့ပါတယ်။ တပ်သားတွေထဲက ကရန်ဟာ တရုတ်စစ်တပ်ရဲ့ ဖမ်းစီးခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီး တရုတ်အစိုးရကလည်း သူ့ကို စပိုင်တယောက်လို့ထင်ပြီး အမျိုးမျိုးညဉ်းပန်းနှိပ်စက်ပြီး စစ်ကြောပါတော့တယ့် တဖက်မှာလည်း အိန္ဒိယအစိုးရက နိုင်ငံရေးပြသနာတွေတက်မှာစိုးလို့ သူ့ကို မကယ်တော့ပါဘူး့ တရုတ်လက်လွတ်မြောက်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ရတယ့် ကွန်မန်ဒို တပ်သားကရန်ဟာ နယ်စပ်မှာ ဂိုဏ်းစတားတယောက်လက်က ထွက်ပြေးနေရတယ့် မိန်းကလေးတယောက်ကို ကူညီပေးလိုက်ရင်း ပြသနာအကြီးအကျယ်တတ်ပါတော့တယ်။ ဂိုဏ်စတားတွေလက်ထဲက မိန်းကလေးကို ကရန်တယောက် ဘယ်လိုကယ်တင်မလဲဆိုတာတော့ ပရိတ်သတ်ကြီးပဲ ကြည့်လိုက်ပါတော့ အက်ရှင်ကြိုက် ပရိတ်သတ်တွေအနေနဲ့ လက်အလွတ်မခံသင့်ပါဘူး့
တည်ငြိမ်နေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ထည်ဝါလွန်းတဲ့ အိမ်တော်ကြီး တစ်ခုမှာ ထူးထူးခြားခြား ဆူညံပွက်လောရိုက်လာတယ် ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒေ့ဗ်ဒါးစ် ပြန်လာမယ်လို့ စာရေးလိုက်လို့ ဒေ့ဗ်ဒါးစ် ဆိုတာ ငယ်စဉ်ကတည်းက လန်ဒန်ကို ပညာသင်လွှတ်လိုက်တဲ့ ဒီအိမ်တော်ကြီးရဲ့ သခင်လေး သားကိုတွေ့ရတော့မှာမို့ ပျော်လွန်းလို့ မျက်ရည်ကျနေတဲ့ အမေ ဘာလုပ်လို့ ဘာကိုင်ရမသိဖြစ်နေတဲ့ အစေခံတွေ “ငါ့သားလေးကို ငါအရင်တွေ့ပါရစေ အားလုံး မျက်လုံးတွေ မှိတ်ထားပေးကြပါ “ ============================================ “နင် လန်ဒန်ကို ရောက်နေတော့ ငါ့ကို သတိရလား တစ်ခါမှ မရပါဘူး ငါ့မှာတော့ အကြိမ်ပေါင်း ၂၈၅၀ လောက်စာတွေ ရေးခဲ့တယ် နင့်အတွက် ရည်စူးပြီး ထွန်းညှိထားတဲ့ ဆီမီးတိုင်က ၈၇၆၀၀ နာရီလောက်ကြာအောင် တောက်လောင်နေတာ နင့်ကို သတိရတဲ့ တစ်ချိန်တော့ ရှိပါတယ်ဟာ ငါ့ အသက်တစ်ကြိမ် ရှုလိုက်တိုင်းမှာပေါ့” ****************************************** အမေဖြစ်သူမှာ အရင်တွေ့ချင်ပေမယ့် မြင်တွေ့ခွှင့်မရပဲ ဘေးအိမ်က ပါရိုစီကို အပြေးသွားခဲ့လေသူ ဒေ့ဗ် သားဖြစ်သူရဲ့ ဦးစားပေးမှုကို လုယူုခံလိုက်ရလို့ ပါရိုကို သမီးတစ်ယောက်လို ချစ်ပေမယ့် အမုန်းကြီး မုန်းခဲ့တော့တယ် လူကြီးချင်း မည်မျှပင် ရင်းနှီးခဲ့ပေမယ့် အဆင့်အတန်း ကွာခြားလွန်းလို့ သားဖြစ်သူကို ပါရိုနှင့် သဘောမတူကြောင်း လူလည်ခေါင်မှာ ပြောပြီး ပါရို အမေ့ကို ငြင်းလွှတ်လိုက်ပါတယ် လူလည်ခေါင်မှာ အရှင်ကွဲခံရလိုက်တဲ့ ပါရိုအမေက “ငါ့သမီးကို နင်တို့ထက် မြင့်တဲ့ မျိုးရိုး အဆင့်အတန်းပဲ ပေးစားပြမယ်” ============================================ “ငါတို့ အဆင့်အတန်း ငါတို့ မျိုးရိုးနဲ့ သူတို့နဲ့ တူသလားကွ ကျွန်တော်တို့ စားသောက်နေတဲ့ အစားအစာချင်း တူသေးတာပဲ မဟုတ်လား ရေထဲက ငါး နှင့် ကောင်းကင်ပေါ်က ငှက် ဘယ်လိုမှ အမျိုးမတော်နိုင်ဘူးကွ ကောင်းကင်ယံက နတ်ဘုရားတွေကိုတောင် လူတိုင်း ဆက်သွယ် ကိုးကွယ်နေကြတာပဲ မဟုတ်လား” ============================================ ဂုဏ်သိက္ခာ အဆင့်အတန်း နှင့် မာန ကြားက လွန်ဆွဲပွဲမှာ မြေစာပင် ဖြစ်ခဲ့ရတာ အချစ်စစ်တွေပဲ အချစ်ကြီး ချစ်ခဲ့သူ ပါရိုနဲ့ ချစ်လျှက်နဲ့ ဝေးခဲ့ရတယ် ကံကြမ္မာ အပြောင်းအလဲက မြန်လွန်းလှတယ် ဥပဒေဘွဲ့ရ ပညာတတ် တစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့ ဒေ့ဗ် က အချစ်နာကျ အရက်သမား ဒေ့ဗ် ဘဝကို ရောက်သွားခဲ့တယ် ============================================ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်က ဇနီးမယား အမေ ညီမအစ်မ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေ ဒီထဲကမှ မဟုတ်ရင် ပြည်တန်ဆာ တစ်ယောက်ပဲ မင်း တခြား တစ်ယောက်ယောက် ဖြစ်လို့ မရဘူးလား ချန်ဒရာ မူခီ “ ============================================ ဒေ့ဗ်ဒါးစ် ပါရို နှင့် ချန်ဒရာ မူခီ တို့ကြားက ချစ်ခြင်း မေတ္တာတွေကို ခံစားကြပါကုန် အသည်းနှလုံးမာ သူတောင် မျက်ရည်ကျ သွားစေရမည်လို့ ရဲရဲကြီး အာမခံပါတယ် ============================================ “အဖေက ရွှာကေနေ ထွက်သွားလို့ ပြောဖူးတယ် အားလုံးက ပါရိုကို စွန့်လွှတ်လိုက်လို့ ပြောတယ် ပါရိုက အရက်သောက်တာ စွန့်လွှတ်လိုက်ဖို့ ပြောတယ် ဒီနေ့ အမေက ဒီအိမ်ကို စွန့်လွှတ်လိုက်ဖို့ ပြောပြီ တစ်နေ့ကျရင် ဒီကောင်က ပြောလာလိမ့်မယ့် ဒီလောကကြီးကို ကျောခိုင်းသွားလိုက်တော့လို့ “ ============================================ ( Devdas ဇာတ်ကားဟာ SRK ရဲ့ အရည်အသွေးကို မှတ်ကျောက်တင်တဲ့ ဇာတ်ကားဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး သာမန် ရုပ်ရှင်တစ်ကားလို မဟုတ်ပဲ ဇာတ်လမ်းထဲကို စီးမျောသွားအောင် တင်ဆက်ထားလို့ လက်အလွတ်မခံသင့်ပါဘူးဗျာ )
Bollywood ဖန်တွေအတွက် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး တခွီးခွီး နဲ့ ဟားရမယ့် ဟာသ ကားကောင်း တစ်ကားနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။Cast တွေကတော့ မင်းသားကြီး Snajay Dutt, ဟာသကားတိုင်းလိုလို ပါနေကျ ဖြစ်တဲ့ Riteish Deshmukh , Arshad Warsi တို့က ဓိကပါဝင်ထားပြီး တကားလုံ နားချိန်မရအောင် ရယ်နေရမယ်ဆိုတာ အာမခံပါတယ်။ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ အလုပ်လက်မဲ့ ဘော်ဒါ လေးယောက်ဖြစ်တဲ့ Roy, Adi, Boman နဲ့ Madav တို့ဟာ တစ်နေ့ မှာ အက်ဆီးဒန့် ဖြစ်သွားတဲ့ လူတစ်ယောက်ကို ကူညီဖို့ သွားပေမယ့် ထိုသူက သူ့အခြေအနေ သူသိပြီး မသေခင်မှာ သူဖွက်ထားခဲ့တဲ ပိုက်ဆံ သန်း၁၀၀ ရှိတဲနေရာကို ပြောပြခဲ့တယ် သူငယ်ချင်းလေးယောက်ခွဲယူဆိုပြီးတော့ဒါပေမဲ့ ဒီလူက ရာဇဝတ်သားဖြစ်လို့ သူ့ကို လိုက်ဖမ်းနေတဲ့ ရဲနဲ့ သူတို့ ပက်ပင်းမိပြီး ပြသနာတွေ တက်လာပါတော့တယ် ဒိအချိန်မှာတော့
ဒီတစ်ခါတော့ နာမည်ကျော် ဘောလိဝုဒ် မင်းသားကြီး ရှာရွတ်ခန်းရဲ့ ကားကောင်းလေးတစ်ကားနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ဘိန်းမှောင်ခို ဂိုဏ်းခေါင်းဆောင် Don ကိုဖမ်းဆီးဖို့ အိန္ဒိယ ရဲဌာနမှ ရဲအုပ် De Silva ကိုတာဝန်ပေးအပ်ထားတာပါ။တစ်ဖက်မှာလဲ Don ဟာ ဂိုဏ်းကနေ ထွက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ လူယုံ Ramesh ကို သတ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့တော့ Ramash ရဲ့ ဇနီးလောင်းနဲ့ ညီမဖြစ်သူကလဲ Don ကိုလက်စားခြေဖို့ကြိုးစားကြပါတော့တယ်။တစ်နေ့တော့ Don နဲ့ရုပ်ချင်းချွတ်စွပ်တူတဲ့ Vijay ဆိုတဲ့မွမ်ဘိုင်းက ကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသွားချိန်မှာ Don အစစ်နဲ့အတု ဘယ်လိုဆက်စခန်းသွားသလဲဆိုတာ ဇာတ်လမ်းရဲ့အနှစ်ပါ။စရိုက်နှစ်ခုကို နှစ်ကိုယ်ခွဲပြီးသရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ရှာရွတ်ခန်းရဲ့ စကေးကတော့ အထွေအထူးထောက်ခံနေစရာလိုမယ်မထင်ပါဘူး။
ဒီကားလေးက IMDB 5.3 ရထားတဲ့ကားလေးပါမြန်မာလိုကတော့တစ်ခါတုန်းက ကျားတစ်ကောင် ရှိခဲ့သည်တဲ့ အိန္ဒိယ နဲ့ ပါကစ္စတန် သူလိျှုတွေကြားရိုက်ကူးပြထားတဲ့ဇာတ်ကားလေးပါ Tiger (ဆလက်မန်ခမ်း) ဟာအိန္ဒိယ အထူးစပိုင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီးRAW အဖွဲ့အစည်းရဲ့ လက်အောက်မှာ လုပ်ကိုင်ရသူဖြစ်ပါတယ်။ သူရဲ့လုပ်ငန်းမှာ ပါကစ္စတန် သူလျို ISIS များအားနှိမ်နင်းရမည်ဖြစ်ပါတယ် တစ်နေ့မှာတော့ သူ့ဆရာ goyi ရဲ့Mission အရ ပါကစ္စတန် ရဲ့အကြောင်းအစကို လိုက်ပြီး ရှာဖွေရတော့တယ် ဒီတစ်ခါမှာတော့ Tiger ဟာ ပရော်ဖက်ဆာ တစ်ဦးဆီ သွားပြီးပါကစ္စတန် သမိုင်းကြောင်းကိုစတင်စုံးစမ်းခဲ့ပါတယ် ထိုပရော်ဖက်ဆာမှာ မည်သူ့မှ တပည့်အဖြစ် လက်မခံခဲ့သလိုTiger ဟာလည်း ငြင်းပယ်ခံခဲ့ပါတယ် Tiger ဟာ တပည့်အဖြစ် လက်ခံပေးရန်အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားခဲ့ပြီးZoya ဆိုတဲ့မိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ် ဒီနေရာမှာတော့ zoya (ကတ်ထရီနာ ကေ့ဖ်)အကြောင်းလည်း ပြောပြချင်ပါတယ် Zoya ဟာ ပရော်ဖက်ဆာကို ပြုစုစောင့်ရှောက်နေသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီးအက သင်တန်းတစ်ခုမှာ တက်ရောက်နေသူပါ ဒီဇာတ်လမ်းမှာတော့Tiger. တစ်ယောက် ပရော်ဖက်ဆာ တပည့်အဖြစ်တွေ့ရဦးမည်လောပါကစ္စတန် သမိုင်းကြောင်းကို စုံစမ်းနိုင်မည်လောTiger နှင့် zoya တို့၏ ဘဝတို့ရှေ့ဆက် မည်သို့ဖြစ်နေမည်နည်း ဟုလျှို့ဝှက်ဆန်ဆန် မေးထုတ်ရမှာပါ Imdb 5.3 ရထားသည့်အတွက်အတော်အသင့် ကောင်းမွန်တဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းလို့ ပြောရမှာပါဒါကြောင့် channel. Myanmar ပရိသတ်ကြီးလည်းကြည့်ရှုုခံစားကြည့်ပါဦးလို့
ကဲ … အခုလိုအေးချမ်းလှတဲ့ မိုးရာသီလေးမှာ ဆွတ်ပျံကြည်နူးစရာ အချစ်ကားလေးတစ်ကားနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေဗျာ.. ဘောလီဝုဒ်ရဲ့ ခန်း(မ်) ၃ ခန်း(မ်)ထဲက နာမည်ကြီး တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ အမီးရ်ခန်း(မ်)နဲ့ အခုချိန်ထိ ချောဆဲ လှဆဲ မင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်တဲ့ ကာဂျိုလ်တို့က ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ကားကောင်းတကားလည်း ဖြစ်ပါတယ်.. သူ့ခေတ်သူ့အခါမှာ နာမည်ကြီး အောင်မြင်မှုတွေရခဲ့တဲ့အပြင် အခုထိလည်း လူကြိုက်များဆဲ ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်ပါတယ်… ဇာတ်ဝင်တေးချိုချိုလေးတွေ၊မှိန့်မေားစရာ နောက်ခံတေးဂီတ ၊ ရိုက်ကွင်းရှု့ခင်း ခပ်လှလှလေးတွေနဲ့ ဆွေးစရာ၊ လွမ်းမောစရာ ကြည်နူးစရာ အချစ်ဇာတ်ကားကောင်းလေး တစ်ကားလည်း ဖြစ်ပါတယ်… ဆုတွေအနေနဲ့လည်း ဘောလီဝုဒ်ရဲ့ အကြီးမားဆုံးဆုပေးပွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Filmfare Awards မှာ Best Actor (female) အဖြစ် ကာဂျိုလ် Best Playback Singer (Male) အဖြစ် Shaan Best Lyrics အဖြစ် Parsoon Joshi Zee Cine Awards မှာလည်း Best Actor (female) အဖြစ် ကာဂျိုလ် Best Playback Singer အဖြစ် Shaan တို့နဲ့ Screen Awards (2006) မှာ Best Playback Singer အဖြစ် Shaan စသဖြင့် ဆုပေါင်းများစွာရရှိခဲ့ပါတယ်… ရိုမှရိုချင်တဲ့သူတွေ ကြည့်လိုက်ကြပါဗျာ …. အကြိုက်တွေ့စေရမယ်ဆိုတာ ရဲရဲကြီး အာမခံပါတယ် ======================================== ဇူနီဆိုတဲ့မျက်မမြင်မလေးဟာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ ကရှ်မီးကိုယ်စားပြု လွပ်လပ်ရေးနေ့အခမ်းအနားအတွက် ကပြဖျော်ဖြေဖို့ ဒေလီကို သွားခဲ့ပါတယ်… ဒေလီရောက်တော့ ရီဟန်ဆိုတဲ့ ဧည့်လမ်းညွှန်တစ်ယောက်နဲ့ ဆုံခဲ့ပါတယ် မျက်မမြင် ဇူနီအတွက် ရီဟန် ရဲ့ပုံသဏ္ဍန်ကို သူငယ်ချင်းတွေဆီမေးခဲ့တယ်… သူငယ်ချင်းတွေ ပြောပြသလောက် ရုပ်ရည်ချောမောပြီး ကဗျာတွေစာတွေဖွဲ့နွဲ့တတ်တဲ့ မိန်းကလေးတိုင်းကြွေဆင်းလောက်သူ… ရှေရှည်မှာ အဆင်မပြေဘူးထင်ပြီး သူငယ်ချင်းတွေက ဇူနီရဲ့ ယိုင်နဲ့နေတဲ့ခံစားချက်ကိုသိလို့ တားခဲ့ကြတယ်…သူငယ်ချင်းတွေတားတဲ့ကြားထဲက ရီဟန်ကိုချစ်မိသွားခဲ့ပါတယ်… “မိန်းကလေးဆိုတာ ငါ့အတွက်မြို့တွေလိုပဲ မြို့တမြို့ကိုသွားလိုက်တယ် အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်သွားရင် နောက်တမြို့ကို ပြောင်းသွားလိုက်တယ် ငါ့အနားကိုမလာပါနဲ့ ဇူနီ … ဒီမုန်တိုင်းက မင်းဘဝကိုဖျက်စီးပစ်လိုက်လိမ့်မယ်” ဒါကတော့ အချစ်ကိုအယုံအကြည်မရှိ တဲ့ ရီဟန်ရဲ့ အယူအဆတွေပါဝင်တဲ့ ပြောစကားပါပဲ..ကိုင်း သူတို့ အဆင်ပြေမလား…ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲ ဆိုတာကိုတော့ခံစားကြည့်လိုက်ပါဦးဗျို့
Bollywood ပရိတ်သတ်တွေအတွက် Bollywood ရဲ့ အက်ရှင်မင်းသားကြီး ဂွျွန်အေဗရာဟင်ရဲ့ အလန်းစားရုပ်ရှင်တကားကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဘယ်လောက်လန်းလဲဆို IMDB မှာ 6.3 နဲ့ Rotten Tomatoes မှာ100% အပြည့်ပါပဲ့ ACP ရာက်ရှ်ဗါဒန်ဟာ မူးယစ်နှိမ်နှင်းရေးရဲအရာရှိတစ်ဦးဖြစ်ပြီး မူးယစ်ဂိုဏ်းအများစုကိုဖမ်းစီးဖို့ကြိုးစားနေသူတဦးပါ။ တနေ့မှာ အာရ်ဗင်ဆိုတယ့် လူတစ်ဦးရဲ့ သတင်ပေးမှု့နဲ့ မွန်ဘိုင်းမြို့က အဓိက မူးယစ်ဂိုဏ်းလေးဂိုဏ်းကို အပြီးနှိမ်နှင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အာရ်ဗင်ကလည်း မူးယစ်ရာဇာတစ်ဦးဖြစ်တယ့် ဗစ်ရှ်နူးရဲ့ အစီအစဉ်အတိုင်း တခြားဂိုဏ်းတွေအပြီးရှင်းသွားဖို့အကြံပါ့ တခြားဂိုဏ်းတွေ အကုန်ရှင်းသွားတယ့်အတွက် ဗစ်ရှ်နူးက ဈေးကွက်ကိုအဓိကချုပ်ကိုင်လာပါတော့တယ်။ ဒီအချိန်မှာတော့ ACP ရာက်ရှ်ဗါဒန် နဲ့ ဗရှ်နူးထိပ်တိုက်တွေ့ဖို့ ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ တချို့တချို့သော ဘောလီဝုဒ် ကားတွေလို လေပေါ်ဝဲအခန်းတွေလုံးဝမပါပဲ အလန်းစားအက်ရှင်တွေနဲ့တင်ဆက်ထားတယ့် ကားကောင်းတကားပဲ့ ACP ရာရှ်ဗါဒန်နေရာမှာ ဘောဒီတောင့်တောင့်မင်းသား ဂျွန်အေဗရာဟင်မ်က ပါဝင်ထားပြီး အဓိက ဗီလိန် ဗစ်ရှ်နူးနေရာမှာတော့ Commando ဇာတ်ကားထဲမှာ အက်ရှင်အလန်းစားတွေနဲ့ ပရိတ်သတ်အကြေိုက်တွေ့စေခဲ့တယ့် မင်းသား ဗီရွတ်ဂျမာဝလ်ကပါဝင်ထားပါတယ်။ အက်ရှင်ကြိုက်ပရိတ်သတ်တွေအတွက် လက်အလွတ်မခံသင့်တယ့် ဇာတ်ကားကောင်းတကားပဲ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ #တချို့ချို့အသုံးနှုန်းတွေက မှု့ခင်း/မူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ဆိုင်တာတွေပါတာကြောင့် ဘာသာပြန်လိုအပ်ချက်ရှိပါက ကြိုတင်တောင်းပန်အပ်ပါသည်။
mmbusticketဒီတစ်ခါမှာတော့စီအမ်ပရိတ်သတ်တွေအတွတ်ဘောလိဝုကားလေးတစ်ကားနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။Fukrey Returns (2017) ဆိုတဲ့ ဟာသကားလေးပါ။IMDb rating 6.8/10 ရထားတာဆိုတော့ဒီလောက်ကြီးညွှန်းစရာမလိုတော့ပါဘူး။ဒါပေမယ့်ဘောလိဝုပေါကားလေးတစ်ကားလို့လည်းသတ်မှတ်လို့တော့ရပါတယ်။ပေါကားဆိုပေမယ့်ဇာတ်လမ်းထဲမှာပြောတဲ့စကားလုံးတွေကမြန်မာပေါကားတွေလိုအောက်ပိုင်းပြက်လုံးတွေနဲ့ရူးတူးတူးစကားလုံးတွေမဟုတ်ပါဘူး။
မှာလည်းအကြွေးတွေပေးဖို့ရှိနေတော့ဒီရတနာတွေကိုရှာဖို့အကြောင်းဖန်လာပါတော့တယ်။ဒီရတနာတွေရဖို့ကိုတော့ဘယ်လိုဆက်ကြိုးစားမလဲဒီရတနာတွေကဘယ်လောက်တောင်အဖိုးတန်နေလဲဒီရတနာတွေကိုရောတကယ်ပဲရလာပါ့မလားဘယ်လိုအန္တရာယ်မျိုးတွေနဲ့ရင်ဆိုလာရမလဲ စတဲ့မေးခွန်းတွေကိုတော့ဇာတ်လမ်းအဆုံးမှာပရိသတ်ကြီးကအဖြေရှာတွေ့ကြမှာပါ။ဇာတ်လမ်းလေးကိုပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ကြည့်ရှုခံစားရင်းရယ်မောလိုက်ကြပါဦး (ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ့ဘာသာပြန်သူကတော့ ကိုနေမျိုးပါ)
ကဲ စာမမှန်ရင် မကြည့်ဘူး၊ကွာလတီမကောင်းရင်မကြည့်ဘူး ဆိုသူတွေအတွက်စာအမှန်နဲ့ ကွာလတီကောင်းကောင်းနဲ့ ရပါပြီ။ပထမဗားရှင်းမှာ စာမပါဘဲ ရုပ်ထွက်လည်းခုဗားရှင်းလောက် မကောင်းခဲ့ပါ။စာအမှန်ကို စောင့်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပင် တင်ပါတယ်။တေလဂူးမင်းသားချော ရမ်ချာရန်း အများအခေါ် ဘိုင်ရာဗာရယ်လို့ လူကြိုက်များတဲ့ မင်းသားရဲ့ ၂၀၁၉ မှာ ထွက်လာခဲ့တဲ့ကား ဆိုတာကို အထူးတလည် မိတ်ဆက်ဖို့ လိုမယ်မထင်ပါ။——————–
သိပ်ကို ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့ မိဘမဲ့ကလေး၄ယောက်မှာတနေ့တော့ ရထားလမ်းဘေးမှာ ကလေးတစ်ယောက် ကောက်ရခဲ့ပါတယ်။ရမ်ချာရန်းပါပဲ။သူ့ကို မွေးစားခဲ့တဲ့ ကလေး၄ယောက်ကိုအစ်ကိုကြီးတွေအဖြစ် သိပ်ကို ချစ်ရပါတယ်။အိပ်မပျော်ခင် နောက်ဆုံးတွေးတဲ့ အတွေးနဲ့မနက်အိပ်ယာထချိန် အစောဆုံး တွေးတဲ့ အတွေးတောင်သူတို့ လေးယောက် အဖို့ပါ။အဲ့သလောက်ကို ချစ်ပါတယ်။သူတို့လေးယောက်ရဲ့ ဇနီးတွေနဲ့ အတူရမ်းချာရန်ဟာ နေထိုင်ခဲ့တယ်။မိန်းမလား… ဟင့်အင်း
စိတ်မဝင်စား ပညာရေးလား … ဟင့်အင်း စိတ်မဝင်စားဘာဆို ဘာမှ မစဉ်းစားဘဲ အစ်ကို လေးယောက်အတွက်ပဲစဉ်းစားတတ်သူပါ။သူတို့အတွက်ဆို အသက်တောင်ပေးမလောက်ပဲ။တနေ့ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် အစ်ကိုနဲ့လတ်တလော မဲဝင်ပြိုင်မယ့် ပါတီဝင်တွေနဲ့စကားများရာကစ…ပြဿနာတက်ခဲ့ရမှာတော့…..ကဲ ကိုယ်တိုင် ခံစားရမယ့် အချိန် ရောက်ရှိခဲ့ပါပြီဗျာ။—————————–ဇာတ်ကားထွက်ခဲ့စဉ်မှာတော့ ဝေဖန်မှု အမျိုးမျိုးနဲ့ ကြုံခဲ့ရပေမဲ့ဒီမင်းသားကားကို မဖြစ်မနေကြည့်ချင်သူတွေ အများကြီးပဲဆိုတာ ယုံကြည်ပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းကို မညွှန်းခင် Rating လေးတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါဦး IMDB 9.0/10 တဲ့ဗျာ
ဒီကားကို စကြည့်ဖြစ်တုန်းကတော့ Tollywood ကားဆိုတော့ ထုံးစံအတိုင်း တစ်ချက်ထိုးလိုက်ရင် လေပေါ်ပျံတာတို့ အားအားနေကနေတို့ ဒါတွေပဲ ဖြစ်မှာပါလို့ ထင်ထားမိတာ
အမှားကြီးမှားတာပဲ အိန္ဒိယရုပ်ရှင်ကား တစ်ကားလို့တောင် မထင်ရက်ဘူး
ဒီကားကို Bollywood က Reboot ပြန်ရိုက်ဖို့အထိ မျှော်လင့်မိတယ်ဗျာ
ကောင်းလား မကောင်းလား မညွှန်းတော့ဘူး တန်းသာဒေါင်းလိုက်တော့
ဒေါင်းရကျိုးနပ်စေရမည်ဗျာ့ဒုစရိုက်ကားဆိုတော့ ကြည့်ဖူးနေကျ ရုပ်ရှင်ကားတွေလို မှောင်ခိုတွေလုပ် ရဲကဖမ်း ရဲကို ပြန်သတ် သူသေ ကိုယ်သေ ဒါမျိုးလာလိမ့်မယ် ထင်ထားတာ
ဒါရိုက်တာက အလှည့်အပြောင်းတွေနဲ့ Crime ကားကို Mystery ဆန်ဆန်လေး တင်ပြသွားတယ်ရဲနဲ့ရာဇာဝတ်ကောင်ကြားကို ယှဉ်ပြတဲ့ အခါမှာလည်း ရဲတစ်ယောက်ရဲ့သားဟာ ရဲဖြစ်သလို အဖေရိုးသားသလို သားဖြစ်သူကလည်း ရိုးရိုးသားသားနဲ့ အမှန်တရားရဲ့ ဘက်တော်သားပီပီ ပုံဖေါ်ထားပြီး
လူဆိုးလူမိုက်ကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ဆီက ၁ရာဖိုးသုံးပုဒ်တွေလို အထိုးခံခါနီး လူဆိုးပေါ်လာ
မိုက်ချင်ရင် စွတ်မိုက် ကြမ်းချင်ရင် စွတ်ကြမ်း မျက်နှာကြီးတွေ ရှုံမဲ့ထားပြီး ငါလူဆိုးပါဆိုတာ နဖူးမှာစာရေးထားသလို ဖြစ်နေအောင် လုပ်ထားမယ်လို့ မျှော်လင့်ထားတာ
အိန္ဒိယ ဒါရိုက်တာတွေညံ့ချက် လူမိုက်ရဲ့ ငယ်ဘဝတွေ ညီအစ်ကို သံယောဇဉ်တွေနဲ့ လူမိုက်မှာလည်း ဘဝရှိကြောင်းကို အချိန်ကုန်ခံတင်ဆက်ပေးထားသေးတယ် ?
နောက်ဆုံး အကြိုက်တွေ့မိတဲ့ စကားလုံးလေးတစ်ခုလည်း ပြောသွားသေးတယ်ဗျ” ဘဝဆိုတာ ငရဲထဲက ဟာသ တစ်ခု မဟုတ်လား “ဇာတ်လမ်းလေး နည်းနည်း ညွှန်းရအောင်Vikram – ရိုးသားပြီး တာဝန်ကျေပွန်တဲ့ ရဲတစ်ယောက် လူဆိုးမှန်သမျှကို အရှင်ဖမ်းဖို့ အခွှင့်ရေးရရက်တောင် Encoder ဆိုပြီး အသေတွယ်တဲ့ရဲငါလူဆိုးမှန်သမျှကို သတ်ပြီးတိုင်း ဘာကြောင့် အိပ်ပျော်လဲသိလား ငါသတ်လိုက်တဲ့ကောင်တွေဟာ အပြစ်ရှိတဲ့ကောင်တွေ ဖြစ်တဲ့အတွက်ရဲဆိုတာ
လူတစ်ယောက်ရဲ့ မျက်လုံးခြေအနေကိုကြည့်ရုံနဲ့ လူဆိုးလား လူကောင်းလား ခွဲခြားတတ်သင့်တယ်လူဆိုးမှန်သမျှကိုခြေရာခံလိုက်ပြီး သေပစ်တဲ့ Vikram ရဲ့ အဓိက ပစ်မှတ်ကVedha – လက်ဆလက်နပြင်းတယ် မိုက်တယ် မလိမ်ဘူး မညာဘူး မလှိမ့်တပတ် မလုပ်ဘူး ဗြောင်ရှင်း ဗြောင်ဗြင်းတဲ့လူစားကိုယ်တိုင် ရာဇဝတ်ကောင်ဖြစ်ပေမဲ့ ညီဖြစ်သူကို သူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတောင် မလာခိုင်းပဲ ပညာသင်ပေးထားတဲ့ လူစားတခြား မှောင်ခိုကောင်တွေက ကလေးတွေကို အသုံးချ
ပြီး ပစ္စည်းတွေ အရောင်းအဝယ်လုပ်တာကို မကြိုက်ဘူး အမြဲတန်း ပြသနာတတ်ရတဲ့ လက်မရွံလူစား (စကားလုံးနဲ့ မပြောဘူး လုပ်ရပ်နဲ့ပြသွားတယ် ? )အဲ့ဒီလို ဗီဒဟ် ဘယ်ရဲမှ သူ့ကို ဖမ်းဖို့မပြောနဲ့ အနံ့တောင် ခံလို့ မရတဲ့အကောင်က ရဲစခန်းကို ကိုယ်တိုင်လာပြီး အဖမ်းခံလိုက်တယ်
ဘာကြောင့်ပါလဲ့Vikram နောက်ဆုံး စီနင်းမှုမှာ ပစ်သတ်လိုက်တဲ့ အထဲမှာ သူ့ညီပါသွားလို့ပဲ
ဒုစရိုက်မှုတွေနဲ့ ဝေးဝေးမှာနေတဲ့ Vedha ရဲ့ညီ ဘာကြောင့် လူမိုက်တွေကြားထဲ အသတ်ခံလိုက်ရတာလဲ
ဘာကြောင့် သူရှိတဲ့နေရာကို ရဲတွေသိသွားတာလဲ့Vikram နဲ့ Vedha တို့ ထိပ်တိုက်တွေ့မှုက ဘာတွေ ဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုတော့” ကျူးလွန်တဲ့သူကို အပစ်ပေးမလား့ စေခိုင်းတဲ့သူကို အပစ်ပေးမလား “ #ဇာတ်ဝင်တေး အကြွကြီးကလည်း အားရစရာပါပဲ
U-Turn ဆိုတာ မြန်မာလိုပြောရင် “ဂငယ်ကွေ့” ပါ့။ ယာဉ်စည်းကမ်း လမ်းစည်းကမ်းထဲမှာ ဂငယ်ကွေ့မကွေ့ရတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်အဖြစ် U(ယူပုံစံ)ကို ကြက်ခြေခတ်ထားတဲ့အမှတ်အသားကို အသုံးပြုကြတယ်။ ဒီကားလေးကတော့ ကုန်းကျော်တံတား(မိုးပျံတံတား)တစ်ခုပေါ်မှာ ဖြစ်ပျက်တဲ့ အက်ဆီးဒင့်တစ်ခုအပြီး အဲ့ဒီတံတားပေါ်မှာ ဂငယ်ကွေ့ေကွေ့မိသူတိုင်း သေဆုံးကြလို့ အဲ့ဒီအကြောင်းအရင်းကို ရဲအရာရှိတစ်ယောက်နဲ့ သတင်းထောက်တစ်ယောက်တို့က လိုက်လံစုံစမ်း ဖော်ထုတ်တဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ရဲ အရာရှိ နာမည်က နာယာ့ခ်၊ သတင်းထောက်မလေး နာမည်က ရာချားနားတဲ့။ ရာချာနားက သူ့ရုံးနားက ကုန်းကျော်တံတားပေါ်က ယာဉ်စည်းကမ်းဖောက်ပြီး ဂငယ်ကွေ့ ကွေ့သူတွေကို လမ်းဘေးအဘိုးကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ အကူအညီနဲ့ လိုက်လံ စောင့်ကြည့်မှတ်သားနေသူပါ။ mmbusticket U-Turn ဆိုတာ မြန်မာလိုပြောရင် “ဂငယ်ကွေ့” ပါ့။ ယာဉ်စည်းကမ်း လမ်းစည်းကမ်းထဲမှာ ဂငယ်ကွေ့မကွေ့ရတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်အဖြစ် U(ယူပုံစံ)ကို ကြက်ခြေခတ်ထားတဲ့အမှတ်အသားကို အသုံးပြုကြတယ်။ ဒီကားလေးကတော့ ကုန်းကျော်တံတား(မိုးပျံတံတား)တစ်ခုပေါ်မှာ ဖြစ်ပျက်တဲ့ အက်ဆီးဒင့်တစ်ခုအပြီး အဲ့ဒီတံတားပေါ်မှာ ဂငယ်ကွေ့ေကွေ့မိသူတိုင်း သေဆုံးကြလို့ အဲ့ဒီအကြောင်းအရင်းကို ရဲအရာရှိတစ်ယောက်နဲ့ သတင်းထောက်တစ်ယောက်တို့က လိုက်လံစုံစမ်း ဖော်ထုတ်တဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ရဲ အရာရှိ နာမည်က နာယာ့ခ်၊ သတင်းထောက်မလေး နာမည်က ရာချားနားတဲ့။ ရာချာနားက သူ့ရုံးနားက ကုန်းကျော်တံတားပေါ်က ယာဉ်စည်းကမ်းဖောက်ပြီး ဂငယ်ကွေ့ ကွေ့သူတွေကို လမ်းဘေးအဘိုးကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ အကူအညီနဲ့ လိုက်လံ စောင့်ကြည့်မှတ်သားနေသူပါ။ စည်းကမ်းဖောက်သူတွေထဲကဆွန်ဒါးဆိုသူ သေကြောင်း ကြံစည်သွားချိန်မှာ ရာချာနားလည်း စိတ်ဝင်စားပြီးစည်းကမ်းဖောက်သူ စာရင်းနဲ့ တိုက်ကြည့်တော့မှ ဂငယ်ကွေ့ ကွေ့သူ မှန်သမျှ သေဆုံးကုန်ပြီဆိုတာ သိလိုက်ရပါတယ်။ ရဲစခန်းက ရာချားနားကို မသင်္ကာပါဘူး. . .။ သူ့အနားမှာ ရဲအရာရှိ နာယာ့ခ်ကို စောင့်ကြပ်စေပြီး စစ်လားမေးလားတွေ လုပ်လာပါတယ်။. . . ဇာတ်လမ်းအညွှန်းကိုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲ ရပ်ပါမယ်။ သေသွားကြတဲ့ သူတွေဟာကိုယ်တိုင် သတ်သေကြတာလား? တစုံတယောက် လက်ချက်လား? ရာချားနားဆိုတဲ့ သတင်းထောက်မလေးက သတ်လိုက်တာလား? ဒီလို အစဉ်လိုက် လူတွေ သေဆုံးနေရတာဟာနာယာ့ခ်ယူဆသလို သွေးရိုးသားရိုးအတိုင်းသေကြောင်းကြံစည်မှု သက်သက်ပဲလား. . . အဆုံးအထိ အားပေးလိုက်ကြပါဦး. . . ဝန်ခံချက်။ ။ဒီကားက Kannada စကားပြော ရုပ်ရှင်U TURN 2016 ရဲ့ Remake Version ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ။ ဒါကြောင့် 2016 ခုနှစ်က ထွက်ရှိခဲ့တဲ့U TURN ဇာတ်ကားကို ကြည့်ဖူးရင်ဒီကားနဲ့ အတူတူပါပဲ ခင်ဗျာ။ ။
Sulu Chnar _ အိမ်ထောင်ရှင်မတစ်ယောက် ၊ အိမ်မှုကိစ္စရပ်တွေမှာ စေ့ငှပြီး ခင်ပွန်းဖြစ်သူကို ဇနီးကောင်းတစ်ယောက်လို ၊ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကဲ့သို့ူ သတ်မှတ်ပြီးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဘဝကိုဖြတ်သန်းနေသူ ။ မူလတန်းအရွယ် ကလေးတစ်ယက်၏ မိခင် ။ ခင်ပွန်းဖြစ်သူရဲ့ အသိုင်းအဝန်း စူလိုချနားရဲ့အိမ်ကို မကြာဆိုသလို လာရောက်လည်ပတ်တတ်ပြီး သူတို့ အလုပ်အကိုင်အကြောင်းတွေကို ကြွားလုံးထုတ် စူလိုချနား မခံချင်အောင် မီးမွှေးကြတဲ့သူတွေပေါ့ ။ အသိုင်းအဝန်းမှာ သူမပညာမတတ်တာကိုဘဲ အမြဲ ရမယ်ရှာပြီး အပြစ်ပြောခံနေရတတ်သူ ၊ စူလိုချနားဟာ ဒီလိုအချိန်တွေမှာ နားထောင်ကောင်းကောင်းနဲ့ အမြဲတမ်းအငြိမ်နေသည်းခံတတ်သူတော့မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ခွန်းဆိုရင် ဆယ်ခွန်းပြန်ဆိုလိုက်ရမှ နေသာထိုင်သာရှိသူတစ်ယောက် အိမ်ထောင်ရှင်မ စူလိုချနားမှာ ကောင်းတဲ့အကျင့်စရိုက်လေးတစ်ခုက ဘယ်အလုပ်ကိုမဆို ငါလုပ်နိင်တယ် ဆိုတဲ့ ခံယူချက်လေးပါဘဲ ။ လင်ယောက်ျားဖြစ်သူ အရိူ့က် တစ်ယောက်တည်းဝင်ငွေနဲ့ ရပ်တည်နေတာကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းကကူညီဖြေရှင်းပေးချင်တဲ့ စိတ်လေးက စူလိုချနားမှာရှိနေတယ်။ စိတ်ထဲရှိတာတင်မဟုတ် အိမ်တစ်ဆောင်ရဲ့ လိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့ မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်း ပန်းကန် ခွက်ယောက်မကျန် တီဗီအဆုံး စူလိုချနား ဖြည့်ဆည်းထားတာချည်း ။ ယောက်ျားအသုံးစရိတ်နဲ့ အိမ်မှာထိုင်နေတဲ့ အိမ်ထောင်ရှင်မတစ်ယောက် _ ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ ဘယ်ကဝင်ငွေနဲ့ အိမ်တစ်ဆောင်ရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို ဘယ်လိုဖြည့်ဆည်းတာလဲ ? အဲဒီ့အတွက် စူလိုချနားမှာ နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။ သူ့ရဲ့နည်းလမ်းတွေကတော့ : – လွတ်လပ်ရေးနေ့ ပြိုင်ပွဲလို ပြိုင်ပွဲတွေမှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း – လက်ကမ်းအစီအစဉ်တွေရဲ့ ပြိုင်ပွဲတွေမှာ ပြိုင်ပွဲဝင်ခြင်း တို့ပါဘဲ။ ရေဒီယိုအစီအစဉ်တစ်ခုရဲ့ ပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာ ပြိုင်ပွဲဝင်ရင်း စူလိုချနား ဟင်းပေါင်းအိုးတစ်လုံးလက်ဆောင်ရလိုက်ပါတယ်။ ဒီဆုလက်ဆောင်ကို Radio Station မှာ သွားရောက်ထုတ်ယူချိန်မှာဘဲ မထင်မှတ်ဘဲ Radio Jockey ! တစ်ယောက်လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့ အလုပ်ခေါ်ဆိုင်းဘုတ်ကို စူလိုချနားမြင်ရာမှ Radio Station ဝန်ထမ်းများကို သူလုပ်နိင်ကြောင်း နားပူနားဆာလုပ်ရင်း အသံစမ်းသပ်ခွင့်ရရှိလိုက်ပါတော့တယ်။ စူလိုချနား ရဲ့အလုပ်ကတော့ တခြားမဟုတ်ပါ ညဘက်ပိုင်း အသံလွှင့် အစီအစဉ်မှာ ဝင်လာသမျှ အမျိူ းသားများရဲ့ Phone Call မှန်သမျှကို လက်ခံပြောကြားပေးရခြင်းပါ။ ဲ့Radio Jokey ! RJ တစ်ယောက်အတွက်လိုအပ်တဲ့ အရည်အသွေးတွေကတော့ – စကားပြောတဲ့အခါမှာ sexy ကျကျပြောဆိုနိင်ရမယ် – အထူးသဖြင့် အမျိူ းသားအများစုကို ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ အသံမျိူးဖြစ်နေရမယ်။ – မေးလာတဲ့အမေးအပေါ် ပရိယာယ်ဆင်ပြီး ပြောဆိုတတ်ရမယ် စတဲ့အချက်တွေပါဘဲ ။ တချိူ့က စိတ်အားဖြည့်မေးခွန်းတွေ မေးတတ်သလိုပရိယာယ်ဆင်ပြီး ရှောင်လွဲတတ်ဖို့ဆိုတာကလည်း RJ တစ်ယောက်ရဲ့ အရည်အချင်းတစ်ခုပါ။ အိန္ဒိယလို နိင်ငံမျိူ းမှာ ဒီလိုအလုပ်အကိုင်မျိူ းကို အိမ်ထောင်ရှိ အမျိူ းသမီး တစ်ယောက်အနေနဲ့ လုပ်နိင်ဖို့ဆိုတာဟာ အမှန်ဆိုရင်တကယ်မလွယ်တဲ့ ကိစ္စရပ်တစ်ခုပါ။ သို့ပေမယ့် စူလိုချနားဟာ အစစအရာရာ နာလည်ပေးတတ်တဲ့ ခင်ပွန်းကောင်းတစ်ယောက်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်မဟုတ်ပေဖူးလား။ Sulo Chana မှ Sulu သို့ အစီအစဉ်အမည် Tumhari Sulu … ( မင်းတို့အားလုံးရဲ့ စူလူးးး ) Ha~loo…. ခင်ဗျားတို့ ညဘက်ကို နှိုးကြားစေဖို့အတွက် ခင်ဗျားတို့အိပ်မက်တွေကို လှပအောင်လုပ်ပေးဖို့အတွက် ကျွန်မ.. ဆူလူးးး အသင့်ရှိနေတယ်။ နှလုံးသားခလုပ်ကိုနှိပ်ပြီး ဖုန်းဆက်လိုက်ပါ ကျွန်မနဲ့ စကားပြော ပြောမယ်မဟုတ်လားး ? ဆက်ရေးချင်ပေမယ့် ဒီတင်ဘဲရပ်လိုက်တာ အဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်။ ဆက်စပ်ပြီး တွေးလို့ရနိင်မယ်ထင်ပါတယ်။ အခုလိုအလုပ်မျိူ းရလိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ ခင်ပွန်းဖြစ်သူရဲ့ စိတ်အလှည့်အပြောင်း ။ လစ်လပ်သွားတဲ့ သူမရဲ့ သားသမီးအပေါ် ဂရုစိုက်မှု အခြေအနေ ။ အိမ်ထောင်ရေးအခြေအနေတစ်ရပ် ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ အပြစ်တင်ရှုံူ့ချမှုတွေကတစ်ဖုံ ဒီလိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အကျိူ းဆက်တွေကို Sulu တစ်ယောက် ဘယ်လိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမလဲ ? ။ အကျိူ းပြု ဇာတ်ကားလေးလည်းဖြစ်နေတာမို့ ဘယ်လိုနေရာလေးတွေမှာ အသိပညာပေး မက်ဆေ့ချ်တွေ ထည့်သွင်းသွားမလဲ ။? Tumhari Sulu ဇာတ်ကားဟာ Budget 17 Crore နဲ့ ရိုက်ကူးထားတဲ့ Small Budget Film ဇာတ်ကားလေးပါဘဲ ။ Small Budget Film ဆိုပေမယ့်လည်း Tumhari Sulu ဇာတ်ကားဟာ Award များစွာ ၊ Nomination များစွာ ရရှိဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်များ ဒီလို Small Budget Film လေးဟာ အောင်မြင်မှုများစွာ ဆွတ်ခူးရတာလည်း ဆိုတာကတော့ Tumhari Sulu ဇာတ်ကားကြည့်ပြီးမှသာ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါ။ ဒီဇာတ်ကားရဲ့ အဓိကသရုပ်ဆောင် Vidya Balam ဟာလည်း Tumhari Sulu ဇာတ်ကားနဲ့အတူ ၄ ကြိမ်မြှောက် Filmfare Award ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ Alia Bhatt ၊ Sri Devi တို့ကို နောက်ကောက်ချပြီး Vidya Balam Filmfare Award ဆွတ်ခူးခဲ့တဲ့ အပေါ်မှာလည်း ဒီဇာတ်ကားလေးကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာ သင်လက်ခံနိင်မယ်ဆိုတာသေအချာပါဘဲ ။
mmbusticket IMDb Rating – 8.8/10 Google user – 97% Rotten Tomatoes – 89% 19ရာစုခေတ် သိုက်တူးသမား သားအဖနဲ့ ဒဏ္ဍာရီလာ ဥစ္စာစောင့်ဘီလူးတို့ ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲ ” ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း ” ————————– “တွန်ဘာ့ဒ်”ဆိုတာ ရွာလေးတစ်ရွာရဲ့ နာမည်ပါ။ ဒီဒဏ္ဍာရီ ပုံပြင်ဟာ တွန်ဘာ့ဒ်ရွာမှာ အခြေပြုထားပါတယ်။ ခုနှစ်ကတော့ အစပိုင်းမှာ ၁၉၂၀ ဝန်းကျင်ပေါ့။ ဇတ်လမ်းမှာ စစချင်း ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်နဲ့ကျိန်စာသင့် အဖွားကြီးကို မြင်ရမှာပါ။ သူဟာ တချိန်က ဥစ္စာစောင့်မယ်တော်ရဲ့ဝမ်းဗိုက်အတွင်းက ရတနာတွေကို သွားယူခဲ့ရမှာ”ဟာစတာ”ဆိုတဲ့ ဥစ္စာစောင့်နတ်ဖုရားတစ်ပါးရဲ့ ကျိန်စာသင့်ခဲ့ပါတယ်။ ဟာစတာ ဆိုတာက မိခင်ဥစ္စစောင့် မယ်တော်ကြီးရဲ့ အချစ်ဆုံးသားဦးပါ။ ဟာစတာဟာ လောဘကြီးလွန်းတော့ရွှေငွှေအပြင် စားနပ်ရိက္ခာတွေပါ ပိုင်ဆိုင်လက်ဝားကြီးအုပ်ချင်တဲ့ ဥစ္စာစောင့်နတ်ဖုရားပါ။ တခြားနတ်ဖုရားတွေရဲ့ အမျက်ဒေါသတွေကြောင့်ဟာစတာဟာ ရွှေဒင်္ဂါးပြားတွေကိုသာ လက်ဝါးကြီးအုပ်ခွင့်ရခဲ့ပြီး မိခင်ဥစ္စာစောင့်မယ်တော်ကြီးရဲ့ ဝမ်းတွင်းမှာပဲ နှစ်ပေါင်းများစွာ နေထိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါတွေကို သိတဲ့ သူကတော့ ဆာကာဆိုတဲ့ ရွာသားကြီးပါပဲ။ ဆာကာဟာ ဖွားအေကြီးဆီက တဆင့်သိခဲ့ရပြီးဖွားအေကြီးကတော့ ကျိန်စာသင့်ကာ ဆာကာရဲ့ အပျော်မယား စောင့်ရှောက်မှုနဲ့ နေခဲ့ရပါတယ်။ ဟာစတာရဲ့ ကျိန်စာသင့်သူတွေဟာနှစ်ပေါင်းများစွာ အသက်ရှင်ပြီး ဝဋ်ဒုက္ခကို ခံကြရပါတယ်။ ဆာကာရဲ့ အပျော်မယား သားနှစ်ယောက်မှာ လောဘကြီးတဲ့ ဗီနာယက်ခ်ရာအိုဆိုတဲ့ သားကြီးဟာ ဒီရတနာတွေကို စိတ်ဝင်စားခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ၁၅နှစ်ကြာ မိခင်သေဆုံးပြီးချိန်သူကိုယ်တိုင် စံအိမ်ကြီးထဲကို ပြန်လာခဲ့ပြီးသေလုမျောမျော ခံစားနေရတဲ့ အဖွားအိုကြီးဆီက ရတနာတွေ ရှိတဲ့ နေရာကို သိခဲ့ရပါတယ်။ ဒီတော့… သူဟာ ရတနာတွေကို စတင်ရှာဖွေခဲ့ပါတယ်။ ရတနာတွေကို လွယ်လွယ်နဲ့ ရမလား? ကျိန်စာတွေကို ဘယ်လိုရှောင်တိမ်းမလဲ? သူတို့တွေ ဘယ်လို ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျရောက်မလဲ?စသဖြင့် … ရတနာသိုက် ရှာပုံတော်ကို စိတ်ဝင်စားဖွယ် ကြည့်ရှုရမှာပါ။ —————————————————- ဇာတ်လမ်းလေးဟာ လူသားတွေရဲ့ လောဘဇောကို ထင်ထင်ရှားရှား တွေ့မြင်ရစေပါတယ်။ အသက်အန္တရာယ် စွန့်ပြီး ယူထားတဲ့ ရွှေပြားတွေတောင်သုံးမကုန်ဖြစ်နေတာကိုဘယ်တော့မှ မကုန်ခမ်းတဲ့ ရတနာအိတ်ကိုအတင်း လုယူဖို့ ကြိုးစားလာကြတဲ့ သားအဖနှစ်ယောက်၊ ဒါပေမဲ့… သူတို့ မသိတဲ့ တစ်ချက် ရှိနေတာကိုတော့… ၊ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျမှုတွေလာတော့မယ်ဆိုတာတော့ဘယ်သူ သိနိုင်မလဲ? ဖခင်ရဲ့ စရိုက်တွေ သားဆီကူးစက်ပြီးသားရဲ့ လောဘကြောင့် ဝမ်းနည်းဖွယ် ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ သိုက်တူးသမားဇာတ်လမ်းဒဏ္ဍာရီ တစ်ပုဒ်ပါပဲလို့ ညွှန်းပါရစေ။
“Toilet”လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ပရိသတ်ကြီးပိုပြီးစိတ်ဝင်စားလာသလိုနည်းနည်းလည်းကြောင်သွားမယ်ထင်တယ်ဗျ မြန်မာလိုအဓိပ္ပာယ်ပြန်ရရင်တော့သန့်စင်ခန်း (သို့)ရေအိမ်ပေါ့ဗျာအရပ်အခေါ်တော့”အိမ်သာ”ပေါ့ ဇာတ်ကားနာမည်ထက်ပိုအံ့သြဖို့ကောင်းတာက အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာသန့်စင်ခန်းတစ်ခုကြောင့့်အစိုးရအထိဂယက်ရိုက်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာပါပဲ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ မန်ဂါဝန်ဆိုတဲ့ရွာတစ်ရှာမှာ ဓလေ့တစ်ခုရှိပါတယ် အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ မနက်အစောအာရုဏ်မတက်ခင် အမျိုးသမီးတွေစုပြီးလိုတာပါတီလို့ခေါ်တဲ့ရွာနဲ့ခပ်လှမ်းလှမ်းကိုရေအိမ်စုဝေးသွားကြတဲ့ဓလေ့ပါ အမျိုးသားတွေကတော့ကြုံရာကျပန်းပေါ့ဗျာ သူတို့ရဲ့အယူသည်းတဲ့ယဉ်ကျေးမှုရအိမ်တိုင်းမှာသန့်စင်ခန်းဆိုတာမရှိကြပါဘူး သန့်စင်ခန်းတွေကိုအိမ်ထဲမှာဆောက်ရင် နိမိတ်မရှိဘူး ညစ်ပတ်တယ် ရွံစရာကောင်းတယ်စသဖြင့်အယူအစွဲတွေနဲ့သမုတ်ထားကြတာပါ ရွာထဲက Akshay Kumar (Kesav)ကတော့စက်ဘီးရောင်းတဲ့သူပါ တစ်နေ့စက်ဘီးမှာတာသွားပို့ရင်း Jaya လို့ခေါ်တဲ့BCAကျောင်းသူ(ကွန်ပြူတာကောလိပ်ကျောင်းသူ)လေးတစ်ယောက်နဲ့ဆုံခဲ့ပါတယ် ဒီမိန်းကလေးနဲ့တွေ့မှသူ့ရဲ့နှလုံးသားဟာပြန်အသက်ဝင်လာခဲ့ပါတယ် သူဘာလို့ အသက်၃၆နှစ်ထိမိန်းမမရတာလဲဆိုတာတော့စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ပိုင်းပေါ့ဗျာ ဒီလိုနဲ့အသက်ကြီးပေမယ့်မပျက်စီးသေးတဲ့သူ့ရဲ့အချစ်တွေကနှလုံးသားကနေတစ်ဆင့်ပါးစပ်ဖျားကတော်ကီတွေအဖြစ်ရောက်လာလို့နောက်ဆုံးကောင်မလေးနဲ့ညားသွားပါတယ်( တကယ်တော့ချစ်တတ်ဖို့ပဲလိုတာပါဗျာ…..ငိငိ ) မင်္ဂလာဦးညမှာတင်အခက်တွေ့တာတစ်ခုက အစောကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့လိုတာပါတီပဲကောင်မလေးက ကီရှက်ဖ်နဲ့အိမ်မှာ သန့်စင်ခန်းမရှိတာမသိဘူးဗျ လူကလည်းပညာတတ်/ အယူမသည်းတဲ့သူ /ဒီလိုအပြင်ထွက်ပြီးကိစ္စဝိစ္စရှင်းရတော့မယ်ဆိုတော့သူလည်း ပျားတုတ်တော့တာပဲ ဒီလိုနဲ့အချစ်တွေပြည့်ဝနေတဲ့သူတို့ရဲ့အိမ်ထောင်ရေးက သန့်စင်ခန်းဆိုတဲ့ဗီလိန်ကြောင့်အချိန်ကြာလာတော့လည်းမကျေနပ်စရာတွေဖြစ်လာတာပေါ့ အရေးပေါ်အစီအစဉ်တွေနဲ့ ဖြေရှင်းခဲ့ပေမယ့်လည်းအဆင်မပြေခဲ့ပါဘူး နောက်ပိုင်း သူတို့လင်မယားကွဲရမယ့်အခြေအနေအထိဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ် ဒီသန့်စင်ခန်းမရှိတာနဲ့ပတ်သတ်ပြီး လင်မယားကွဲရတယ်လို့ပြောရင်ဘယ်သူယုံမှာလဲဗျာ သန့်စင်ခန်းမရှိတာများဆောက်လိုက်ပေါ့လို့ဖြေကြမှာပါ ဒီဇာတ်ကားလေးကြည့်လိုက်ရင်တော့ယုံသွားမှာအသေအချာပါပဲ ဒါပေမယ့်အဲ့ဒီသန့်စင်ခန်းလေးတစ်ခုဆောက်ရဖို့အရေးတစ်ဖက်ကလည်း မိန်းမ တဖက်ကလည်းရှေးရိုးစွဲနေတဲ့ရွာခံတွေနဲ့ကီရှက်ဖ်ရဲ့အဖေ ဒီကိစ္စတွေကြားမှာတိုင်ပတ်သွားတာက ကီရှက်ဖ်နဲ့ဂျာရာပေါ့သူတို့၂ယောက်ပေါင်းပြီးဒီလိုမှားယွင်းနဲ့အယူအဆရှေးရိုးအစဉ်အလာတွေကိုဘယ်လိုအတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းကြမလဲဆိုတာကတော့………………., ပညာပေးဇာတ်ကားဖြစ်သလို ဟာသ/ အချစ်/ အလွမ်းတွေပြည့်နှက်နေတဲ့ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကားပါ
Gold (သို့မဟုတ် ) အိပ်မက်အဟောင်းအအို အား တူးဖော်ခြင်း ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ကျွန်တော် မှတ်မိပါသေးတယ်။ ကျွန်တော့်အိပ်မက်ကို စတင်ဖြစ်စေခဲ့တဲ့1936 ခုနှစ်တုန်းကပေါ့ ။ ” ဘာလင်မြေပေါ်မှာ ဂျာမဏီကိုအနိုင်ယူပြီးသကာလ အိုလံပစ်ရွှေတံဆိပ်တွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ အိန္ဒိယဟော်ကီအသင်းသားတွေ။ ဒီအချိန်မှာ ယူနီယံဂျက်အလံကြီးကဖျတ်ဖျတ်လွင့်ရင်း မလွတ်လပ်သေးတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကို လှောင်ရယ်နေခဲ့တယ်။ ဒီအခြေအနေဟာ ဗြိတိသျှအိန္ဒိယလို့ခေါ်ဝေါ်ခံရတဲ့ ကျွန်တော်တို့အတွက်တော့ ကြီးမြတ်တဲ့ အောင်မြင်မှုအပြည့်အ၀ မဟုတ်ခဲ့ရပါဘူး ” ဒီမှာတင် ဂျူနီယာမန်နေဂျာ ဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော် Tupan Das နဲ့ ဟောကီအသင်းသားတွေဟာအိပ်မက်တစ်ခု ကို အတူတကွ မက်ခဲ့ကြတယ်။ ဒါဟာ လွတ်လပ်တဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံအဖြစ်နဲ့ အိုလံပစ်ရွှေတံဆိပ်ကို ပြန်ယူပြမယ်။ ပြီးရင် ြင်မ်သက်အနေအထားနဲ့ ဇာတိမာန် သီချင်းကို ဆိုကြမယ်။ ရင်ဘတ်ထဲက သုံးရောင်ခြယ် နိုင်ငံတော်အလံကို လွှင့်ထူမယ်။ ဒါပေမယ့်ဗျာ။ ကမ္ဘာ့စစ်တွေကြောင့် အိုလံပစ် ကို နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင် ဖျက်သိမ်းလိုက်ကြတယ်။ ဒီတော့ ကျွန်တော်ဟာ စိတ်လေရတယ်။ ကျွန်တော် အရက်တွေချည်း ဖိသောက်တယ်။ မိန်းမရဲ့လက်ဝတ်လက်စား တွေပါမကျန် ခိုးရောင်းပြီး အရက်သောက်ပစ်တယ်။ ဒါက ကျွန်တော်ဆိုးသွမ်းခဲ့တဲ့ အမှန်တရားတွေ ။ တစ်ဖက်မှာလည်း အမှန်တရားရှိပါတယ်။ ဒါကတော့ ကျွန်တော်ဟာ ဟောကီကို မြတ်နိုးပြီး နိုင်ငံကို ချစ်တတ်တယ် ဆိုတာပါပဲ။ တစ်နေ့မှာတော့ သတင်းစာဖြတ်ပိုင်းလေးတစ်ခုက ကျွန်တော့်ရင်ကို လှုပ်နှိုးလိုက်ပါတော့တယ်။ “1948 ခုနှစ် အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲအား လန်ဒန်၌ ကျင်းပမည် ” ဟာ …… ကျွန်တော် ပြန်ရပ်တည်ရတော့မယ်။ ကျွန်တော် ကြိုးစားရတော့မယ်။ ဒီတော့ ကျွန်တော် ဟာ ဟောကီအဖွဲ့အစည်း အကြီးအကဲ ဆီ သွားတယ်။ အိန္ဒိယ အသင်းကို ကျွန်တော်ဦးစီးပါရစေ ဆိုပြီး တောင်းခံတယ်။ သူကလည်း အခွင့်အရေး ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အတွက် ပျော်စရာကောင်းတဲ့ အနေအထားတွေပဲဗျာ။ အဲ့ဒီနောက် ဟော်ကီကစားသမား ဟောင်းတွေကို ပြန်စုတယ်။ မျိုးဆက်သစ်တွေကိုလည်း လက်တွဲခေါ်ပြီးရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ တစ်ယောက်ချင်းရဲ့ အလေးသာမှု တွေကို ကြည့်ပြီး လေ့ကျင့်ခဲ့တယ်။ ဒါ့ကြောင့်လန်ဒန်မြေက ရွှေကို အမိမြေဆီသယ်လာဖို့ ကျွန်တော်တို့ စိတ်ပြင်းပြနေခဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ လောက ဟာ အချိုးအကွေ့တွေသိပ်များတယ်။ ပြုံးခါနီးမှ ငိုရမယ့် မျက်လုံးတွေ ကို ပြန်ငှားရတယ်။ သိပ်ကို အထာကျတဲ့ ဒုက္ခပြက်လုံးတွေပေါ့ဗျာ။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကို အိန္ဒိယနဲ့ ပါကစ္စတန်ဆိုပြီး ခွဲကွာစေလိုက်ကြတဲ့အခါမှာတော့ ကျွန်တော်တို့လည်း ……………? ကဲ ………ဘယ်လိုဖြစ်သွားကြမှာလိမ့် ။ __________________________ ဇာတ်ကား သို့ချဉ်းကပ်ခြင်း •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ကျွန်တော်အနေနဲ့ ဒီဇာတ်ကားကို ချဉ်းကပ်ကြည့်ရရင် အင်မတန်မှ ရည်ရွယ်ချက် ကောင်းမွန်လှတဲ့ ဇာတ်အိမ်ဟုသာ ဆိုလိုက်ချင်ပါတယ်။ လွတ်လပ်ရေးမရမီ နိုင်ငံသားတစ်ယောက်ရဲ့ ခံယူချက်တွေ / အချုပ်အနှောင်ကင်းတဲ့ သုံးရောင်ခြယ်အလံတလူလူနဲ့ အမျိုးသားရေးစိတ်ကို အနုပညာနဲ့ဖော်ကျူးသွားခဲ့ပါတယ်။ အားကစားဖက်ကို ရိုက်ကူးပြရာတွင်လည်း ဟန်ပြ ထက် သေချာလေ့ကျင့်စေပြီးမှ အသက်ဝင်စေခဲ့ပါတယ်။ ဟောကီ စစ်သည်တော်ကြီး Sandeep Sigh ကို ခေါ်ယူ သင်ကြားပေးစေပြီးမှ ပီပြင်စေခဲ့တာပါ။ Sandeep Sigh ဆိုတာကလည်း Soorma ဇာတ်ကားထဲက ဟောကီဂန္တဝင်။ အောက်ပိုင်းသေပြီးမှ ဟောကီကွင်းထဲ ပြန်ရောက်ခဲ့တဲ့ စစ်သည်တော်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီဇာတ်ကားဟာ အားကစား အရည်အသွေးမနိမ့်ပါဘူး။ ဟော်ကီကစားသမား ချင်းကြားက စည်းလုံးမှုတည်ဆောက်ပုံတွေကလည်း အားကျဖို့ကောင်းလှပါတယ်။ ဒါ့ပြင် ဒီဇာတ်ကားရဲ့ နောက်တစ်ကွက်က #မတ်ခ်တွန်း ပြောခဲ့တဲ့ စကားလေးအတိုင်းပါပဲ ။ ( သေနတ် ဇာတ်ဝင်ခန်းကို အရှေ့မှာပြသခဲ့ရင် နောက်ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေမှာ ပစ်ကို ပစ်ပြရပါမယ် ) -မတ်ခ်တွန်း ဒီ Gold ဇာတ်ကားမှာတော့ မထင်မှတ်ထားတဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းက ဇာတ်သိမ်းခန်းအထိ အရေးသိပ်ကြီးခဲ့ပါတယ်။ သိပ်ကို ထောင့်စေ့မှုရှိတဲ့ ဇာတ်ညွှန်းတစ်ခုပါပဲ။ အချုပ်ဆိုရရင် ဒီဇာတ်ကားဟာ ဖြစ်ရပ်မှန် အဖြစ်အပျက်များကို အခြေပြုရင်း စိတ်ကူးစိတ်သန်းစုံလင်စွာ ပေါင်းစည်းမှုတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဖြစ်ရပ်မှန် အပြည့်အ၀ မဟုတ်သော်ငြားလည်း ၁၂ နှစ်ကြာမှရရှိခဲ့တဲ့ ရွှေတံဆိပ် ဟာ အခုထိ အရောင်တလက်လက် ဖြစ်နေခဲ့ပါတော့တယ်။ ဒါဟာ အိပ်မက်အဟောင်းအအို လေးမှဖြစ်တည်လာသော စည်းလုံးခြင်းမှသည် လုံးဝလွတ်လပ်သော အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတိုင်းရဲ့ တူညီသော အိပ်မက်တစ်ခု ရှင်သန်ပေါက်ဖွားခဲ့ခြင်းသာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ဟု ထင်မြင်ရင်း ………။ #linnkhayan ရုပ်ရှင်အညွှန်းကို Linnkhäyañ မှတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်
မွေးရပ်မြေနေရာဟောင်းဆီ ကို ပြန်လာကြတဲ့ ဂိုပဲလ်၊ မာဒက်ဗ်၊လပ်ကီး၊ လက်စ်မန်ပရာဆပ်နဲ့ လက်စ်မန်တို့ဟာ အသစ်ပြန် လည်မွမ်းမံထားတဲ့ မိသားစုပိုင်အိမ်ကြီးမှာ နေကြပါတယ်။ ဂိုပဲလ်တို့မှာ ကလေးဘဝကတည်းက မတည့်ကြတဲ့ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရှိပြီး အရွယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်ထိ မတည့်ကြဘဲ ပြန်ရောက်လာတဲ့ ဂိုပဲလ်တို့နဲ့ တွေ့တာနဲ့ကို ရန်ဖြစ် ကြပါတော့တယ်။ တစ်ရက်မှာတော့ ဂိုပဲလ် တစ်ယောက် အိမ်ကြီးမှာနေရင်း ထူးဆန်းတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကြုံ ရလို့ တခြားသူတွေကို ပြောပြပေမယ့် ဂိုပဲလ်ကို တစ်ယောက်မှ မယုံပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ နောက်တော့ အိမ်ကြီးထဲက ဆန်းကြယ်မှုတွေကို အကုန်ကြုံရတဲ့အခါမှာတော့ အ ခြောက်အလှန့်တွေရှိ တယ်ဆို တာ သဘောပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါနဲ့ သရဲတစ္ဆေတွေမောင်း ထုတ်ဖို့ဆိုပြီး ဆရာတွေ မျိုးစုံခေါ် လုပ်ပေမယ့် ထူးခြားမှုမရှိဘဲ အ ခြောက်အလှန့်မျိုးစုံနဲ့သာ ကြုံရပါတယ်။ ဂိုပဲလ်တို့ရဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကို ဟာသဇာတ်ကွက် လေးတွေနဲ့ တင်ဆက်ထားတာမို့ ရယ်မောရဦးမှာပါ။ အိမ်ကြီးထဲက အခြောက်အ လှန့်တွေနောက်ကွယ်မှာ ဘယ်လိုအကြောင်းရင်းတွေရှိနေလဲ၊ ဂို ပဲလ်တို့အဖွဲ့က ဒီပြဿနာကို ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေနဲ့ ရှင်းထုတ်မှာလဲဆိုတာတော့ ဘောလိဝုဒ်ဇာတ်ကားတွေရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ကကွက်အလှ၊ ရိုက်ချက်အလှတွေနဲ့အတူ ဆက်ကြည့်ဖို့ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ပါဝင်ထားသူတွေကတော့ Ajay Devgn၊ ParineetiChopra၊ Tabu ၊ Arshad Warsi၊ Tushar Kapoor၊ ShreyasTalpade၊ Kunal Khemu စသူတွေဖြစ်ပါတယ်။
သာမန်လူတန်းစား တူနှစ်ကိုယ် ဘဝတစ်ခု၊ဒီနေ့ ရှာ ဒီနေ့စားရတဲ့ လက်လှုပ်မှ ပါးစပ်လှုပ်ရတဲ့ အကြင်လင်မယားနှစ်ယောက် အကြောင်းလေးပေါ့ဗျာ။ မိဘတွေနဲ့ အတူနေနေပြီး သားသမီး မရှိသေးတဲ့ သူတို့ နှစ်ယောက်။ အိမ်ရှင်မက အိမ်အလုပ်တွေကို တနေကုန်လုပ်ပြီးလင်ယောကျ်ားကတော့ နေ့စဉ် အလုပ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂလိက အပ်ချုပ်စက်ဆိုင် ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ပါ။ ဒီနေ့မှာ အဆင်ပြေပေမဲ့ မနက်ဖြန် ဘာဖြစ်မလဲ မသိရတဲ့ လူသားတွေမို့အနာဂတ်အတွက် ပြင်ဆင်ထားခြင်း မရှိခဲ့။ တနေ့မှာ ဆိုင်ပိုင်ရှင်သားရဲ့ မင်္ဂလာဆောင်ကိုသူတို့မိသားစုတွေ ဖိတ်ကြားခံခဲ့ရပါတယ်။ မိသားစုတွေ စုံစုံလင်လင်နဲ့ ပွဲကိုရောက်သွားတော့အမြဲအနိုင်ကျင့်တတ်တဲ့ သူတို့သားကခွေးလို သရုပ်ပြခိုင်းပါတယ်။ မိသားစုတွေနဲ့အတူ ဇနီးမယားကကိုယ့်ယောကျ်ား ခွေးလို သရုပ်ဆောင်နေရတာကိုမြင်တော့ အရှက်ရပြီး အလုပ်က ထွက်ခိုင်းပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ အလုပ်အကိုင် မရှိတဲ့အချိန်…..သူတို့တွေ ပြဿနာကို တစ်ခုကို ရင်ဆိုင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ဒီပြဿနာကိုသူတို့ ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ကြမလဲ။ မုန်းတိုင်းတစ်ခုသာဆိုရင်မုန်တိုင်းပြီးရင် လေပြေလာဦးမှာပေါ့? ဘဝအခြေအနေအရ ကြုံတွေ့ရတဲ့ ပြဿနာတွေကိုဘယ်လို ရင်ဆိုင်ကြမလဲ ဆိုတာကို ခံစားကြည့်ကြပါဦးဗျာ။ “အပ်နှင့်အပ်ချည်:အိန္ဒိယတွင်ပြုလုပ်သည်”ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားနာမည်အရသူတို့ကို ပြဿနာတွေထဲက အပ်နဲ့အပ်ချည်ကြိုးကဘယ်လို ဆွဲတင်ကယ်မလဲဆိုတာကိုကြည့်ရှုရင်း သန္တရသနဲ့ အဆုံးသတ်စေမှာပါ။ ———————————————- သရုပ်ဆောင်တွေကတော့ ဘောလိဝုဒ်မင်းသားချောVarun Dhawan နဲ့သရုပ်ဆောင်ကောင်းတဲ့ မင်းသမီးချောထဲကAnushka Sharma တို့ကအဓိကပါဝင် သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ ဘဝသရုပ်ဖော် ဒရာမာဇာတ်လမ်းတစ်ခုမို့ဒရာမာကြိုက်နှစ်သက်သူများ အကြိုက်တွေ့စေမယ့်ဇာတ်ကားတစ်ကားပါ။
ကြည်လင်တောက်ပပြီး စာအမှန်နဲ့ ခုမှ ထွက်လာလို့ဘာသာပြန်ပြီး တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားကို “ဝန်ကြီးချုပ်မင်းသား”လို့ အများခေါ်တဲ့မင်းသားကြီး Mahesh Babu အဓိက ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပြီးခေတ်အခြေအနေ တစ်ခုကို အခြေခံ၊လူတွေရဲ့ အယူမှားတဲ့ စိတ်ကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းရိုက်ပြထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားပါ။ <ဇာတ်လမ်းအညွှန်း> ရှီဗာဟာ NGO ထောက်လှမ်းရေးအရာရှိတစ်ယောက်ပါ။ သူအလုပ်က အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ပြောဆိုနေကြတဲ့Conversationတွေကို ကင်းထောက်ပြီး၊ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတွေမှာ အကူအညီလိုအပ်ကြောင်းသတိပေးချက်မြည်ရင် ဝင်နားထောင်ပြီး လိုအပ်သလို ကူညီဖို့ပါ။ တနေ့မှာ သူဟာ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု တစ်ခု နားထောင်ခဲ့ရပါတယ်။ မိန်းကလေးတစ်ယောက် အိမ်မှာ တစ်ယောက်တည်းဖြစ်နေချိန်သူ့သူငယ်ချင်းမလေးကို အတူလာအိပ်ပေးဖို့ ခေါ်တဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု တစ်ခုပါ။ ရှီဗာဟာ အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့ မိန်းကလေးဆီသူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ရဲမေကို သွားစောင့်ရှောက်ပေးဖို့ အကူအညီတောင်းခံလိုက်ပါတယ်။ မနက်မိုးလင်းတော့ ထင်မှတ်မထားတဲ့ လူသတ်မှုကြီး တစ်ခုကိုကြားခဲ့ရပါတော့တယ်။ ရက်စက်စွာ သတ်ဖြတ်သူ တရားခံကို စုံစမ်းရှာဖွေရင်းအန္တရာယ်အမျိုးမျိုး ရင်ဆိုင်ပြီး မိသားစုအတိုင်းအတာထိအန္တရာယ်ကို ကြုံတွေခဲ့ရပါတယ်။ လူသတ်သမားနဲ့ NGO အေးဂျင့် ရှီဗာတို့အပြိုင်အဆိုင် အားပြိုင်ရာမှာကြောက်မက်ဖွယ် ရာဇဝတ်မှုတွေကို ဖန်တီးသူ ဘိုင်ရာ့ဗ်ဟာ သူ့ရာဇဝတ်မှုတိုင်းမှာ ရက်စက်သလောက် သေသပ်ပိရိလွန်းသူပါ။ အဲ့ဒီလို ရာဇဝတ်သမားကို အစိုးရတရားဝင်မဟုတ်တဲ့ထောက်လှမ်းရေးအရာရှိ ရှီဗာက ဘယ်လို အနိုင်ယူမလဲဆိုတာကို ကြည့်ရှုပေးကြပါဦးဗျာ။ ________________________________ လူသတ်သမားရဲ့ စရိုက်ကို ပုံဖော်ရာမှာတော့လူတွေမှာ ၄ရာခိုင်နှုန်းသာ ရှိတတ်တဲ့ မကောင်းစိတ်လေးကိုအခြေခံထားပါတယ်။ ဥပမာ.. ကျွန်တော်တို့ မျက်စိရှေ့မှာ ယာဉ်မတော်တဆမှုတစ်ခုမြင်တွေ့ရတဲ့အခါ ဘယ်သူမှ မနာသွားရင် စိတ်ထဲ အားမရဘူး။ အနည်းဆုံး ခေါင်းလေးကွဲ၊လက်လေးကျိုးသွားမှ စိတ်မှာကျေနပ်မိတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ယောက်ယောက် သေသွားရင်တော့ စိတ်မကောင်းဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒီလို မကောင်းစိတ်(မသိစိတ်ထဲ အယူလွဲမှု)ကအနိုင်ယူလွှမ်းမိုးခြင်းကို ခံလိုက်ရတဲ့ လူတစ်ယောက်ပေါ့ဗျာ။ ထို့ပြင် ယနေ့ခေတ် လူတွေရဲ့ အပြုအမူတွေကိုကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း မြင်သာအောင် ပုံဖော်ထားပါသေးတယ်။ ဥပမာ- ဒုက္ခဘေးဆိုးတွေ မဖြစ်ခင် တားဆီးကယ်တင်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲ၊ဖြစ်ပြီးမှ သွားရောက်လှူဒါန်းမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်တွေပေါ့ဗျာ။ (ဖြစ်အောင် စောင့်နေကြသလို:3) ဖြစ်တော့မှ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေကို ထုတ်ဖော်ပြကြပြီးတခြားအချိန်မှာ ဘေးအိမ်နီးချင်းတွေကိုတောင်မမြင်ဖူးကြတာမျိုးတွေလေ။ ကဲ ဒီလောက်ပါဗျာ။ ကွီးတို့တွေအတွက် Hacking၊ ရှီဗာချစ်သူ ချောချောလေးရဲ့ လိင်အသားပေး ဇာတ်ကားတွေကြည့်ရင်း လိင်ဆက်ဆံဖူးချင်တယ်ဆိုတဲ့ စော်လေးကို ရှုမြင်ခံစားရမယ်။ မမလေးတွေအတွက် ဝန်ကြီးချုပ်မင်းသားဆိုပြီးသဲသဲလှုပ်နေကြတဲ့ မင်းသားချော Mahesh Babuရဲ့ အကတွေ၊ခန့်ညားမှုတွေနဲ့ ဖိုက်တင်အက်ရှင်တွေကို ခံစားရစေမယ်လို့ ပြောရင်းဒီလောက်နဲ့ အဆုံးသတ်ကြရအောင်ဗျာ။
တောင်ပိုင်းကားတွေဟာအိန္ဒိယကား ပရိတ်သတ်တွေကြားမှာမျက်နှာအတော်ငယ်ရတဲ့ ကားတွေပါ။ အက်ရှင်အသားပေးတွေ များတယ်၊ဝန်ကြီးတွေ ရဲတွေ နဲ့တင် တိုင်ပတ်နေတယ်၊အက်ရှင်ကို အလွန်ကြီးတွေ လုပ်တယ်၊ဇာတ်လမ်းတွေ ထပ်တယ်စတဲ့ စတဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေကြောင့်တောကြိုက်ရယ်လို့တောင် တစ်ချို့က ပြောကြမှာပါ။ ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့မင်းသား Adivi Sesh ရဲ့တစ်ခြားတောင်ပိုင်းကားတွေနဲ့ မတူပဲ ထူးထူးခြားခြား ရိုက်ထားတဲ့ စပိုင် ကားလေးပါ။ သူ့ရဲ့ သရုပ်ဆောင်ပုံနဲ့သူရိုက်တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေဟာ ထူးခြားသလို သူကိုယ်တိုင်က ဒါရိုက်တာ,မင်းသား,စာရေးဆရာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကားတွေကို သိပ်မတွေ့ရပေမယ့်ဒီနှစ်ပိုင်း ထွက်တဲ့ Tiger Sheroff ရဲ့.Baaghi2ဟာဒီမင်းသားရဲ့ Kshanam 2016 ဇာတ်ကားကိုပြန်ရိုက်ထားတဲ့ Remake ကားဖြစ်နေပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကို မပြောခင်ထူးခြားချက်ကလေးတွေကိုထုတ်နှုတ်ပြရမယ်ဆိုရင်ဒီကားရဲ့ ဝတ္ထုအကြမ်းကို မင်းသားဖြစ်သူ Adivi Sesh ကိုယ်တိုင် အမေရိကားမှာ အထက်တန်းတက်နေတဲ့ 2004 ခုနှစ်တုန်းကတည်းကရေးထားခဲ့တာပါတဲ့။ တကယ့်တကယ် ပိတ်ကားပေါ်မှာဒီဇာတ်လမ်းကို ပြသဖို့ ရိုက်ကူးမယ်ဆိုတော့ ဇာတ်ညွှန်းစီစဉ်တည်းဖြတ်ရတာတင် အချိန် ကိုးလ ယူခဲ့ရပါတယ်။ နောက်ပြီးနိုင်ငံသုံးနိုင်ငံရဲ့ Location 167 ခုမှာသွားရိုက်ခဲ့တဲ့ ဒီကားဟာ Top Rated Telugu Movies List မှာ နံပါတ် 40 မှာ ရှိတဲ့ Telugu စကားပြော ဇာတ်ကားတစ်ကား ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ ကဲ ဇာတ်လမ်းအကြောင်းကိုဆက်ပြောရအောင်. . . . ဇာတ်လမ်းရဲ့အစမှာ နောက်ကြောင်းပြန်တာနဲ့ စ,ထားပါတယ်။ ၁၉၉၅ ခုနှစ်မှာ အိန္ဒိယအစိုးရဟာ လျှို့ဝှက်အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ထရီနက်ထရီအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ ဒီအဖွဲ့ဟာ စုံစမ်းထောက်လှမ်းမှုတွေအပြင် ထိပ်တန်းသတင်းတွေကိုပါထိန်းသိမ်းရတဲ့အဖွဲ့ပါ… ဒါပေမယ့် ကံဆိုးစွာနဲ့ပဲအယ်မူဂျာဟီဒင်အကြမ်းဖက် အဖွဲ့ဆီကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့လျှို့ဝှက်သတင်းတွေပေါက်ကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ ပေါက်ကြားသွားတဲ့ သတင်းတွေကအစိုးရနဲ့ ပက်သက်တဲ့ ထိပ်တန်းသတင်းတွေတင် မကပဲ ထရီနက်ထရာအဖွဲ့ကအေးဂျင့်အားလုံးရဲ့ အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေ၊သူတို့မိသားစုနဲ့ ဆိုင်တဲ့ သတင်းတွေ၊အဖွဲ့အစည်းတည်နေရာ စတာတွေပါ ပါပါတယ်။ ဒါတင်လားဆိုတော့သတင်းပေါက်ကြားမှုကြီးနောက်ကို လိုက်လံစုံစမ်းရင်း အေးဂျင့်တစ်ချို့ပာအသတ်ခံလိုက်ရပါသေးတယ်။ ဘယ်လိုမှ ရပ်တည်လို့မရတဲ့ အဆုံးကျန်ရှိနေတဲ့ အစိုးရ အရာရှိတွေ၊အေးဂျင့်တွေရဲ့ လုံခြုံရေးအတွက်အစိုးရက ထရီနက်ထရာအဖွဲ့ကိုဖျက်သိမ်းပစ်လိုက်ပါတယ်။ အာဂျွန်း?? အာဂျွန်းဆိုတာ သေဆုံးသွားတဲ့ ထရီနက်ထရီအေးဂျင့် ရာဂူးဗီးရ်ရဲ့သားဖြစ်ပြီး ဖခင်ရဲ့သူငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ ဆတ္တယာရဲ့ပြုစုပျိုးထောင်မှုနဲ့အတူ အရွယ်ရောက်လာသူပါ . . . မျက်မှောက်ခေတ်မှာပြန်ပေါ်လာတဲ့ အယ်မူဂျာဟီဒင်အဖွဲ့ရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့် မွန်ဘိုင်းမြို့မှာ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုတွေ ဆက်တိုက် ဖြစ်လာပြန်တော့အစိုးရဟာ ထရီနက်ထရာ အဖွဲ့ကိုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့ရပြန်ပါတယ်။ အသစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းတဲ့ ထရီနက်ထရီအဖွဲ့မှာ ဝင်ခွင့် ဝင်ဖြေပြီး အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ဖို့ပြင်းပြင်းထန်ထန် လေ့ကျင့်မှုတွေအပြီး အာဂျွန်းလည်း အတော်ဆုံး အေးဂျင့်တစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ထရီနက်ထရီအဖွဲ့ရဲ့အစည်းအဝေးအပြီးမှာ ထရီနက်ထရာခေါင်းဆောင်တွေဟာ လူတစ်စုရဲ့ရုတ်တရတ်တိုက်ခိုက်ခြင်းကို ခံလိုက်ရပါတယ်။ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် သေသွားတဲ့အပြင်အာရ်ဂျွန်းရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့ ဒါမိုဒါပါ သေဆုံးသွားပြီး သက်သေအထောက်အထားတွေအရအခင်းဖြစ်ရာနေရာမှာ အာဂျွန်းရဲ့ဆိုင်ကယ် အာဂျွန်းရဲ့လက်ဗွေရာတွေတွေ့ရတော့အာဂျွန်းတစ်ယောက် ဘုမသိဘမသိ ဝရမ်းပြေးဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်. . . သဘာဝကျကျနဲ့မှုခင်းစုံထောက်ကားတွေစပိုင်ကားတွေအကြမ်းဖက်သမား နှိမ်နင်းရေးကားတွေကို ကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဟောလိဝုဒ်ဆန်ဆန်နဲ့ ဖိုက်တင်တွေ အပစ်အခတ်တွေပာတဲ့ ဒီကားလေးက လက်လွတ်မခံသင့်တဲ့ကားလေးပါလို့ ပြောရင်း.
အားလပ်ချိန်မှာ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးနဲ့ Bollywood ဇာတ်ကားကောင်းကို ကြည့်ရှုခံစားချင်ရင်တော့ IMDB 8/10 အထိရရှိထားတဲ့ ဒီဇာတ်ကားလေးကို မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ ဒီဇာတ်ကားမှာတော့ အဂျေး နဲ့ အပေါင်းအပါတွေရဲ့ လိမ်လည်မှုပညာ တွေကို အဓိက တင်ဆက်ထားပြီး လူလိမ်နဲ့ ရဲကြား အားပြိုင်မှုကို ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ အဂျေးနဲ့ အပေါင်းအပါတွေဟာ ခေသူတွေမဟုတ်ပါဘူး။ ဝန်ကြီးချုပ်ကိုတောင် လိမ်လည်နိုင်စွမ်းရှိခဲ့သူတွေပါ။ သူတို့တွေ ဘယ်သူတွေကို ဘယ်လို လိမ်ခဲ့ကြမှာလဲ။ ရဲတွေလက်ကနေ ဘယ်လောက် ဖောက်ထွက်နိုင်မလဲ / အလွန်တော်တဲ့ စုံထောက်တွေကရော ဖမ်းဆီးနိုင်မလား ဆိုတာ ရင်ခုန်ခံစားရမှာပါ။ အဂျေး အဖြစ် မင်းသားကြီး အရှေးကူးမားက ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပြီး Bollywood ဇာတ်ကားကောင်းတို့၏ ထုံးစံအတိုင်း ပဉ္စလက်ဆန်ဆန် လှည့်ကွက်တွေနဲ့ ဆွဲဆောင်သွားစေမှာ ဖြစ်လို့ ကြည့်ရှုအားပေး ခံစားကြည့်ကြစို့လားခင်ဗျာ။
ဒီနှစ်ထဲကတော့ Bollywoodမှာ Biography ဇာတ်ကားတွေနဲ့ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်းတွေ အထွက်များတယ် ပြောရမလားပဲ အခုတင်ဆက်ပေးမှာကလည်း IMDb 7.7/10 နဲ့ Rotten 60% ထိရရှိထားတဲ့ Sport, Bio, Drama ကားကောင်းတစ်ကားပဲ ဖြစ်ပါတယ် ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်းဖြစ်တာနဲ့အညီ တကယ်ကိုကြည့်ကောင်းတဲ့ ကားကောင်းတစ်ကားလိုပဲ ပြောကြားပါရစေ အိန္ဒိယဟော်ကီကစားသမား ဆန်ဒီး(ပ်)ဆင့်ရဲ့ ဘဝဇာတ်ကြောင်းဖြစ်လို့ဘယ်လို ဟော်ကီကစားသမားဖြစ်လာခဲ့တယ် ဘယ်လောက်ထိ အောင်မြင်ခဲ့လဲ ဘယ်လောက်ထိ ကျရှုံးခဲ့လဲ ဘယ်လိုကိစ္စတွေကြောင့် ဟော်ကီကစားသမား ဖြစ်လာခဲ့လဲဆိုတာကိုတော့ ဒဏ်ပေးကြမ်းလွန်းတဲ့ နည်းပြကြောင့် ဟော်ကီကွင်းက ထွက်ပြေးခဲ့တဲ့ ဆန်ဒီး(ပ်)ဆင့် တစ်ယောက် ၉ နှစ်လောက်ကြာမှ အဲဒီဟော်ကီကွင်းကို တဖန်ပြန်လာခဲ့ပါတယ် ဒါပေမဲ့ သူ့အကြောင်းပြချက်က ဟော်ကီဆော့ဖို့ မဟုတ်ဘဲအဲဒီကွင်းမှာ လေ့ကျင့်ရေးဆင်းနေတဲ့ ပရီးဆိုတဲ့ မိန်းကလေးကို စိတ်ဝင်စားနေလို့ပါ “ဟော်ကီမှာ တစ်ခုခုထူးချွန်မှ ငါတို့နဲ့လာတွေ့” ဆိုတဲ့ ပရီးရဲ့မိသားစုတွေရဲ့ စကားကြောင့် ဆန်ဒီးပ်ဆင့်ဟာ အိန္ဒိယလက်ရွေးစင်ကစားသမား အဖြစ်နဲ့ အောင်မြင်မှုတွေ ရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ် ဒါပေမဲ့ ဆန်ဒီးပ်နဲ့ ပရီးကြားကို ကံဆိုးမိုးမှောင်တစ်ခုကျလာပါတော့တယ် အချစ်အတွက် ဟော်ကီကစားသမားဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဆန်ဒီးပ်တစ်ယောက် ဘယ်လိုအခက်ခဲတွေ ကြုံတွေ့ရမလဲ … သူသိပ်ချစ်တဲ့ကောင်မလေးနဲ့ကော ပေါင်းဖတ်နိုင်ပါ့မလား ဆိုတာကိုတော့ …
ဒီတစ်ခါတော့အိန္ဒိယလူငယ်ဟာသကားပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးတင်ပေးချင်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားဟာ Rating ကောင်းကောင်းရရှိထားရုံသာမက ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ရယ်ရယ်မောမောကြည့်ရမယ့် ဇာတ်ကားကောင်းလေးပါ။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ တီတူးနဲ့ဆွန်နူးတို့ဆိုတာက မူကြိုအရွယ်လောက်ကတည်းက ပေါင်းလာတဲ့သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်ပြီး တီတူးတို့အိမ်နဲ့ ဆွန်နူးတို့အိမ်ဆိုတာကလည်း အလွန်ရင်းနှီးကြပါတယ်။ ငယ်ကတည်းတစ်ပူးတွဲတွဲ လည်ပင်းဖက်ပေါင်းလာကြတဲ့ သူငယ်ချင်း၂ယောက်မှာ တစ်ယောက်ကတော့ လည်လည်ဝယ်ဝယ် သွက်သွက်လက်လက်ရှိသလောက် နောက်တစ်ယောက်က အူတူတူ ရိုးရိုးစင်းစင်းနေတတ်တဲ့သူဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နှစ်ဦးသားအရမ်းချစ်ကြတဲ့သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်ပြီး အမြဲဘာလုပ်လုပ် တပူးတွဲတွဲပါပဲ။ တီတူးဟာ အမြဲရည်းစားထားရင် အဆင်မပြောတာတွေပဲဖြစ်တတ်ပြီး ဆွန်နူးကတော့ အမြဲနောက်ကနေလိုက်ရှင်းပေးရတတ်ပါတယ်။ တစ်နေ့ အိမ်က လက်ထပ်ပေးဖို့စီစဉ်ပေးတဲ့အခါမှာ တီတူးတစ်ယောက် ဆွီတီဆိုတဲ့မိန်းကလေးသဘောကျပြီးနောက် ဆွန်နူးအလုပ်ရှုပ်ရပြန်ပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ဒီတစ်ခါသူရှင်းရမယ့်ကိစ္စက အရင်တစ်ခေါက်တွေလိုလွယ်ကူပါ့မလား။ ဘယ်လိုကမောက်ကမလေးတွေဖြစ်လာမလဲ ဆိုတာကိုဟာသလေးတွေနဲ့ အူနှိပ်ပြီးကြည့်ရမယ့်ဇာတ်ကားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အိန္ဒိယကားကြိုက်တဲ့သူတွေရော မကြည့်ဖြစ်တဲ့သူတွေအတွက်ပါ Comdey ဇာတ်ကားကောင်းဖြစ်တာကြောင့် ကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
ဒီဇာတ်ကားအကြောင်းမညွှန်းခင်၊ အရင်ဆုံး ဒီဇာတ်လမ်းထဲက မင်းသမီးဖြစ်တဲ့ Bhumi Pednekar အကြောင်း နည်းနည်းလောက် ပြောရအောင် Bhumi Pednekar ဟာဆိုရင် နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင် Yash Raj Film မှာ လက်ထောက်ဒါရိုက်တာဝန် လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီးမှ ကုမ္ပဏီနဲ့ ရုပ်ရှင်သုံးကားကို မင်းသမီးအနေနဲ့ သရုပ်ဆောင်ဖို့ စာချုပ်ချုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဆုံး ဇာတ်ကားဖြစ်တဲ့ Dum Laga Ke Haisha ဇာတ်ကားမှာ ပွဲဦးထွက် သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ဒီဇာတ်ကားနဲ့ပဲ Filmfare Award for Best Female Debut ဆုရရှိခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ အားလုံးသိကြတဲ့ မင်းသားကြီး အက်ရှေးကူမားနဲ့အတူ၊ Toilet: Ek Prem Katha ဇာတ်လမ်းမှာလည်း အကောင်းဆုံးနဲ့ ပရိတ်သတ်ရင်ဖက်ထဲမှာ နေရာယူနိုင်ခဲသလို အခု ဇာတ်ကားဖြစ်တဲ့ Shubh Mangal Savdhan (2017) မှာလည်း အကောင်းဆုံး ကြိုးစားထားတော့ ပရိတ်သတ်ရင်ဖက်ထဲ ရောက်မယ်ဆိုတာ အာမခံပါတယ်။ ( ကိုယ်တွေကတော့ Bhumi Pednekar ပရိတ်သတ်ဖြစ်သွားပါပြီ ? ) ====================================================== ” အမေ – ဒီမယ် သမီး အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာ လျှို့ဝှက် ရတနာသိုက် တစ်ခုလိုပဲ၊ ပြီးတော့ အဲ့ဒီရတာနာကလည်း အုတ်ဂူတစ်ခုထဲမှာ အလုံပိတ်ထားတာ။ ဘယ်အချိန်မှာ အဲ့ဒီအုတ်ဂူပွင့်သွားလဲသိလား သမီး – တစ်ယောက်ယောက်က ရွှေတံခါးကြီး ဖွင့်ပါဦးလို့ ပြောတဲ့အချိန်လား အမေ – ဘယ်ကသာ၊ မင်္ဂလာဦးညမှပွင့်တာ သမီးရဲ့၊ ခိုးသားလေးဆယ်အတွက် မဟုတ်ဘူးနော် အလီဘာဘာ တစ်ယောက်တည်း အတွက်ပဲ ပွင့်တာ သမီး – ဒါဆို တကယ်လို့ အလီဘာဘာက အုတ်ဂူဆီ မရောက်ခဲ့ရင်ရော အမေ – ဟင် ရောက်ရမှာပေါ့၊ အလီဘာဘာက အုတ်ဂူဆီရောက်ဖို့ပဲ မွေးလာတာ “ မကြာခင် မင်္ဂလာဆောင်တော့မည့် သမီးဖြစ်သူရဲ့ ဒီစကားက စဉ်းစားစရာပါ အလီဘာဘာက ဘာကြာင့် အုတ်ဂူကို မရောက်ရမှာလဲ ခေတ်အခါခါက အလီဘာဘာတိုင်း အုတ်ဂူဆီရောက်လာနေကျပါ။ ဘာကြောင့် ဆူဟန်ဒရာက ဒီလိုပြောလိုက်တာလဲ့ သူမအတွက် မကြာခင်မှာ အလီဘာဘာ ဖြစ်လာမည့်သူကတော့ မူဒစ်ရှရ်မား နှစ်ယောက် ဘယ်လို လက်ထပ်ဖြစ်ကြတာလည်းဆိုတော့ အွန်လိုင်းကနေ မင်္ဂလာကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုရောက်လာလို့တဲ့ ဆူဟန်ဒရာ ကြည့်လိုက်တော့ ဒီလူကို ငါသိပါတယ် တစ်လလောက် ငါ့အနား တဝဲလည်လည် လုပ်နေပြီး စကားတောင် လာမပြောရဲတဲ့ ကိုယ်တော်ချောပဲ့ မူဒစ်ခမျှာ မိန်းကလေး တစ်ယောက်ကို စိတ်ဝင်စားနေပေမယ့် မပြောရဲမဆိုရဲ နောက်ဆုံးကြံရာမရ အိမ်က အကြံပေးတဲ့အတိုင်း အွန်လိုင်းကနေ မင်္ဂလာကမ်းလှမ်းလိုက်တော့တယ့် ——————————————————————————————— မိဘတွေက စီစဉ်ပေးရပေးမယ့် နှစ်ယောက်သား တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် အပြန်အလှန်စိတ်ဝင်စားနေကြတော့ တစ်နေ့မှာတော့ ဆူဟင်ဒရာ မိဘတွေ အိမ်မှာမရှိတုန်း မူဒစ်နဲ့ ဆူဟင်ဒရာ အနေနီးစပ်ဖို့ အကြောင်းဖန်လာပါတော့တယ့် ဒါပေမဲ့ မူဒစ်ခမျှာ မျက်နှာငယ်နဲ့သာ အိမ်ပြန်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။ ——————————————————————————————— ဒါကြောင့် အမေဖြစ်သူက မင်္ဂလာဦးအတွေ့အကြုံတွေနဲ့အတူ၊ မိန်းကလေးတစ်ယောက် သိသင့်သိထိုက်တဲ့ အိမ်ထောင်ရေး အကြောင်းတွေ သင်ပေးနေတဲ့ အချိန်မှာ သမီးဆီက ” အလီဘာဘာက အုတ်ဂူကို မရောက်ခဲ့ရင်ရော” ဆိုတဲ့ မေးခွန်းထွက်ပေါ်လာခဲ့တာပါ။ ———————————————————————————————- အလီဘာဘာ အုတ်ဂူဆီ ရောက်လာနိုင်မလား ရောက်လာဖို့ ကြိုးစားပုံတွေကို ဒီဇာတ်လမ်းမှာ ဆက်လက်ကြည့်ရှု့လိုက်ပါဦး #ဟာသ့ဒရာမာ့ဇာတ်ကားကောင်းလေးမို့ လက်အလွတ်မခံလိုက်ကြပါနဲ့ ( ဒီကားကြည့်မိပြီး တစ်ခုတွေးမိတာ ဘာနည်းပညာ၊ ဘာအသုံးစရိတ် အကြီးမားမှမပါသလို၊ အစိုးရအကူအညီလည်း မပါပဲ အခုလို အမှန်အကန်ဇာတ်ကားတွေ အိန္ဒိယမှာ ထွက်နေချိန်မှာ အိန္ဒိယရဲ့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ချပြစရာ ဇာတ်ကားကောင်းကောင်း မရှိသေးတာ အင်မတန်မှ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်လို့ )
အာရွန် ဟာ မွေးဖွားလာကတည်းက ထူးခြားတဲ့သူပါ မိခင် ဝမ်းဗိုက်ထဲတွင် စတင် လွယ်စဉ်ကတည်းက အမွှာပူးဖြစ်ခဲ့သော်လဲ မွေးဖွားလာခဲ့သောအခါ အာရွန် တစ်ယောက်ထဲသာ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ဆေးပညာလောကတွင် ဖြစ်ခဲသော ဖြစ်တက်သော အစဉ်အလာ တစ်ခုဖြစ်ပြီး တစ်ခြား အမွှာတစ်ယောက်အား တစ်ယောက်က စုပ်ယူသွားတာ ဖြစ်ပြီး ၂ ကိုယ် တစ်စိတ် နဲ့ အသက် ၂ခု ရှိတဲ့ သူ ဖြစ်ကြောင်း ငယ်စဉ်က ဆရာဝန်တွေက အာရွန်ရဲ့ မိဘတွေကို ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်… အာရွန် ဟာ ဆိုးလဲ ဆိုးသူ တော်လဲ တော်တဲ့သူ လို့ အာရွန် နဲ့ ပတ်သက်မိသူတွေက ပြောဆိုကြပါတယ် တစ်ရက်မှာတော့ အာရွန် နဲ့ ပက်သက်ခဲ့မိသူတွေ ခရီးသွား ကားတစ်စီးပေါ်တွင် ဆုံမိရာကနေ စကားစပ်မိရင်း တစ်ချိန်ထဲ တစ်နေရာထဲမှာ အာရွန် ကို သိတဲ့သူတွေ ဘာကြောင့်ဆုံမိခဲ့သလဲ ဆိုတာ အထူးအဆန်းဖြစ်နေပါတယ်… ဒီလိုနဲ့ လမ်းတစ်နေရာမှာ ကားက ဘရိတ်ပေါက်ပြီး ချောက်ထဲသို့ ကျသွားသော အခါမှာတော့….
အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ် ချင်တဲ့ (၁၄)နှစ်အရွယ် မွတ်စလင်မိန်းကလေးတစ်ယောက်အ ကြောင်းကို ဇာတ်အိမ်တည်ထား ပြီး Aamir Khan၊ Zaira Wasim၊Meher Vij၊ Raj Arjun စတဲ့ သရုပ်ဆောင်တွေ အဓိကပါဝင် ထားတာပါ။ အထက်တန်းကျောင်းသူလေးအင်ဆူဟာ စည်းကမ်းတင်းကျပ်လွန်းပြီး အကြင်နာတရားမရှိ တဲ့ ဖခင်ရဲ့ အုပ်ထိန်းမှုအောက် မှာ နေရသူဖြစ်ပြီး သမီးကြီးဆိုပေ မယ့်လို့ မိန်းကလေးတွေကို ဖိနှိပ်တဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းကဖြစ်တဲ့အ တွက် မျက်နှာသာအပေးမခံရပါ ဘူး။ သီချင်းဆိုဝါသနာပါပြီး အ ဆိုတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်တဲ့ အင် ဆူရဲ့စိတ်ကူးအိပ်မက်ကို သူ့အမေက နားလည်သဘောပေါက်ပြီး သီချင်းတွေနဲ့ ထိတွေ့ခွင့်ပြုပေမယ့်လို့ သူ့အဖေသိသွားတဲ့အခါ မှာ ဆူဟောက်မာန်မဲခံရသလို အင်ဆူရဲ့ ဂစ်တာလေးပါ ဖျက်ဆီးခံရပြီး သီချင်းဆိုဖို့ကိုလည်း တား မြစ်ပိတ်ပင်ခံရပါတော့တယ်။ အဆိုဝါသနာရှင်လေး အင် ဆူဟာ သူ့အဖေဘယ်လောက်ပဲ မာန်မဲရိုက်နှက်ပါစေ သူ့အိပ်မက် ကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ လုံးဝလက်မလျှော့ခဲ့ပါဘူး။ အိမ်ကနေ မွမ်ဘိုင်းကို တိတ်တဆိတ်ထွက် ခွာပြီး အောင်မြင်နေတဲ့ တေးရေး ဆရာ အဆိုတော်ရှက်တီကူးမားနဲ့ တွေ့ပြီး သူ့အိပ်မက်တက် ပိုပြီးအကောင်အထည်ဖော်ကာ အိမ် မှာ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံနေရတဲ့ သူ့အမေနဲ့မောင်လေးကို ကယ်ထုတ် နိုင်ဖို့ စိတ်ကူးထားတာပါ။ သူ့အဖေက မြို့ပြင်မှာအ လုပ်ထွက်လုပ်တဲ့အတွက် တစ် ပတ်မှာ တစ်ရက်လောက်ပဲ အိမ်ပြန်လာနိုင်တဲ့ အခြေအနေကို အင်ဆူတစ်ယောက် ကောင်းကောင်း အသုံးချပြီး အဆိုပြိုင်ပွဲဝင်ဖို့ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့အဖေသိ သွားပြီး လုံးဝခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့လည်း ဇွဲမလျှော့တဲ့ အင်ဆူဟာ သီချင်းဆိုနေတဲ့ဂီတ ဗီဒီယိုတစ်ခုကို Youtube မှာတင် တဲ့အခါမှာ ဝင်ကြည့်တဲ့သူတွေ ညတွင်းချင်းတက်လာသလို သူ တွေ့ချင်နေတဲ့ တေးရေးဆရာ၊ အဆိုတော် ရှက်တီကူးမားက လည်း အင်ဆူကို သတိထားမိ သွားပါတော့တယ်။ ဖိနှိပ်ခံ အင်ဆူတစ်ယောက် အတားအဆီးတွေ၊ အခက်အခဲ တွေ၊ အတိုက်အခံတွေကြားက သူဖြစ်ချင်တဲ့ အဆိုတော်တစ် ယောက်ဖြစ်ခွင့်ရမှာလားဆိုတာ တော့…. ။
“အမှန်တရားသည်သာ အောင်နိုင်ရာ၏” တဲ့။ အမှန်တရားဟာ အမြဲအနိုင်ရတယ်။ အမှန်တရားအတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေသူတွေ ရှိသလိုအမှန်တရားကို ထိန်ချန်ထားကြတာလည်း ရှိတယ်။ တခါတလေ ကြင်နာသနားတတ်တဲ့ ခေါင်းဆေင်ကောင်းလိုအပ်တယ်။ တခါတလေ ရက်စက်ကြမ်းတမ်းတဲ့ အပြစ်ပေးသူ လိုအပ်တယ်။ အညွှန်း ” ဒီဇာတ်ကားထဲမှာ ရဲအရာရှိတွေကိုမှ မီးရှို့သတ်တတ်တဲ့ လူသတ်သမားတစ်ဦးနဲ့ရဲအရာရှိတစ်ဦးတို့ကို တွေ့မြင်ရမှာပါ။ ရဲအရာရှိ တော်တော်များများကို သဲလွန်စပေးပြီးသတ်တဲ့ လူသတ်သမားဟာဘာကြောင့်များ ခုလို သတ်ရတာလဲ? ဒီအမှုကို ကိုင်တွယ်မယ့် ရဲအရာရှိဟာလူသတ်သမားဆီက ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု တစ်ခု ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ရဲအရာရှိကို ယခုအမှုမှာ ဝင်မပါဖို့ တားမြစ်ခဲ့ပါတယ်။ တနေ့မှာတော့… လူသတ်သမားနဲ့ ရဲအရာရှိတို့ မျက်နှာချင်းဆိုင် တွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။ လူသတ်သမားဘက်က သိနေပေမဲ့ရဲအရာရှိကရော လူသတ်သမားဟာ ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာကို သိနေမလား? ဘယ်သူက သားကောင်? ဘယ်သူက မုဆိုးဖြစ်မလဲ? ဘယ်သူက ခြေးတစ်လှမ်းသာမလဲ? ဘယ်သူက ခြေတစ်လှမ်း နောက်ကျမလဲ? စသဖြင့် အပြိုင်အဆိုင် ယှဉ်ပြိုင်ရင်း…. လူသတ်မှုတွေ အများကြီး ဖြစ်ပြီးချိန်မှာတော့…. လူသတ်သမားဟာဘယ်လို အရာရှိမျိုးကိုမှ ရွေးချယ်သတ်တာလဲ? သူ သတ်ကွင်းထဲက ဘာဖြစ်လို့ဒီစီပီကို ပ,ထုတ်ခဲ့တာလဲ? ဘယ်လို အကြောင်းမျိုးတွေကြောင့်ခုလို ဆက်တိုက် သတ်နေရလဲဆိုတာကိုတော့ ခံစားလိုက်ပါဦးဗျာ။ ………………………………………… (အညွှန်းအပြည့်အစုံကို ရေးပြဖို့ မဖြစ်နိုင်လို့ ဒီမှာတင် ရပ်ကြရအောင်ဗျာ) လူသတ်သမားကြီး ဗီးရ်အဖြစ် John Abraham ဒီစီပီ ရှီဗန်ရှ် အဖြစ် Manoj Bajpayee တို့အပြင် … ရှီခါ အဖြစ် မင်းသမီးချောလေး Aisha Shama တို့ကအထူးပါဝင် သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။
ဂုဏ်သရေရှိ အမျိုးသမီး အမျိုးသားအပေါင်းတို့ ခင်ဗျာ ဒီနေ့ဟာဆိုရင် ကျွန်တော့်အတွက် အင်မတန်မှ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ နေ့တစ်နေ့ပါ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီနေ့မှာ ကျုပ်ရဲ့ ကိုယ်တိုင်ရေး အတ္ထုပ္ပတ္တိ စာအုပ် ထွက်ရှိမှာ မို့လို့ပါ ============================================ ကျွန်တော့်လောက် ကဏ္ဌစုံတဲ့လူ တစ်ယောက်ကို ဘယ်မှာမှတွေ့နိုင်ဖို့မရှိဘူးဗျ ကျွန်တော်က အရက်သမား၊ ဆေးသမား၊ မိန်းမပွေလွန်းတဲ့လူဗျ ဒါပေမဲ့ အကြမ်းဖက်သမားတော့ မဟုတ်ပါဘူး ============================================ AK 56 ရိုင်ဖယ်တွေလက်ဝယ်တွေ့ရှိမှု၊ RDX တွေရှိနေလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းပေါင်းများစွာကြောင့် အများအမြင်မှာ အကြမ်းဖက်သမားတစ်ယောက်ဖြစ်နေတဲ့ နာမည်ကျော်မင်းသားကြီး ဆန်ဂျေ ဒတ်ဟာ ထောင်နန်းစံရတော့ပါမယ် အဲဒီအတွက်ကြောင့် ပြည်သူတွေကိုအမှန်တိုင်း သိစေဖို့ ရည်ရွယ်ပြီးနာမည်ကျော် စာရေးဆရာမတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဝင်နီ ဒိုက်(ဇ်)ကို သူ့ဘဝဇာတ်ကြောင်းရေးပေးဖို့ အကူညီတောင်းခဲ့ရပါတော့တယ် ဆန်ဂျေ ဒတ်ရဲ့ ဘဝဇာတ်ကြောင်းက ဘာတွေလဲ … တကယ်ပဲ သူက အကြမ်းဖက်သမား တစ်ယောက် ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကိုတော့ … ============================================ နာမည်ကျော်မင်းသားကြီး ဆန်ဂျေ ဒတ်ရဲ့ ဘဝဇာတ်ကြောင်းကို မင်းသား ရန်ဘီးကပူးရ်က အကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်ထားပြီးပါလေသမျှ သရုပ်ဆောင်တိုင်းက ကဏ္ဌအသီးသီးကနေ အကောင်းဆုံးပုံဖေါ်ထားနိုင်လွန်းလို့ အင်မတန်မှ ကောင်းမွန်တဲ့ Bio, Drama ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်ပါတယ် ဒါရိုက်တာကလည်း3Idiots, PK နဲ့ Munna Bhai နှစ်ကားလုံးကို ရိုက်ကူးထားတဲ့ Rajkumar Hirani ဖြစ်နေတာကြောင့် ပြောစရာမလိုလောက်အောင် ပြီးပြည့်စုံနေပါပြီ နိုင်ငံတကာ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွေ အနေနဲ့ IMDb 8.5/ 10 နဲ့ Rotten Tomatoes 50% အထိ ရရှိထားပါတယ်
IMDb Rating (6.5) ရရှိထားတဲ့ တမီးလ်ဇာတ်ကားလေးပါ။ ဆတ္တယာ(Sathya) ဟာ သြစတေးလျက အဆင့်မြင့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ အဆင့်မြင့်အရာရှိတစ်ယောက်အနေနဲ့ လုပ်ကိုင်နေတဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ အချစ်ရေးရာကိစ္စဆိုလို့ ဘာမှကိုစိတ်မဝင်စားတတ်တဲ့သူပါ။ တစ်နေ့မှာတော့ အိန္ဒိယနိုင်ငံချင်နိုင်းမှာရှိနေတဲ့ သူ့ရည်းစားဟောင်းဖြစ်တဲ့ (Swetha) ဆွီသာ့ဆီကနေ အကူအညီတောင်းတဲ့ ဖုန်းအသံမက်ဆေ့တစ်ခုရပါတယ်။ လွန်ခဲ့နှစ်လလောက်က ဆွီသာရဲ့ ငါးနှစ်အရွယ်သမီးလေးကို လူစိမ်းနှစ်ယောက်က ဖမ်းဆီးခေါ်သွားခဲ့တယ်လို့ ဆွီသာကပြောဆိုပြီး သူ့သမီးလေးကို ပြန်ပြီးရှာပေးဖို့အတွက် အကူအညီတောင်းတာပါပဲ။ ချန်နိုင်းမှာရှိနေတဲ့ ရဲတွေက ဒီအမှုကို ရေရေရာရာစုံစမ်းစစ်ဆေးတာမလုပ်ခဲ့ကြပဲ အမှုကိုပိတ်ပစ်လိုက်ကြပြီးတဲ့နောက် ငါးနှစ်အရွယ်ကလေးမလေးတစ်ယောက်ဆိုတာ တကယ်မရှိတဲ့အကြောင်းနဲ့ ဆွီသာ့အနေနဲ့ ထင်ယောင်ထင်မှာဖြစ်နေတာသာဖြစ်ပြီး စိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်ဆီကို သွားတွေ့သင့်ကြောင်းကိုပဲ ရဲတွေက တုန့်ပြန်ကြပါတယ်။ ဆွီသာရဲ့ အမျိုးသားဖြစ်သူနဲ့ အိမ်နီးချင်းတွေကိုယ်တိုင်ကလည်း ဆွီသာဟာ ကလေးမရနိုင်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ ဒီလိုဖြစ်ပျက်နေတာဟာ ဆွီသာရဲ့စိတ်ကူးယဉ်မှုတစ်ခုသာဖြစ်တဲ့အကြောင်း ဆတ္တယာကို ရှင်းပြကြပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဆတ္တယာ ကိုယ်တိုင်ကလည်း ဆွီသာ့ စကားတွေကို မယုံမကြည်ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက် ဆွီသာဟာ အထပ်မြင့်တိုက်တစ်ခုနေခုန်ချပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို အဆုံးစီရင်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။ ဒါပေမယ့်… အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ချန်နိုင်းမြို့ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး နဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ…. ဆွီသာ့ရဲ့ အမျိုးသား နဲ့ ဆေးစွဲနေတဲ့ ညီဖြစ်သူ…. ဆတ္တယာကို အနီးကပ်အကူအညီပေးနေတဲ့ ဘာဘူခန်…. သူတို့တွေ အားလုံးက ဒီဖြစ်ရပ်တစ်ခုလုံးရဲ့နောက်ကွယ်မှာရှိနေတာကို ဆတ္တယာ သိလိုက်ရတဲ့အခါ……..
အချစ်ဟာ နူးညံ့တယ် သိမ်မွေ့တယ်..နှစ်လိုဖွယ်အတိနဲ့သူ့အကြောင်းလေး တွေးနေရရင်ကို အိပ်မပျော်တဲ့ညတွေ…အရာရာကို မေ့လျော့သွားတဲ့ အခိုက်အတန့်တွေ ရှိတယ်။ အချစ်ဦးဆိုရင် ပိုလို့တောင် ရင်ဖိုဖို့ကောင်းသေး၊ဒါကြောင့်လည်း ရှေးလူကြီးတွေက “အချစ်ဦးကို မြေးဦးရတဲ့အထိ မမေ့ဘူး”လို့ဆိုရိုး ထားခဲ့ပုံပါပဲ….။ ဒါက ဒီကားထဲက ဇာတ်ကောင်ဖြစ်တဲ့ဆီဗာ့ကိုယ်စား ကျွန်တော် ခံစားမိတာလေးပေါ့။ တစ်ဖက်က ကြည့်တော့ကိုယ့်ဘက်က ဘယ်လောက်ပဲ ချစ်ချစ်အချစ်ဆိုတာ ခဏတာအထိအတွေ့ကို ယစ်မူးရုံလောက်သာ သဘောထားပြီး ယောက်ျားဆိုတာ သူ့အတွက် ကစားစရာလို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့အင်ဒူးလို မိန်းကလေးတွေလည်း ရှိနေသေးတယ်။ ဘယ်ယောက်ျားကို ဘယ်လိုပဲ ကစားကစားပြသနာမရှိပေမယ့် သူ့ကို ရူးခါနေအောင် ချစ်နေတဲ့ဆီဗာလို အချစ်ရူးတစ်ယောက်နဲ့တွေ့တော့အချစ်ဟာ အပျက်အပျက်နဲ့နှာခေါင်းသွေး ထွက်လာနိုင်တဲ့အနေအထားကို ရုတ်ချည်း ပြောင်းလဲသွားတယ်။ အများကြီး မညွှန်းလိုတော့ပါဘူး၊ကျွန်တော်ကတော့ ဒီကားကို လူငယ်တွေရဲ့အချစ်ရေးနဲ့ပက်သက်ပြီးပညာယူသင့်တဲ့ကားလို့မြင်မိပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရင်ဘတ်ကို တည့်တည့်ကြီး ထိမှန်သွားတဲ့အချစ်ရူးတစ်ယောက်ရဲ့ အတ္ထုပတ္တိဆိုရင်လည်း မမှားဘူးပေါ့။ (Telugu စကားပြော ဇာတ်ကားရဲ့English စာဖိုင်ကို ဘာသာပြန်ဆိုခြင်း ဖြစ်တဲ့အတွက်လိုအပ်ချက်များ ရှိခဲ့ပါက ဘာသာပြန်ဆိုသူရဲ့လိုအပ်ချက်သာ ဖြစ်ပါကြောင်း….)
အရှေ့တိုင်းနဲ့ အနောက်တိုင်းမှာ ကွာခြားတာတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ အဲဒီအထဲမှာ လက်ထပ်ဖို့ အစီစဉ်ချတဲ့ ပုံစံ၊ လမ်းကြောင်းတဲ့ပုံစံ ကလည်း တစ်ခုအပါအဝင်ပါပဲ။ အရှေ့တိုင်းတွေထဲမှာမှ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ ဇာတ်မြင့်၊ ဇာတ်နိမ့် ခွဲခြားတာက တစ်မျိုး၊ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး ခွဲခြားတာက တစ်ဖုံဆိုသလို လက်ထပ်တဲ့ ကိစ္စတွေမှာ အဲဒီ ကိစ္စတွေဟာလည်း ဂရက်ရိုက်လာပြန်ပါတယ်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ အဲဒီပြဿနာတွေကြောင့် အိန္ဒိယအစိုးရက နောက်ဆုံး ဥပဒေတစ်ခုကို ပြဋ္ဌန်းခဲ့ရပါတယ်။ ကြိုက်တဲ့လူမျိုး ကြိုက်တဲ့ဇာတ်ကို လက်ထပ်နိုင်တဲ့ ဥပဒေပါ။ “Special Marriage Act” လို့ခေါ်တဲ့ အထူးထိမ်းမြားမင်္ဂလာ အက်ဥပဒေပါ။ စတဲ့ ဥပဒေ ကိစ္စတွေကိုပါ ထည့်သွင်း ရိုက်ကူးထားတဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးပါ။ ဘာသာမတူရင်၊ ဇာတ်အဆင့်တန်း မတူရင် ပြဿနာတွေ တက်လွန်းတဲ့အတွက် လူငယ်တွေကြားမှာ ဒုက္ခရောက်ကျပါတယ်။ လူငယ်တွေဆိုတဲ့အတိုင်း ရှေးလူကြီးတွေရဲ့ အယူအဆတွေကို တစ်တဝေမတိမ်း မလိုက်နာချင်ကြပါဘူး၊၊ လူကြီးတွေကိုလည်း မလွန်ဆန်နိုင်ကြဘူး။ အဲဒါတွေရဲ့ ရလဒ်ကတော့ နောက်ဆုံး ခိုးပြေးကြရတော့တာပါပဲ။ လူများနဲ့ မတူတဲ့ စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်လိုက်နိုင်တဲ့ ဝဘ်ဆိုဒ်လေးကို လူငယ်တွေ ဘာကြောင့် သဘောကျလာသလဲ? အဲဒီဝဘ်ဆိုဒ်ကို ထောင်ဖို့ ဇာတ်လိုက်မင်းသားက ဘာကြောင့် အကြံရခဲ့တာလဲ? ခိုးပြေးဖို့ အစီအစဉ် မရှိတဲ့ ဇာတ်လိုက်ဟာ ဘာကြောင့် ခိုးပြေးတဲ့ ကိစ္စတွေထဲကို ဝင်ပါလာရတာလဲ? ဖြစ်လာတဲ့ ပြဿနာတွေကို ဘယ်လို ဖြေရှင်းခဲ့ဲလဲ? စတဲ့အကြောင်း အရာတွေကို ကြည့်ရှုခံစားရမှာပါ။ အဲဒီအချက်တွေ အပြင် ဇာတ်လိုက်မင်းသားက မင်းသမီးအပေါ် ထားတဲ့အချစ်ကလည်း အတုယူစရာလေးပါပဲ။ ဇာတ်လိုက် မင်းသမီးရဲ့ မထုံသက်သေး အမှုအရာလေးကလည်း ကြည့်လို့ကောင်းပါတယ်။ ဟာသတွေလည်း ပါတဲ့အတွက် လုံးဝမပျင်းရတဲ့အပြင် ကြည်နူးဖို့ကောင်းအောင် ရိုက်ပြထားတဲ့ ဇာတ်ကားလေး တစ်ကားပါပဲ။ (သေချာတာကတော့ ဒီကားကြည့်ပြီးရင် ဘယ်လိုခိုးပြေးရမလဲဆို ကောင်းကောင်း သဘောပေါက်သွားမှာပါ…??)
Bollywood ရဲ့ လူငယ်မင်းသားတွေအကြောင်း ပြော ကြကြေးဆိုရင် Ranbir Kapoor မပါရင်ပြီးပြည့်စုံမှုရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူ့ဇာတ်ကား အများစုဟာ အလွမ်းအဆွေးဆောင်ပြီး မျက်ရည်ချူဖို့ များခဲ့ပါတယ်။ ဒီတစ်ချက်က ကျွန်တော်မနှစ်သက်တဲ့ အချက်ဖြစ်ပြီး သူ့ သရုပ်ဆောင်စရိုက် ပိုင်နိုင်မှုကိုတော့ Roctstar (2011) နဲ့ Sanju (2018) ဇာတ်ကားတွေမှာ ကြွေခဲ့ရပြန်ပါတယ်။အစကတော့ Rock သီချင်းတွေနဲ့ မနီးစပ်တာ တကြောင်း Drama ဆန်တဲ့ ဇာတ်လမ်းဖြစ်သည်က တကြောင်းကြောင့် မရေးချင်ခဲ့ပါဘူး ။ ကိုယ့်အရေးအသားမပြည့်စုံမှုက ဒီဇာတ်ကားကို စိတ်ဝင်စားမှု နည်းလာမှာလည်း မဖြစ်စေချင်ခဲ့ဘူး။ ဒီဇာတ်ကားဟာ အသွင်အပြင် ခမ်းနားစွာနဲ့ Rock စရိုက်ပီပြင်တယ်။ အဝတ်အစား ဝတ်ဆင်မှုက Ranbir နဲ့ စောက်ရမ်းလန်းနေတယ်။ ခေတ်စကားအရ ဂေါ်တယ် ပေါ့။ ဂီတာတစ်ဖက် နဲ့ လည်ပင်းကြော ထောင်လာသလို မြင်မိတာက ဒီဇာတ်ကားရဲ့ သံစဉ်တေးတစ်ပုဒ်ပါပဲ။ ဒီတစ်ချက်နဲ့ကြည့်ရဖို့ လုံလောက်ပါတယ်။ ဒီကားမှာ Ranbir ဇာတ်ကောင် နာမည်က JJ (Jordan ) ။ သူရဲ့ ကောလိပ်ဘဘဝက ရိုးရှင်းတယ်။ နည်းနည်းအူကြောင်ကြောင်နိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့မှာ အိပ်မက်တစ်ခုတော့ရှိတယ် ။ Jim Morrism ဆိုတဲ့ ဘဲကြီးကို Idol ထားပြီး သူ့လို အောင်မြင်ချင်တယ်။ Rock ဂီတ ကို ခပ်နက်နက်တေးသွားစာသားတွေနဲ့ သူ ပျံသန်းချင်နေခဲ့တယ်။ ( Jim Morrison ဆိုတာက Rock ဂီတရဲ့ ရှေ့ပြေးဆရာတစ်ဆူပါပဲ ။ ဆံပင်က အရှည် ဂီတာက တစ်လက် စီးကရက် တစ်ဖွာတရှိုက် နဲ့ သူ့ ပုံစံက ကြည့်ကောင်းနေခဲ့တဲ့ သူ။ Rock ဂီတနဲ့ နီးစပ်တဲ့သူတွေ ပိုသိပါလိမ့်မယ် ) ဒီလိုမျိုး Jim Morrison ကို ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ သူ့ အဖို့ Morrisonလို ဂီတသွေး ကြွနေဖို့လိုပါမယ်။ ကောလိပ်ကန်တင်းပိုင်ရှင်ကတော့ Jordan ကို ပြောရှာတယ်။ ” ကြေကွဲဖို့ကောင်းနေတဲ့ အခြေအနေဟာ အနုပညာသွေးဆာနေတဲ့ ကာလပဲ ” တဲ့။ ဒီတော့ Jordan စဉ်းစားတယ်။ သူ အသည်းကွဲနေမှဖြစ်မယ်လေ။ ဒါမှ သူ့သီချင်းတွေပြောင်မြောက်ရမှာပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ ကောလိပ်က အချောဆုံးဆိုတဲ့ ကောင်မလေး ကို လိုက်ရှာတယ်။ တွေ့မှလည်း တွေ့ရော အသည်းကွဲစက် လို့နာမည်ကြီးနေတဲ့ Heer ကိုမှ သွားတွေ့တယ်။ Jordan ကတော့ သူ့စိတ်ကူးနဲ့သူမို့ Heer ကို အသည်းအသန်လိုက်တယ်။ နောက်တော့ အသည်းကွဲတဲ့အထာနဲ့သီချင်းတွေ စွတ်ရေးတယ်။ Heer ကတော့ မကြိုက်တဲ့သဘော ရှိပေမယ့် ခင်မင်အောင်ပေါင်းတယ်။ Jordan က ရိုးရိုးအအ ဆိုတော့ Heer ခိုင်းသမျှပျော်အောင် လျှောက်လုပ်တယ်။ ဒီမှာမသိမသာလေး ခိုးဝင်လာမိတဲ့ သံယောဇဉ်နှောင်ကြိုးလေးတော့ တွယ်မိကြတာပါပဲ။ ” ဘဝဟာ သိပ်ထူးဆန်းတယ်။ တွေ့မှ ကြုံ ဆိုသော်လည်း ဆုံ ချင်မှ ဆုံဦးမှာလေ ” ဒီလိုနဲ့ တစ်နေ့မှာတော့ Heer က ပါရာဂွေး နိုင်ငံဆီ ထွက်ခွာသွားခဲ့တယ်။ အဲ့အချိန်မှာ Jordan က စောက်ရမ်းအသည်းကွဲပြနေပြီလေ။ သီချင်းတွေလည်း ပြောင်မြောက်လာပြီ။ တစ်နေ့မှာ သတင်းတစ်ခုက Jordan ကို နှိုးဆွလိုက်တော့တယ်။ ပါရာဂွေး နိုင်ငံဆီ လွှတ်ဖို့ အနုပညာရှင် ရွေးချယ်ပွဲ ကျင်းပမယ့် သတင်းပါပဲ။ ဒါဟာ သူ့အတွက် မဟာအခွင့်အရေးပါပဲ။ ဒီလိုနဲ့ Jordan တစ်ယောက် စိတ်ကူူးစိတ်သန်းတွေကြားထဲက Heer ကို ပြန်တွေ့ဖို့ ကိုယ့်ကံကြမ္မာကို ပြန်ဖန်တီးခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့ ……………။ ကဲ ……ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာတော့ မပြောပြတော့ပါဘူး။ ဒီဇာတ်ကား ရဲ့ တဆစ်ချိုးတွေဟာ အပြင်လောကနဲ့ နီးစပ်စေသလို ချစ်ခြင်းမေတ္တာရဲ့ လွတ်လပ်ခြင်းဆီကိုပါ ချဉ်းကပ်စေမိပါတယ်။ သံယောဇဉ် ရဲ့ နှောင်ကြိုးတွေနဲ့ လူ့လောက ကန့်သတ်မှုတွေကြားက စိတ်ခံစားမှုကိုပါ တရေးရေးမြင်လာမိစေတယ်။ အူတူတူ လေး Jordan နဲ့ နာမည်ကြီး ကာလ Jordan အသွင်အပြင် တွေက ခြားနားလာတယ်။ တစ်ဖက်မှာ အောင်မြင်လာသလို တစ်ဖက်မှာ ကျရှုံးလာတယ်။ ဒါဟာ လောကဓံရောင်ပြန်လေး တစ်ခုလိုပါ။ ဒီဇာတ်ကား ဟာ Ranbir ရဲ့ ခမ်းနားတဲ့ ကာရိုက်တာကြောင့် ကျော်ကြားလာသလို ဇာတ်ဝင်သီချင်းတွေကပါ အဓိပါ္ပယ် ပေါ်လွင်လှပါတယ်။ Drama ကားမို့ ကြည်နူးရမယ်။ ဝမ်းနည်းရမယ်။ နာကျည်းရမယ် ဆိုပေမဲ့ Jordan ရဲ့ ပြင်းပြတဲ့ စိတ်ဆန္ဒက ခွန်အားတွန်းပေးတဲ့ အထောက်အကူပါပဲ။ ဒါ့ကြောင့် ကြည့်သင့်တဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကားအဖြစ် ညွှန်းလိုက်ပါရစေဦးတော့။
IMDb Rating (7.2) ရရှိထားတဲ့ တမီးလ်ဇာတ်ကားပါ။ထူးခြားချက်ကတော့ မြန်မာပြည်ကို အခြေခံပြီးရိုက်ကူးထားတာပါ။ ဇာတ်လမ်းအညွှန်းကိုတော့ ဒီဇာတ်ကားကိုကြည့်ဖြစ်စေခဲ့တဲ့ ဗြိတိသျှကိုကိုမောင် Kyaw Swa Naing ရဲ့ Facebook ကနေကူးယူဖော်ပြညွှန်းပေးချင်ပါတယ်။ Rangoon ဆိုတဲ့ ကုလားကား။ ၁၉၈၈ မှာ မြန်မာပြည်ကနေ အိန္ဒိယကို ပြောင်းလာတဲ့ တမီလ်မိသားစုတစ်စုက ကောင်လေး။ အရွယ်ရောက်ပြီး ရပ်ကွက်ထဲ ဇ ရှိတဲ့ ဇိုးပေါက်စဖြစ်လာတဲ့အခါ ရွှေမှောင်ခိုလုပ်ငန်းရှင်ကြီးက ဆွဲစားလိုက်တယ်။ လုပ်ငန်းရှင်ကြီးရဲ့ လက်ရုံးဖြစ်လာတဲ့ သူတို့ သူငယ်ချင်းသုံးယောက်ဟာ ရန်ကုန်ကို ရွှေမှောင်ခို သွင်းဖို့…မိုးရေး-တမူးနယ်စပ်ကနေ တဆင့် ဝင်လာခဲ့တယ်။ ဇာတ်လိုက်ရဲ့ အဖေက တချိန်က ရွှေဘုံသာလမ်းက ရွှေပွဲစား ဆိုတော့ အခက်အခဲမရှိပဲ…ရန်ကုန်က သူတို့ ပို့ရမယ့် ရွှေ ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းရဲ့ ဥက္ကဌ ဆီ ရွှေတွေပို့နိုင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်..ရန်ကုန် က သူတို့တည်းတဲ့ ဟိုတယ်ကနေ ပြန်အထွက်မှာ..မြန်မာရွှေကုန်သည်ဘက်က လက်ငင်း ချေလိုက်တဲ့ ငွေသား သိန်း ၆၀၀ ပါတဲ့အိတ်ထဲမှာ စက္ကူတွေချည်းဖြစ်နေတဲ့အခါ….. ဇာတ်လမ်းကတော့ ဆက်ကြည့်ပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမယ့်…ဒီဇာတ်ကားမှာ ထူးခြားတာက…သူတို့ အိန္ဒိယပြန်ရောက်လို့ သူတို့သူဌေးကို သတင်းပို့တဲ့အခါ….ရန်ကုန်က လုပ်ငန်းရှင်က ပြန်ခိုးသွားတာဖြစ်မယ်လို့ပြောတယ်။ အဲ့ဒီမှာ သူဌေးက ဘာပြောလဲဆိုတော့… မင်းတို့ အခုပျောက်တယ်ဆိုတဲ့ သိန်း ၆၀၀ ဟာ မြန်မာပြည်က အဲ့ဒီသူဌေးရဲ့ မုန့်ဖိုးပဲ ရှိတာ..ဟိုက..လုပ်မလားတဲ့။ ကိုင်း…မြန်မာပြည်က သူဌေးတွေ ချမ်းသာချက်…ဘောလီးဝုဒ်ကတောင် ဂုဏ်ပြုရတယ်..။ Rangoon ဟာ ဟိုနေ့က ငွေခြောက်ထောင်ကုန်ခံပြီး ကျွန်တော်တို့ လင်မယားနှစ်ယောက်ကြည့်ခဲ့တဲ့ မြန်မာဂိုဏ်းစတားကားထက်တော့…စိတ်လှုပ်ရှားမှုပေးတာအမှန်ပဲ။ ဆူးလေ..ပန်းဆိုးတန်း…မဂိုလမ်း မြင်ကွင်းတွေနဲ့ မြန်မာစကားပြောပီပီသသတွေပါ…ကြားရမယ့်…ဇာတ်ကားပါပဲဗျိုး။
Rang De Basanti (2006)- ပါဝင်သူများ- Aamir Khan, Sharman Joshi, Kunal Kapoor, Siddharth Narayan, Atul Kulkarni, R.Madhavan, Soha Ali Khan “သေခြင်းတရားကို ပက်ပင်းတိုး ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါ တုန့်ပြန်တာချင်း မတူတာမှာ လူနှစ်မျိုးပဲ ကြုံဖူးတယ်… ပထမတစ်မျိုးက အသံ တစ်ချက်မှမထွက်ပဲ တည်ငြိမ်စွာ အသေခံတာရယ် ဒုတိယ တစ်မျိုးကျတော့ သေခြင်းတရားကို မချိတင်ကဲ ပြင်းထန်တဲ့ ဝေဒနာနဲ့ အော်ဟစ်ငိုယိုပြီး အသေခံသွားကြတာပဲ ရှိတယ်… ကျုပ်တစ်ဘဝစာ အတွေ့အကြုံကို လှုပ်ခါပစ်ခဲ့တဲ့ တတိယ တစ်မျိုး ကြုံတွေ့လိုက်ရတဲ့အခါ…” ဆိုပြီး အစချီထားတဲ့ အိန္ဒိယမှာ အင်္ဂလိပ်တွေ အုပ်စိုးတုန်းက ထောင်မှူး Mr. McKinley တစ်ယောက် သူ့ ဒိုင်ယာရီထဲမှာ ရေးထားခဲ့တဲ့ ထောင်မှာ ကြိုးမိန့်ကျနေတဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား သုံးယောက်ကို ထိန်းသိမ်းခဲ့ရစဉ်နဲ့ ကြိုးပေးခါနီး အဖြစ်သနစ်တွေကို ဖတ်ရတဲ့ သူ့သမီး Sue McKinley (တက်သစ်စ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူ) တစ်ယောက်က ဒီ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ဆိုသူတွေဟာ အိန္ဒိယ တော်လှန်ရေး သမိုင်းမှာ အထင်ကရ နာမည်ကြီး ကျော်ကြားခဲ့သူ တော်လှန်ရေး သူရဲကောင်းသုံးယောက် အကြောင်း Documentry ရိုက်ကူးမယ်လို့ စိတ်ပိုင်းဖြတ်ပြီး အိန္ဒိယမှာ နေတဲ့ သူ့သူငယ်ချင်း ဆိုနီယာဆီ ထွက်လာခဲ့တယ်။ (အခုဒီမှာ ဗိုလ်ချုပ် အကြောင်းဇာတ်ကား ရိုက်မယ် ဆိုသလိုပေါ့ဗျာ) အိန္ဒိယရောက်တော့ သူရိုက်မယ့် ဇာတ်ကား အတွက် ဇာတ်ကောင်နဲ့ ကိုက်ညီမယ့် သရုပ်ဆောင် ရှာတော့ ထင်သလောက် မလွယ်၊ ဒါနဲ့ စိတ်ပျက်လက်လျှော့ဖို့ ကြံနေတုန်း ဆိုနီယာ့ ကျောင်းနေဘက် သူငယ်ချင်းတွေကို သုံးပြီး ရိုက်ပါလားလို့ အကြံပေးတယ်။ ဒါနဲ့ သူက ဇာတ်ညွှန်းတွေ ရှင်းပြ ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေကို အစမ်းလေ့ကျင့်တဲ့အခါ ဒီလူတွေက ဘယ်လိုမှ ဈာန်မဝင်စားဘူး၊ လမိုင်းမကပ်ဘူးပေါ့ဗျာ။ အဲဒီအပြင် သူလာရိုက်တဲ့ ဇာတ်ကားဆိုတာ အပိုအလုပ်… သူ ‘သူရဲကောင်း’ တင်ရိုက်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ တကယ့်တကယ်ဘဝမှာ ဒီလိုလုပ်ခဲ့တယ် ဆိုတာ မခံစားတတ်ဘူး။ တိုင်းပြည် လွတ်လပ်ရေးအတွက် အသက်ပေး စွန့်လွှတ် စွန့်စားတယ် ဆိုတာက စာအုပ်ထဲက တော်ကီတွေ… ဘာအတွက် ဒီလောက် ရူးရူးမိုက်မိုက် လုပ်ခဲ့ကြသလဲ? ကဲတကယ် စွန့်လွှတ်ခဲ့သည်ပဲထားဦး သူတို့ အားထုတ်မှုရလဒ်က ဘာလဲ? အခုလို တိုင်းပြည် ဆင်းရဲတွင်းထဲ ရောက်အောင် ပို့ခဲ့တဲ့ သမိုင်းက အဖြေလား? ရမ်းချင်တိုင်းရမ်း ခိုးချင်တိုင်း ခိုးနေတဲ့ ဝန်ကြီးတွေ၊ အသုံးမကျတဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးစံနစ် တခု ဖြစ်လာဖို့ လုပ်ခဲ့တာ သူတို့ပဲ မဟုတ်လား… အဲသလို တွေဝေဖန်ပြီး ဟားတိုက်တာ ခံလိုက်ရရော။ ဒါက အစချီထားတဲ့ မိတ်ဆက်ဗျာ… ဇာတ်လမ်းကို ပြောပြဖို့ စိတ်ကူးမရှိပါဘူး… ကိုယ်တိုင်ကြည့်တဲ့အခါ ခံစားဖို့ ချန်ခဲ့ပါရစေ။ မှာချင်တာက ဒီဇာတ်ကား စကြည့်ဖြစ်ခဲ့ရင် အဆုံးထိအောင် ကြည့်စေချင်တယ်။ အစချီတာမှာ စိတ်ပျက်မသွားဖို့ပါပဲ။ ဒီဇာတ်ကား ရိုက်ကူးစဉ်နဲ့ ရိုက်ကူးပြီး နိုင်ငံရေးမှာ လှုတ်ခတ်သွားခဲ့တာတွေ အများကြီးပါ အဲဒီထဲက ထင်ရှားတာကတော့ မနေ့က ရန်ကုန် မြို့တော်ခန်းမရှေ့က Candle Campagne တွေလို Campagne တွေ အစပြုစေခဲ့တာ တစ်ခု အပါအဝင်ပါ။ ဇာတ်လမ်းက အသင့်ရှိနေတဲ့ ဝတ္တုတစ်ပုဒ်ကို ဟိုဒီ တည်းဖြတ် ဇာတ်ညွှန်းရေးပြီး ရိုက်ခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဇာတ်လမ်း ဖန်တီးဖို့ကို ၇နှစ်ကျော် ကြာခဲ့ပါတယ် ဆိုပါတယ်။ ဖန်တီးခဲ့တဲ့သူဟာ အပြင်မှာ ခေတ်လူငယ်တွေနဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံ ၇နှစ်ကြာ သုတေသနပြုရင်း ဒီဇာတ်လမ်းကို တဖြည်းဖြည်းချင်း အဆင့်ဆင့် ပြင်ဆင်တည်းဖြတ် ရေးသားခဲ့ရတယ်လို့ မှတ်ဖူးပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကား အကြောင်း ပြောရင် ပြောစရာတွေ အများကြီးပါ… ပြောလို့ ကုန်မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ မကြည့်ရသေးရင် ကြည့်စေချင်တဲ့ စေတနာရယ် ပြီးတော့ အခု လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံက အဖြစ်တွေနဲ့ တိုက်ဆိုင်တဲ့ အချက်တွေ တော်တော်များများ တွေ့မိတာရယ်ပါ။ အဲ.. ဒီဇာတ်ကားထဲ ဇာတ်တည်ထားတဲ့ နိုင်ငံရေး သူရဲကောင်း Bhagat Singh အကြောင်းသီးသန့် ကြည့်ချင်သပဆိုရင်တော့ 2002 မှာ ရိုက်ထားတဲ့ The Legend of Bhagat Singh ဆိုတဲ့ကားက သိပ်ပြောင်မြောက်ပါကြောင်း။
ဒီဇာတ်ကားလေးဟာ ၁၉၈၀ခုနှစ်များဆီက အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ အခွန်ဦးစီးဌာနအရာရှိတစ်ယောက်ရဲ့ အဖြစ်အပျက်ကိုအခြေခံရိုက်ကူးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆင်းရဲသားတွေဆီကခေါင်းပုံဖြတ်၊ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုတွေနဲ့ချမ်းသာလာပြီး တစ်ဖက်မှာလူအများအမြင်ကြည်အောင်ဘီလူးခေါင်းကွယ်ထားတတ်တဲ့ လူချမ်းသာတွေ၊ ပြည်သူတွေကိုအသုံးချပြီး ကိုယ်ကျိုးရှာတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေကို သူတို့ဆီမှာအမှန်တကယ် တရားဘောင်အတွင်းကနှိပ်ကွပ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်လေးကိုအခြေတည်ထားတာပါ။ရိုးသားပြီးကိုယ့်ခံယူချက်အတိုင်းလုံးဝတရားမပျက်တဲ့ အစိုးရအရာရှိတစ်ယောက်သူတို့ဆီမှာရှိဖူးတယ်ဆိုတာကို ရိုက်ကူးပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်သူတရားပျက်ပျက်ကိုယ်မပျက်ဘူးဆိုတဲ့သတ္တိနဲ့ အဆိုပါအခွန်ဦးစီးဌာနကအရာရှိတစ်ယောက် လက်နောင်းမြို့ကို၄၉ကြိမ်မြောက် ရာထူးပြောင်းရွေ့ခြင်းခံရပြီးရောက်လာတာကစတာပါပဲ။အရင်အရာရှိတွေနဲ့မတူပဲ အလုပ်ကိုအမှန်အကန်လုပ်တဲ့သူနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတော့ ဂုတ်သွေးစုပ်နေတဲ့ သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်ကြီးတွေ မျက်ဖြူလန်တော့တာပါပဲ။ ဇာတ်လမ်းလေးကိုဆက်မပြောတော့ဘဲကိုယ်တိုင်ပဲကြည့်လိုက်စေချင်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးသဘောသဘာဝတွေ၊ ရိုးသားတဲ့အစိုးရဝန်ထမ်းတွေနှိပ်ကွက်ခံရမှုတွေ၊ လူထုကိုနိုင်ငံရေးသမားတွေဘယ်လို ဦးနှောက်အဆိပ်ခတ်ထားသလဲဆိုတာတွေကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းရိုက်ကူးပြသပုံဖော်ထားတာကိုတွေ့ရမှာပါ။Rating အနေနဲ့လည်း 7.6 အထိရရှိထားပြီး ငွေကြေးအရလည်းအောင်မြင်ထားတဲ့ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်ကားလေးဖြစ်ပါတယ်
ရှမ်ရှာဆင်းန်ဟာ အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသမှာ အင်ပါယာ ကြီးတစ်ခုတည်ထောင်ပြီး လက်နက်နဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါးတွေ အ ရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်နေတာပါ။ရှမ်ရှာမှာ ဆန်ဂျာနာနဲ့ ဆူရက်ဂျ် ဆိုတဲ့ အမြွှာသားနှစ်ယောက်ရှိပြီး ဆီကန်ဒါဆင်းန်ကတော့ မွေးစား သားပါ။ရက်ရှ်က ဆီကန်ဒါရဲ့ လူယုံတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ရှမ်ရှာအင်ပါ ယာနဲ့ နီးစပ်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ရာနာဗီဂျေးဟာ ရှမ်ရှာရဲ့ စီးပွားပြိုင်ဘက်ဖြစ်ပြီး ရှမ်ရှာမိသားစု ရဲ့ စီးပွားရေးကို တစ်ချိန်လုံး ဒုက္ခ ပေးနေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။တစ်ရက်မှာတော့ မိသားစု ရှေ့နေဟာ အိမ်ကိုရောက်လာပြီး ဆန်ဂျာနာနဲ့ ဆူရက်ဂျ်တို့လည်း အသက် (၂၅)နှစ်ပြည့်ပြီမို့ ရှမ်ရှာက ဆီကန်ဒါကို သူပိုင်ဆိုင်သမျှ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ ဆန်ဂျာနာနဲ့ ဆူ ရက်ဂျ်တို့ကို တစ်ယောက် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းစီ ခွဲဝေပေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအခါမှာ မိသားစုထဲမှာ ပြဿနာလေးတွေရှိလာပြီး အမြွှာညီ အစ်ကိုနှစ်ယောက်က ဆီကန်ဒါ ကို မကျေနပ်လို့ တိုက်ခိုက်လာ တဲ့အတွက် ဆီကန်ဒါနဲ့ ပြဿနာ စပါတော့တယ်။ တကယ်တော့ ရက်ရှ်ဟာ ရှမ်ရှာရဲ့သားအရင်းဖြစ်ပြီး အကျင့်ပျက်နိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့ ပေါင်းနေကာ တစ်ရက်မှာတော့ ဆီကန်ဒါကို ရှင်းပစ်ခဲ့ပါတယ်။ ရှမ်ရှာဟာလည်း ဆီကန်ဒါရဲ့ မိဘတွေကို သတ်ပစ်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး အမြွှာညီအစ်ကိုက ဆီကန်ဒါရဲ့ ညီအ ရင်းတွေလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်ရှာနဲ့ရက်ရှ်ရဲ့ အကြံအ စည်က ညီအစ်ကိုအရင်းတွေ ကတောက်ကဆဖြစ်ပြီး အချင်းချင်းသတ်မိအောင် လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ သေပြီထင်ထားတဲ့ ဆီကန်ဒါက တစ်ရက်မှာတော့ ဗြုန်းဆို ပြန်ပေါ်လာပြီး ရက်ရှ်၊ ရှမ်ရှာတို့ သားအဖနဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့ခဲ့ပါ တော့တယ်။ဆီကန်ဒါတို့ ညီအစ်ကိုတွေ နဲ့ ရှမ်ရှာတို့ရဲ့ ပြိုင်ပွဲက ဘယ်လိုရလဒ်ထွက်မလဲ။ ဒုစရိုက်လောက ထဲက ရှမ်ရှာတို့တစ်တွေ ဘယ်လို ဇာတ်သိမ်းရမလဲဆိုတာ အမိုက် စားအက်ရှင်ဇာတ်ကွက်တွေနဲ့ ဆက်ကြည့်လိုက်ဦးနော်။ပါဝင်ထားသူတွေက Salman Khan၊ Anil Kapoor၊Bobby Deol၊ Daisy Shah၊Saqib Saleem၊ JacquelineFernandez စသူတွေပဲဖြစ်ပါ တယ်။
mmbusticketRace Film Seriesက အခုဆို Race3အထိရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပါပြီ(2008)မှာ Race 1 ထွက်ခဲ့ပြီး (2013)မှာ Race2ထွက်ခဲ့၍ ယခု (2018)မှာတော့ Race3ထပ်မံထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်ဇာတ်ကားတွေကတော့ Crime, Action, Drama ကားကောင်းတွေဖြစ်ပြီး အထူးသဖြင့် 1, 2က Ratingsပိုင်းလည်းကောင်းသလို ဇာတ်လမ်းလည်းဆွဲဆောင်မှုရှိလှပါတယ်။Race 3ကတော့ မကြည့်ရသေးလို့ ဘာမှမပြောလိုပါ။1,2 မှာတော့ ဆေ့ဖ်အလီခန်း၊ အနီလ်ကပူးရ်
တို့က အဓိကပါဝင်ခဲ့ပြီး ဇာတ်လမ်းကလည်း အလှည့်အပြောင်းများနဲ့ ဂျင်ပေါ်ကထုံးဆိုသလို
တယောက်နဲ့တယောက် ကျော်ခွရင်းအပြိုင်ဆိုင်ချဲကြတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတွေပါ။
ဇာတ်ဝင်သီချင်းခပ်မြူးမြူးတွေ၊ အက်ရှင်ခပ်လန်းလန်းတွေစတန့်အကွတ်တွေကိုမှ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက်Race 1, 2ကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။Race 3ကတော့ ရုံတင်ထားတာသိပ်မကြာသေးတဲ့အတွက် အကြည်ထွက်ဖို့ကြာဦးမှာမို့လို့ အကြည်၊ စာအမှန်ထွက်လာတာနဲ့ တင်ဆက်ပေးမှာပါ။အခုတော့ Race 1, 2ကိုပဲ ပြန်လည်ခံစားကြည့်လိုက်ကြပါဦး။
Raazi (2018) Blu-Ray 1080p 5.1 CH x264
MDB 7.5/ 10 &&& Rotten Tomatoes 100%2018 ထဲမှာ RT 100 အပြည့်ထိရထားတဲ့ ဘောလီဝုဒ်ကားဆိုလို့ Padman(2018)တကားပဲလားမသိဘူး ရှိသေးတယ်ဒီအချိန်မှာ ဒုတိယမြောက် RT 100% အပြည့်ရတဲ့ နောက်တစ်ကားနဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီးကို မိတ်ဆက်ပေးပါရစေRaazi ဒီကားမထွက်ခင်ကတည်းက ဒါရိုက်တာက Talvar(2015)ကိုရိုက်ထားတဲ့ Meghna Gulzar ဆို တော့ အရမ်းကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့တာအလီယာကိုကြိုက်တာကလည်း တကြောင်းကြောင့်ဒီကားလေးကို ဒီမှာရုံတင်မလားလို့ မျှော်လင့်ခဲ့ရပေမယ့်လည်း===========================================
ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ 1971 ခုနှစ် အန္ဒိယ-ပါကစ္စတန်စစ်ပွဲကာလမှာ အိန္ဒိယကို အဖက်ဖက်ကကူညီပေးခဲ့တဲ့ သူလျို၊ စုံထောက်များစွာရှိခဲ့ပါတယ်
အဲဒီထဲမှာ ပါကစ္စတန်ကို သတင်းပေးတဲ့ပုံစံံနဲ့ အိန္ဒိယရဲ့သူလျို ဟေဒါယက်ခန်းလည်း အပါအဝင်ပါ ဟေဒါယသ်ကဘယ်လောက်ထိ အရည်ချင်းရှိလဲဆိုရင် ပါကစ္စတန်တပ်မတော်ကဗိုလ်ကြီး ဆိုင်ယစ်(ဒ်)နဲ့ပါ မိတ်ဆွေတွေဖြစ်နေတဲ့အထိပါသူ့ကျန်းမာရေးကြောင့် နောက်ဆုံးသူမစွမ်းဆောင်နိုင်တော့တဲ့တာဝန်တစ်ခုကို သူ့သမီးဖြစ်သူ ဆဲ(ဟ်)မသ်ကို ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ဖခင်တစ် ယောက်အနေနဲ့ သမီးကိုဒီအလုပ်ခိုင်းလို့ဖြစ်ပါ့မလားဆိုပြီး ဒွိဟဖြစ်နေပြန်ပါတယ်“တိုင်းပြည်
ထက်အရေးကြီးတာ ဘာမှမရှိဘူး ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း မပါဘူး ”အသက် ၂၀ ကျော်အရွယ်မိန်းကလေးတစ်ယောက်က ဒီလိုပြန်ဖြေပြီး အိန္ဒိယအတွက် ပါကစ္စန်မှာသွားနေကာ သူလျိုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်ဗိုလ်ကြီး ဆိုင်ယစ်(ဒ်)ရဲ့သားအငယ် အစ်ဗလ်နဲ့ လက်ထပ်ပြီး အိန္ဒယသူအဖြစ်ကနေပါကစ္စတန်သူအဖြစ် ပြောင်းလဲကာ တိုင်းပြည်အတွက် သူလျိုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်သူလျိုတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ခက်ခဲတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေဆင်းရကိုယ့်မိဘ၊ အမိမြေနဲ့ခွဲကာ ပါကစ္စတန်မှာနေရ
တစ်ခါမှမဖြင်ဖူးမတွေ့ဖူးတဲ့လူနဲ့ လက်ထပ်လိုက်ရတဲ့ ဆဲဟ်မသ်ရဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်ဘဝဇာတ်ကြောင်းကို အမှန်အကန်တင်ဆက်ပေးထားလို့ကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်လိုက်ဖို့ တိုက်တွန်းပါရစေတကယ့်ကို Biography, Thriller တစ်ကားပြီပြီ ရင်တမမနဲ့ ဘောလီဝုဒ်ရဲ့ ထိပ်တန်း စုံထောက်ကားတစ်ကားလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ (ဇာတ်လမ်းအညွန်းနဲ့ဘာသာပြန်သူကတော့ ကိုဇော်ထူးပါ)
Raanjhanaa (2013)( အချစ်ဆုံး မင်းတစ်ယောက်သာ)
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••( Drama စစ်စစ် မှ သိပ်ကြိုက်တဲ့ သူတွေအတွက်တော့ အညွှန်း မလိုပါဘူး။ )အဖြောင့်အတန်း မရှိလှတဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေကြား မွန်းကြပ်နေတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ရဲ့ ပုံပြင်လေးပေါ့ဗျာ။ဒီဇာတ်လမ်းကို ကြားပြီးရင် မင်း ဟာ တစ်ခုခု ကို ခံစားဆုပ်ကိုင်လာမိမယ်။ ဆို့နင့်နင့် နဲ့ ဘ၀ တစ်ခုကို လက်ဝယ် ရချင်ရလာလိမ့်မယ်။ ဒါဟာ ကံ ကြမ္မာတစ်ခုရဲ့ စုတ်ချက်သီခြယ်ခြင်းတွေပါပဲ။Zoya ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးကို တစ်ဖက်သတ် ချစ်မိခဲ့တဲ့ ကောင်လေး Kundan ……… ပါးအချက်ပေါင်း 15 ချက်ရိုက်ခံပြီးမှ နာမည်လေးတစ်ခုကို မြတ်မြတ်နိူးနိုး သိခွင့်ရခဲ့တယ်။
ဒါပေမယ့် အကြိမ်ကြိမ် လွဲချော်နေတတ်တဲ့ ကံစီရင်ချက်က 16 ခါမြောက် ပါးတစ်ချက်ကို ထပ်မံ မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တယ်။ ဒါဟာ လူမျိုးဘာသာ ကွဲပြားမှုကြောင့် Zoya လက်ဖဝါးနုနု နဲ့
ရိုက်ခဲ့တဲ့ တုံ့ပြန် ချက်တစ်ခု ပါပဲ။Kundan က ဟင်ဒီ။ Zoya က မူဆလင်။ဒါပေမယ့် တဇွတ်ထိုး ဆန်တတ်တဲ့ Kundan အတွက်တော့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာမှာ လူမျိုးလည်းမရှိ ဘာသာ တရားလည်း မရှိခဲ့ပါဘူး။ Zoya ရှေ့ဆီကို အရောက်သွားပြီး လက်ကောက်ဝတ်ရဲ့ သွေးကြောထဲမှာ ချစ်ခြင်းတရား ရှိကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်မို့ Zoya ဟာ Kundan ရဲ့ အချစ်ကို လက်ခံခဲ့တယ်။ဘ၀ ရဲ့ ပျော်ရွှင်ခြင်းဟာ အခိုက်အတန့်ပဲလို့ ဆိုရမလား။ Zoya ရည်းစား ရနေပြီအကြောင်း
သူမ မိသားစုတွေက သိရှိသွားခဲ့တယ်။ အဆိုးဆုံးက လူမျိုး မတူတာပါပဲ။ဒီတော့ သူမ မိသားစုက Zoya ကို အလီဂတ်မြို့ဆီ ပို့ ဖို့ စီစဉ်လိုက်ပါတယ်။ရထားကြီး က တရွေ့ရွေ့ သွားရင်း ဝေးကွာခြင်းက အလွမ်းဆန်နေခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံး နှုတ်ဆက်စကား ဆိုနေခဲ့တဲ့ Kundan အတွက်တော့ ဒီမြင်ကွင်းဟာ ၈ နှစ်တာ ကြာခဲ့ပါတော့တယ်။အချိန်ကာလ အလီလီ။ဒါပေမဲ့ Kundan ရဲ့ ဘယ်ဖက်ရင်အုံထဲမှာတော့ အချစ်ဦး Zoya တစ်ယောက်တည်း ။ဒီလိုနဲ့ Zoya ပြန်လာချိန် မှာတော့ Zoya ရဲ့ ရင့်ကျက်မှုက Kundan အဖို့ ချစ်ခြင်းမရှိခဲ့တော့ဘူး။ငယ်ငယ် က ရူးသွပ်မှု တစ်ခုလို အချစ်ကို Zoya သဘောထားလိုက်တော့တယ်။ Kundan ကိုလည်း ခင်မင်သူ တစ်ဦး အဖြစ်နဲ့ပေါ့။Kundan ကတော့ အချစ်ကို
ပြန်လည် ကြိုးစားဆဲပါ။ ဒါပေမယ့် Zoya ရဲ့ ပြောပြချက် အရ သူ သိရတာက Zoya မှာ လူမျိုးဘာသာတူ ချစ်သူ တစ်ဦး ရှိနေပြီဆိုတာပါပဲ။သူမ ချစ်သူ ဟာလည်း အရှိန်အဝါ ကြီးတဲ့ လူငယ်ပါတီခေါင်းဆောင် တစ်ယောက် ပါ။ဘဝဟာ ပစ်မှတ်မရှိတဲ့ လေးတင်ပွဲလို အရာ ရာ ဟာ မျှော်လင့် ကွဲကြေစရာ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သို့ပေမဲ့ Zoya ပျော်ရွှင်စေဖို့ဆို ဘာမဆို ပေးဆပ်ဖို့ အသင့်ဖြစ်နေတဲ့ Kundan က တော့
Zoya နဲ့သူ့ ချစ်သူ ပေါင်းဖက်စေဖို့ ကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ဒီလိုအချိန်လေးမှာ
မမျှော်လင့်ထားတဲ့ အခြေအနေ နဲ့
ကြုံ ကြိုက် လာခဲ့တဲ့အခါမှာတော့ …………!!!!!( အညွှန်းကို ဒီမှာတင် ရပ်ထားပါရစေ။ ဇာတ်လမ်းက အညွှန်းထက် ပို လေးနက်သည်မို့
ပေးဆပ်အချစ်ကို ပိုမို ခံစားစေချင်ပါတယ်။ တကယ့် ရသ ဆန်တဲ့ အချစ်တွေ အကြောင်း သိမြင်ဖို့
ဒီဇာတ်ကားက လမ်းခင်းစေသလိုပါပဲ။ဒရာမာတွေ သိပ်မကြိုက်တတ်တဲ့ ကျွန်တော့်အတွက်တောင် ဒီဇာတ်ကားဟာ အရှိုက်ထိစေပါတယ်။
ပေးဆပ်ခြင်း ကြည်နူးခြင်းတွေနဲ့ မျှော်လင့်ခြင်းသဲ့သဲ့ ရှင်သန်နေတဲ့ လူတစ်ယောက်လို ဇာတ်ကားမှာ စီးမျောကြည့်ပါက ပိုအသက်ဝင်စေမှာပါ။ဆုတွေကလည်း7ဆု ရထားပြီး ဇကာတင် ဆု က 32 ဆုအထိ ထင်မြင်ချက်တွေရထားတဲ့ကားပါ။ဘ၀ ဟာ ပျော်ရွှင်စရာတွေနဲ့ ပြည့်မှာလား။ မျှော်လင့်ချက်သဲ့သဲ့လေးကို ခုခံမှုယဲ့ယဲ့လေးနဲ့ ဘယ်အချိန်ထိ ပေးဆပ်နိုင်မှာလဲ ဆိုတာ ကျွန်တော် တို့တွေးမိခဲ့ဖူးလား။ နှစ်နှစ်ကာကာနဲ့ လူတစ်ယောက်ကို ဘယ်လောက်ထိ ချစ်ခဲ့ဖူးကြပါလဲ။ဘဝဟာ တွေးတိုင်းမရောက် ရောက်တိုင်းလည်း မပြည့်ဝနိုင်သေးပါဘူး။ကျွန်တော် တို့ သင် တို့ ဘ၀ တွေကရော ?ဒါ့ပြင် သင်တို့ ကျွန်တော်တို့မှာရှိဖူးတဲ့ အချစ်ဆုံး တစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝကရော …………?ပဲ့ တင်သံ က ရှိပါတယ်။ဒါ့ထက် နှလုံးသားက ခံစားတတ်ဖို့ လို ခဲ့တာ မဟုတ်ပါ၏ လော။
Bollywood ပရိတ်သတ်တွေအတွက် ၂၀၁၇ထွက် အလန်စားတစ်ကားကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Magdheera , Anegan တို့လို ဇာတ်လမ်းတွေကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ လူတွေအတွက် အကြိုက်တွေ့စေမှာပါ။ Raabta ဆိုတော့ မြန်မာလို
ဆိုရင် ဆက်နွယ်မှု ညညဆို အိပ်မရပဲ အိပ်မက်ဆိုးတွေကနေလန့်လန့်နိုးနေတတ်တဲ့ ကောင်မလေး တစ်ယောက်သူ့အိပ်မက်ထဲမှာတော့ လူတစ်ယောက်ကို ကြိုးတုပ်ပြီး ရေထဲ ပစ်ချလိုက်သလိုလို
သူကိုယ်တိုင်ပဲ ရေနစ်နေသလိုလိုနဲ့ အိပ်နေရင်း လန့်လန့်နိုးတတ်တဲ့ ဆိုင်ရာ ဆိုတဲ့ ကောင်မလေး ပျော်ပျော်နေတတ်ပြီး တွေ့မရှောင် ဆော်ကြောင်တတ်တဲ့ ဘဝကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဖြတ်သန်းနေတဲ့ လူငယ်တစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့ ရှိဗ် ရှိဗ်ရဲ့
အကျင့်အတိုင်း ဆော်လိုက်ကြောင်ရင်း ဆိုင်ရာကို မြင်တွေ့ပြီး လိုက်ရင်းကနေ အမှန်တကယ် သံယောဇဉ်တွေ ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတော့ ဒီနှစ်ယောက်ရဲ့ ကြားကို ဇခ် ဆိုတဲ့ သူ တစ်ယောက် ရောက်လာတဲ့ အခါ့ ဇာတ်လမ်းက သာမန် သုံးပွင့်ဆိုင် အချစ်ဇာတ်လမ်းတွေလို မဟုတ်ပဲ အတိတ်ကအကြောင်းတွေ အလှည့်အပြောင်းတွေနဲ့ တကယ်ကို စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ခုလို့ ညွှန်းလိုက်ပါတယ်။
mmbusticketRace Film Seriesက အခုဆို Race3အထိရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပါပြီ(2008)မှာ Race 1 ထွက်ခဲ့ပြီး (2013)မှာ Race2ထွက်ခဲ့၍ ယခု (2018)မှာတော့ Race3ထပ်မံထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်ဇာတ်ကားတွေကတော့ Crime,
Action, Drama ကားကောင်းတွေဖြစ်ပြီး အထူးသဖြင့် 1, 2က Ratingsပိုင်းလည်းကောင်းသလို ဇာတ်လမ်းလည်းဆွဲဆောင်မှုရှိလှပါတယ်။Race 3ကတော့ မကြည့်ရသေးလို့ ဘာမှမပြောလိုပါ။1,2 မှာတော့ ဆေ့ဖ်အလီခန်း၊ အနီလ်ကပူးရ်တို့က အဓိကပါဝင်ခဲ့ပြီး ဇာတ်လမ်းကလည်း အလှည့်အပြောင်းများနဲ့ ဂျင်ပေါ်ကထုံးဆိုသလို
ဇာတ်ဝင်သီချင်းခပ်မြူးမြူးတွေ၊ အက်ရှင်ခပ်လန်းလန်းတွေစတန့်အကွတ်တွေကိုမှ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက်Race 1, 2ကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။Race 3ကတော့ ရုံတင်ထားတာသိပ်မကြာသေးတဲ့အတွက် အကြည်
ထွက်ဖို့ကြာဦးမှာမို့လို့ အကြည်၊ စာအမှန်ထွက်လာတာနဲ့ တင်ဆက်ပေးမှာပါ။အခုတော့ Race 1, 2ကိုပဲ ပြန်လည်ခံစားကြည့်လိုက်ကြပါဦး။ (ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ့ဘာသာပြန်သူကတော့ ကိုဇော်ထူး ပါ)
ရှီကာဟာ သားကိုချစ်တတ်လွန်းတဲ့ အဖေတစ်ယောက်ပါ။သူ့သားလေးနာမည်က
ပါတိ။ ပါတိ ဟာ ဂိမ်းချစ်တတ်သူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး
သူရဲ့စိတ်မှာတော့ မသေဆုံးနိုင်သည့် လူဆိုးဇာတ်ကောင်ပေါ်ထွန်းစေချင်ပြီး သူ့အဖေ
ရှီကာကတော့ သူရဲကောင်းကိုသာ အလေးထားလေသည်။ဒီလိုနဲ့ ရှီကာဟာ
နောက်တစ်ခါ တီထွင်သည့် ဂိမ်းတွင် ရာဝမ်း ဟူသော ဇာတ်ကောင်ကို ပုံဖော်ပေးခဲ့သည်။ရာဝမ်းဟာ စွမ်းအားမြင့် လူဆိုးဖြစ်ပြီး သူနဲ့
ယှဉ်ပြိုင်ရမည့် သူရဲကောင်းကား ဂျီဝမ်း။
ထိုသို့နှင့် ဂိမ်း အား ပွဲဦးမိတ်ဆက်ပွဲနေ့မှာတော့
ပါတိ ဟာ လူစီဖာ နာမည်ဖြင့် ဂျီဝမ်းဇာတ်ကောင်နေရာမှဝင်ကစားပြီး
ရာဝမ်းနှင့် တိုက်ခိုက်ပွဲ ဆင်နွှဲခဲ့သည်။ ဂိမ်းပွဲကား
ခက်ခဲလှသော်လည်း လူစီဖာ ပင် အနိုင်ရခဲ့သည်။ထိုအချိန်အခါသည် အိန္ဒိယပြည်၏ သိပ္ပံနည်းပညာလောကသည် ထွန်းကားနေပြီဖြစ်သည်။ ရောင်ခြည်စွမ်းအားတို့
အသုံးပြု၍ သက်မဲ့ကိုပင် ရုပ်လုံးဖော်နိုင်ခဲ့သည်။
ရောင်ခြည်တန်းများဖြင့် ဂိမ်းကို ထိန်းချုပ်ထားခဲ့သည်။ သို့သော် မမျှော်လင့်ဘဲ
ရောင်ခြည်တန်းတို့၏ စွမ်းအားဖြင့် ရာဝမ်း
ဇာတ်ကောင်အရုပ်သည်လည်း အသက်ဝင်လာသည်။ထို့နောက် ရာဝမ်းသည် လူစီဖာ Player အား ပြန်လည်ရှာဖွေပြီး အဆုံးသတ်မယ့်
ကြိုးစားချိန်တွေမှာတော့ ?????ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲ။ ရာဝမ်း အသက်ဝင်ပြီးနောက် ရှီကာတို့မိသားစု
ဘယ်လို အဖြစ်မျိုး ကြုံတွေ့ရမလဲ။
ရာဝမ်းကရော လူစီဖာ ကို တွေ့အောင်
ဘယ်လိုများ ကြိုးစားမလဲ။ ရာဝမ်းကိုရော
ဘယ်သူက တားဆီးမလဲ စတာတွေကိုတော့
ပရိသတ်ကြီး ရင်ခုန်ကြည့်လိုက်ပါဦး။ဒီဇာတ်ကားမှာတော့ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ပေမယ့်
လူသားတွေရဲ့ သဘာဝကိုတော့ မသွေဖယ်စေပါဘူး။ နိဂုံးလေးမှာတော့
သက်ရှိ နဲ့ သက်မဲ့ ကြား မေတ္တာတရားကို
ခေတ္တမျှ ငေးငိုင်စေတတ်သည် အထိ ကောင်းလှပါတယ်။ ကျွန်တော်တစ်ဦးတည်း
အမြင်ဖြစ်ပေမဲ့ ပရိသတ်လည်း ထပ်တူကျမလား
ဆိုတာတော့ ဒီကားလေးကြည့်ပြီးနောက် အဆုံးအဖြတ်ပေးကြစို့လားခင်ဗျာ။(ဇာတ်ကားအညွန်းကတော့ လင်းခယံ မှတင်ဆက်ထားတာပါ။)ဒီရုပ်ရှင်ကားကို CM Translator ကိုဟေဒိစ် မှ ဘာသာပြန်ပေးထားပါတယ်
မင်းသား Uday Chopra နဲ့မင်းသမီး Priyanka Chopra တို့အဓိကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့
Comedy / Romance အမျိုးအစား Bollywood ဇာတ်ကားတစ်ကားပါ။
ဒီဇာတ်ကားထဲက တချို့ အသုံးအနှုန်းလေးတွေကို သဘောကျမိပြီး
Connection မကောင်းသူများအတွက် Small File Size(355MB)ကိုပါတင်ဆက်ထားပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ဆိုဒ်က တင်သမျှ Movie Download Link ကို ပြန်တင်နေသည့် Blogger များ www.channelmyanmar.com ဟုပြည့်စုံစွာ Credit ပေးရန်ပန်ကြားအပ်ပါတယ်။
“ချစ်ခြင်းတရားဆိုသည်မှာ”“Qarib Qarib Singlle”မင်းသား အီရာဖန် နဲ့ မင်းသမီးချော ပါရာဗသီတို့ရိုက်ကူးထားတဲ့ဆွတ်ပျံ့ကြည်နူးဖွယ် ဘောလိဝုဒ်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ပါ။“ပါရာဗသီ”က ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ လင်ယောက်ျားသေဆုံးခဲ့ပြီး
အရွယ်ကောင်းမုဆိုးမလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ကာ”တစ်ပင်လဲမူ တစ်ပင်ထူ”ဖို့ မဝံ့မရဲဖြစ်နေရှာသူ “ဂျာယား”ဆိုတဲ့ သက်လတ်ပိုင်း ရုံးဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးတစ်ဦး အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။“အီရာဖန်”ကိုတော့ ဘဝမှာငယ်ချစ်ဦးတွေနဲ့ လွဲခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ တစ်ကိုယ်တည်းဧကစာရီကျင့်နေရရှာတဲ့ ကဗျာဆရာ “ဗီယောဂီ”အဖြစ်နဲ့ဘဝကြင်ဖော်ရှာဖွေနေသူ သနားစရာ တစ်ပင်တိုင်မင်းသားကြီးအဖြစ်တွေ့မြင်ရမှာပါ။
တစ်နေ့မှာတော့ ဂျာယားဟာ အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ ဖူးစာရှင်ရှာဖွေရေး ဝဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာ လူစိမ်းတစ်ဦးနဲ့ စကားစမည်ပြောဆိုအပြီးမှာတော့ ထိုသူနဲ့ အပြင်မှာတွေ့ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီလူစိမ်းကတော့ ဇာတ်လိုက်ကျော်ကြီး ဗီယောဂီပါပဲ။နှစ်ယောက်စလုံးက ၁၉၈၀ ခုနှစ်မတိုင်ခင်မှာ မွေးဖွားခဲ့သူတွေပီပီ အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ အရှက်အကြောက်ကြီးကြပုံချင်းတူပါတယ်။တစ်ယောက်ရင်ထဲက တစ်ယောက်ရဲ့ခံစားချက်ကို တစ်ယောက်က ဖွင့်ပြောဖို့ ဆိုတာက သူတို့အတွက်
တော့ အပြစ်ကြီးတစ်ခုကို ကျူးလွန်မိမယ့်အတိုင်းနှစ်ယောက်စလုံးက မဝံ့မရဲသူတွေပါ။“သူ့ရည်းစားဟောင်း သုံးဦးက ဗီယောဂီကို အခုထိစွဲလန်းနေကြတုန်းပဲ”လို့ ဗီယောဂီက ထုတ်ပြောမိတဲ့အခါ ဂျာယားက မယုံမကြည်ဖြစ်တဲ့အကြောင်း ငြင်းခုန်ကြရင်းနဲ့ ဗီယောဂီ ကသူ့ရီးစားဟောင်းတွေနဲ့ဂျာယားကို မိတ်ဆက်ပေးဖို့ အစီအစဉ်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးတော့ နှစ်ယောက်သားခရီးရှည်ထွက်ခဲ့ကြဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါတော့တယ်။သမားရိုးကျ အိန္ဒိယအက်ရှင်ကားတွေနဲ့မတူဘဲ ထူးခြားဆန်းသစ်တဲ့
ခရီးသွားအတွေ့အကြုံတွေ၊လူသားတွေရဲ့ ပင်ကိုယ်ရှိစမြဲဖြစ်တဲ့ အတ္တဝါဒအခြေပြု စဉ်းစားပုံတွေရယ်၊ ၁၉၈၀-၁၉၉၀ ခုနှစ်၂၀ ရာစုလူသားတွေရဲ့ အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါ အရှက်အကြောက်ကြီးစွာတုန့်ပြန်ပုံတွေကိုပါမြင်တွေ့ရမယ့် မြန်မာဆန်တဲ့ အိန္ဒိယဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင် မှားမယ်မထင်ပါဘူး။***ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ***
IMDb (8.2/10)Rotten Tomatoes (93%)
ဒီဇာတ်ကားကတော့ ၂၀၁၄ ခုနှစ်ရဲ့ အကောင်းဆုံး ဘောလိဝုဒ်ဇာတ်ကားအဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ကမ္ဘာနှင့်အဝှမ်း ဝင်ငွေများစွာရရှိခဲ့ပြီး စံချိန်တွေလဲချိုးခဲ့တဲ့ နာမည်ကြီးဇာတ်ကားပါ။ဘာသာတရား အယူဝါဒတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပြီး ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပွက်လောရိုက်အောင်ကိုငြင်းခုန်ခဲ့ကြပါတယ်။မင်းသား Aamir Khan ရဲ့မှတ်တိုင်ဖြစ်ခဲ့ပြီး မင်းသမီးကတော့ Anushka Sharma ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ အိန္ဒိယဟာ ပြသနာပေါင်းသောင်းခြောက်ထောင်နဲ့ နိုင်ငံပါကျွန်တော်ရှာတွေ့ခဲ့တဲ့ပြသနာက အမျိုးသမီးတွေဓမ္မတာလာတဲ့ ၅ရက်တာ ပြသနာပါဓမ္မတာလာပြီဆိုရင် အမျိုးသမီးတွေဟာ ဘာအလုပ်မှလုပ်ခွင့်မရှိဘဲ အိမ်အပြင်ထွက်ထိုင်နေရပါတယ်သန့်ရှင်းရေးအတွက်ကျလည်း အဝတ်စုတ်တွေသုံးနေကြတယ်ဒီကိစ္စကို ကျွန်တော့်မိန်းမလည်းလုပ်နေတာမြင်တော့ တခုခုလုပ်ဖို့ကြံမိပါတယ်။ အမျိုးသမီးတယောက်ကို ပဒ်အသုံးပြုခိုင်းခြင်းဟာ သူ့အတွက် အချိန် ၂လထပ်အပိုပေးလိုက်သလိုပါပဲ ရှင်းပြပါမယ်၁လကို ၅ရက်၊ ၁၂လဆို ရက် ၆၀၊ တနှစ်မှာ ၂လပါ။အမျိုးသားတွေကျတော့ တနှစ်မှာ ၁၂လရပြီး အမျိုးသမီးတွေမှ ဘာကြောင့် ၁၀လပဲ ရ,ရမှာလဲနာရီဝက်လောက်ပဲ အမျိုးသားတစ်ယောက်က အမျိုးသမီးတွေလိုသွေးထွက်ကြည့်လိုက်၊ တန်းသေပြီပဲ ”ဒီမိန့်ခွန်းကို အင်္ဂလိပ်ဝေါဟာရမကြွယ်မဝနဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ နယူးယောက်မြို့မှာဟောပြောခဲ့သူကတော့ ပဒ်မန်းလို့ အမည်တွင်ခဲ့တဲ့ လက်(ရှ်)မီးကန့် ချော်ဟန့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့ဘဝဇာတ်ကြောင်းကို ပုံဖေါ်ထားပြီး အိမ်ထောင်ကျပြီးချိန်မှသိပ်ချစ်လွန်းတဲ့ဇနီးဖြစ်သူရဲ့ ဒီဒုက္ခကိုဖြေရှင်းပေးဖို့ကြိုးစားရင်းအရူး၊ တဏှာရူး၊ လူညစ်ပတ် စသဖြင့်ပေါင်းစုံဝေဖန်အပြစ်တင်မှုတွေခံခဲ့ရပြီးနောက်ဆုံး သိပ်ချစ်ရတဲ့ဇနီးနဲ့ပါ ကွဲရတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဒါလည်း သူ့ယုံကြည်ရာကို ဇွဲမလျော့ဘဲ ကြိုးစားမှုကြောင့်လက်(ရှ်)မီးဟာ ပဒ်မန်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။သူဘဝမှာဘယ်လိုတွေ ခက်ခဲကြိုးပမ်းခဲ့ရလဲဘယ်သူတွေက အပြစ်တင်ကြပြီးဘယ်သူတွေက ကူညီပေးခဲ့လဲဆိုတာ သူ့ဘဝဇာတ်ကားကြီးမှာ ခံစားမှုပေါင်းစုံနဲ့ စီးမျောလိုက်ကြပါဦးဗျာ(#ဒီကားက အကြည်ထွက်တာကြာပြီဆိုပေမယ့် စာဖိုင်အမှန်မထွက်သေးလို့ မတင်ပေးနိုင်တာပါ အခုလည်း နားထောင်ပြီး ဘာသာပြန်ထားတာဖြစ်လို့လိုအပ်ချက်တွေရှိရင် သည်းခံပေးကြပါကုန်)
သမိုင်းရာဇဝင်အခြေခံ ဒရာမာကားအမျိူးအစား Padmaavat ရုပ်ရှင်ဟာ ဒါရိုက်တာ Sanjay,Ranveer နဲ့Depika တို့၃ ဦးအတူရိုက်ကူးတဲ့တတိယမြောက် ရုပ်ရှင်ကားဖြစ်ပါတယ်။ဒါရိုက်တာ Sanjay ဆိုတာဘောလီးဝုဒ်မှာ Classic ရုပ်ရှင်တွေကို ဦးစားပေးရိုက်ကူးအောင်မြင်သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၂၀ ကတည်းက စလ်မားန်ခါးန် နဲ့Aishwaray တို့ရဲ့ Hum Dil De Chup Ke Sanam၊ရှာရွခ်ခါးန် နဲ့Devdas စတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားကောင်းတွေကို ရိုက်ကူးပြီး ဘောလီးဝုဒ်ပရိသတ်တွေကို ညို့ယူဖမ်းစားနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ ဒါရိုက်တာတစ်ယောက်ပါ။ဒီဇာတ်ကား စရိုက်ကတည်းက ပြသနာပေါင်း သောင်းခြောက်ထောင်တက်ခဲ့ပြီး ရူတင်ဖျက်စီးခံခဲ့ရပါတယ်။ ဒါရိုက်တာ ပါးရိုက်ခံရပါတယ်။ဆက်တင်တစ်ခုလုံး မီးတင်ရှို့ခံခဲ့ရပါတယ်။မင်းသမီး ဒီပီကားနှာခေါင်းဖြတ်ပေး၊မုဒိမ်းကျင့်ပေး၊ခေါင်းဖြတ်ပေးရင် ရူပီ ကုဋေ ဘယ်လောက်ပေးမယ်၊ဒါရိုက်တာ ခေါင်းဖြတ်ပေးရင် ရူပီး ၅ ကုဋေပေးမယ် စသဖြင့်အကြီးအကျယ် ခြိမ်းခြောက်ခံခဲ့ရပြီး ကျော်လွှားခဲ့ရတဲ့ ရုပ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇာတ်ကားဟာ မွတ်စလင်မ်ဘုရင်တစ်ဦး နဲ့ဟိန္ဒူဘုရင့်မိဖုရားတို့အကြား လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၅၀၀ ကျော်က ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ ရာဇဝင် တစ်ခုကို အခြေခံရိုက်ကူးထားပြီး ရာဇဝင်မှာ မွတ်စလင်မ်ဘုရင်ကဟိန္ဒူဘုရင်နဲ့မျိူုးနွယ်တွေအပေါ် မတရား၊အနိုင်ကျင့်၊စော်ကားခဲ့မူ တွေကြောင့် ရားဂျ်ပူးသ် ဟိန္ဒူမျိုးနွယ်ဝင်တွေဟာ နှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီမွတ်စလင်မ်ဘုရင်ကို မုန်းတီးခဲ့ကြတာပါ။ဇာတ်လမ်းကတော့ သမိုင်းဖြစ်ရပ်မှန်နဲ့ထပ်တူမဖြစ်ပါဘူး။ရုပ်ရှင်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် ပရိသတ်စိတ်ဝင်စားနိုင်မဲ့ ဇာတ်ညွှန်းကိုပြင်ဆင်ရေးသားပြီး ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းကို Ranveer Singh နဲ့စထားပါတယ်။Ranveer ဟာသူ့ဦးလေးဖြစ်သူ ဒေလီရဲ့ဘုရင် Sultan Jallaluddin Khilji နဲ့လာရောက်တွေ့ဆုံပြီး ဦးလေးရဲ့ သမီး Aditaya Rio ကို တောင်းပါတယ်။Aditya ကလည်း Ranveer ကို ကြိုက်နေတဲ့အတွက်သူတို့၂ ဦးကို ဘုရင်က လက်ထပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။မင်္ဂလာဆောင်တဲ့ နေ့မှာတောင် ရန်ဘီးက တခြားမိန်းမတွေနဲ့ပျော်ပါးနေလို့မျိုးနွယ်ထဲက လူကြီးတစ်ဦးက တားတဲ့အခါ အဲ့လူကို သတ်ပစ်ပြီး မင်္ဂလာဆောင်ခန်းမကိုဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့နေ့ကစပြီး Adiya ဟာ Ranveer ပေးတဲ့ ဒုက္ခတွေကိုခါးဆီးခံရတော့တာပါပဲအဲ့အချိန် တဖက်မှာတော့ Depika (ဘုရင့်သမီးတော်)ဟာတောထဲ အမဲလိုက်နေရင်း သမင်တစ်ကောင်ကို မြှားနဲ့ပစ်ရာမှာ ရှာဟိဒ်ကပူးရ်(Rajput ဘုရင်)ကို မှားပြီးပစ်မိရာကနေ ၂ ယောက်ဆုံကြပါတယ်။သူ့ကြောင့် ဒါဏ်ရာ ရနေတဲ့ ရှာဟိဒ်ကို ကုသပေးရာကနေ သူတို့၂ ယောက် ချစ်ကြိုက်ပြီး လက်ထပ်လိုက်ကြတယ်။ရှာဟိဒ်မှာ မယားကြီးရှိပေမဲ့ ရှာဟိဒ် ဒီပီကားနဲ့လက်ထပ်တာကိုကြိုပြီး မသိခဲ့သလို နန်းတော်ကို ခေါ်လာတော့မှ မယားကြီးက သိရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့Depika ရဲ့ အလှ နဲ့လိမ္မာရေးခြား ရှိမူကြောင့် Rajput တိုင်းပြည်မှာ Padmavati မင်းသမီးကို ဘုရင်နဲ့တန်းတု ချစ်ခင်လေးစားလာကြပါတယ်။(ဒီနေရာမှာ အိန္ဒိယမှာရှိတဲ့ မွတ်စလင်မ်/ဟိန္ဒူ ဘုရင်တွေ အကုန်မိန်းမတွေ လိုချင်သလောက်ယူပြီး မယားငယ်ယူပြီးရင် မယားကြီး ချောင်ထိုးခံရတာ၊မိန်းမတွေမှာ စောဒကတက်ခွင့်မရှိတာ၊သူတို့ကိုတလေးတစား အသိပေးတိုင်ပင်တာမျိုးမရှိ စတာတွေကတော့ တူညီတာ တွေ့ရပါတယ်။)အဲ့နောက်မှာတော့ Rajput နယ်ကြီးပျက်သုန်းဖို့အကြောင်းခံဖြစ်လာမဲ့ ဂုရုကြီးလို့ခေါ်တဲ့ ရှာဟိဒ်ကပူးရ် ကိုးကွယ်တဲ့ဘုန်းကြီးတပိုင်းလူတပိုင်းဆီ ဒီပီကားကို ခေါ်သွားပါတယ်။ဒီပီကားအလှကိုမြင်ပြီး ဂုရုကြီး နှာဗူးထကာ ညဘက်ရှာဟိဒ်နဲ့ဒီပီကား မင်္ဂလာဦးညကို သွားချောင်းတာ မိပြီးပြည်နှင်ဒါဏ်ပေးခံလိုက်ရပါတယ်။တဖက်မှာလည်း ရန်ဘီးကတိုင်းတွေပြည်နယ်တွေကို စစ်ခင်းပြီး အနိုင်တိုက်ရာမှ နံမည်ကြီးလာပြီး ဦးလေးလည်းတော်ပြီး ယောက္ခထီးလည်းတော်စပ်တဲ့ဒေလီဘုရင်ကို ဖြားယောင်းပြီး သတ်ပစ်ကာ ထီးနန်းကို သိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်။Rajput ကနေ နှင်ထုတ်ခံရတဲ့ ဂုရူကြီး ဒေလီကိုရောက်လာပြီး နှာဗူးဘုရင် ရန်ဘီးကို ဒီပီကားရဲ့အလှအကြောင်း သွေးထိုးပါတော့တယ်။အဲ့မှာ ရန်ဘီး heat တက်ပြီး Rajputကို စစ်ချီပါတယ်။၆ လတိတိ ဝိုင်းထားတယ်။စစ်လည်းမတိုက်ရ၊ဘာကြောင့်မှန်းမသိ ကွင်းပြင်ထဲ ၆လကျော် ဒုက္ခခံနေရတဲ့အောက်ခြေစစ်သည်တွေ စိတ်ပျက်ပြီး ပြန်မယ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်စစ်သူကြီးက ရန်ဘီးကို လာပြောပြတယ်။အဲ့မှာ ဘုရင်တွေ၊စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေ အောက်ခြေစစ်သားတွေကို ဂျင်းထည့်တဲ့အလုပ်ကို ရန်ဘီးက ထွက်လုပ်ပါတယ်။ဒီကိုရောက်နေတာ မိန်းမတစ်ယောက်ကို နှာဗူးကြဖို့ဆိုတာမသိတဲ့ အောက်ခြေစစ်သားတွေကို ခပ်တည်တည်နဲ့ရန်ဘီးက မိန့်ခွန်းပြောပါတယ်။ငါတို့ခိရ်ဂျီမျိုးနွယ်တွေမှာ အိပ်မက်တစ်ခုရှိတယ်။ငါတို့ရဲ့ ဘာသာရေးအမှတ်အသားပါတဲ့အလံကို တလောကလုံးမှာ စိုက်ထူနိုင်ဖို့ပဲ။အဲ့အတွက်ဘယ်လိုအခြေအနေပဲ ဖြစ်ဖြစ် ငါတို့တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်လက်မလွှတ်ရဘူးလို့ကျိန်ဆိုထားကြတယ်။ဒါပေမဲ့ ဒီကနေ့တော့မင်းတို့က ငါ့ကိုထားပြီးထွက်သွားကြတော့မယ်။ကောင်းပြီ ငါတို့ရဲ့ အိပ်မက်ကို မေ့လိုက်ကြတာပေါ့ဆိုပြီး အလံကို မြေကြီးပေါ် ပစ်အချ စစ်သည်တွေက ရန်ဘီးရဲ့ အမျိုး၊ဘာသာ မျိုးချစ်စိတ်စတဲ့ ဂျင်းကို တကယ်ထင်ပြီး ဝေးဝါးအော်ပြီး မပြန်ကြတော့ဘူး။နောက်ဆုံး ဟိုလီပွဲတော်နေ့ရောက်တဲ့အချိန် ချစ်ကြည်ရေးလုပ်ကြရအောင်ဆိုပြီး ရန်ဘီးက အကြံနဲ့ကမ်းလှမ်းပြီးရှာဟိဒ်ကပူးရ်ရဲ့ နန်းတော်ကို ဧည့်သည်အဖြစ်သွားတယ်။အဲ့မှာ ဒီပီကားကို ပြပါလို့ပြောတော့ ရှာဟိဒ်က ဒေါသထွက်၊နောက်ဆုံး စစ်ပွဲက ရှောင်လွှဲဖို့ဒီပီကားကို ၅ စက္ကန့်မှန်ထဲကနေ အပြ နေထိုးတဲ့ လိုက်ကာကိုပါ ဖွင့်လိုက်တော့ ဒီပီကားမျက်နှာကိုသေချာတောင် မမြင်လိုက်ရဘူး။အဲ့လောက် အဖြစ်သည်းလားဆိုပြီး ရှာဟိဒ်ကို ဖျားယောင်းပြီး ရန်ဘီးဖမ်းခေါ်သွားတယ်။ရှာဟိဒ်ကို ပြန်လိုချင်ရင် ဒီပီကား ဒေလီကိုလာရမယ်ဆိုပြီးတောင်းဆိုတော့ ရှာဟိဒ်ကိုကယ်ဖို့ဒီပီၤကားဒေလီသွားတယ်။ဒီပီကား ဒေလီမရောက်ခင် ရန်ဘီးပျော်ပြီး သီချင်းတပုဒ်နဲ့အရူးလိုပဲ ကတယ်။အဲ့မှာ သူ့ရဲ့တူက သူ့ကို ပြန်လုပ်ကြံ ပေမဲ့ မအောင်မြင်ဘူး။ဒီပီကား ဒေလီရောက်တော့ ရန်ဘီးရဲ့ အနှိပ်စက်ခံဇနီး Adiyaအကူအညီနဲ့ရှာဟိဒ်ကိုဒီပီကား ကယ်ထုတ်လာနိုင်တယ်။ရန်ဘီးသိတော့ သူ့မိန်းမကို သတ်မိန့်ပေးတယ်။အဲ့မှာနောက်ဆုံးအနေနဲ့Adiya က ရန်ဘီးကို ဆုတခုပေးတယ်။နင့်ရဲ့ ဆန္ဒတွေ၊ဖြစ်ချင်တာတွေ အားလုံးပြည့်ဝပါစေ။ဒါပေမဲ့Padmavati ကို ရယူသိမ်းပိုက်ဖို့ဆန္ဒတော့ ဘယ်တော့မှ မပြည့်ပါစေနဲ့လို့ပြောပြီး သွားလိုက်တယ်။ရန်ဘီးဒေါသပုန်ထပြီး Rajput ကို စစ်ခင်းဖို့ထပ်အသွားးးဘာတွေဆက်ဖြစ်လဲ၊ဒီပီကားးကို နောက်ဆုံး ရန်ဘီးမြင်ခွင့်တွေ့ခွင့်၊သိမ်းပိုက်ခွင့်ရမလားးဆိုတာကတော့ဇာတ်လမ်း၊သရုပ်ဆောင်၊ဆက်တင်အပြင်အဆင် ဘာတစ်ခုမှပြောစရာမလိုလှအောင် လှပ၊သေသပ်၊အဆင့်မြင့်တဲ့ ရုပ်ရှင်တစ်ကားးဖြစ်တာမို့ပြသနာပေါင်းများစွာတက်ပြီး ရုပ်ရှင်ကြည့်တဲ့သူတွေနဲ့ရုပ်ရှင်ရုံတွေကို တိုက်ခိုက်မယ်လို့ခြိမ်းခြောက်ခံထားရတာတောင် ဖွင့်ရက် ရုံတင်တာ ကုဋေ ၂၀ နီးပါးရပါတယ်။ဒါတောင် ပြည်နယ်ကြီး ၆ ခုမှာ ရုံတင်ခွင့်မရပါဘူး။ဒီဇာတ်ကားနဲ့ပတ်သတ်ပြီး BBC ကနေတောင် ရီဗြူးသတင်း လွှင့်ပေးခံရပြီး အိန္ဒိယမှာတင်မက တကမ္ဘာလုံးမှာပါ လှုတ်ခတ် ခဲ့ပါတယ်။
မိုးတွေ သဲကြီးမဲကြီးရွာတဲ့ တစ်နေ့မှာ အာနက်ဘ်နဲ့ သူ့မိဘတွေဟာ အာနက်ဘ်အတွက် သတို့သမီးလောင်းလေးနဲ့ တွေ့ဆုံ မင်္ဂလာစကားပြောဆိုပြီး မြို့ပြင် တောတစ်နေရာကို ဖြတ်သွား တုန်း တစ်စုံတစ်ခုကို ကားနဲ့တိုက် မိခဲ့ပါတယ်။ အိမ်ခြေရာမဲ့ လျှောက်သွားနေပုံရတဲ့ အဘွား အိုတစ်ဦးကို တိုက်မိတာဖြစ်ပြီး နေရာမှာတင် ပွဲချင်းပြီး သေဆုံး သွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒါနဲ့ပဲ အာနက်ဘ်ဟာ ရဲတွေကို အကြောင်းကြားပြီး အနီးအနားမှာ အဘွားအိုရဲ့ အိမ်ကို လိုက်ရှာတဲ့အခါမှာ အိမ်ထဲမှာ ထူးဆန်းတာတစ်ခုနဲ့ တွေ့ခဲ့ပါ တယ်။ အဘွားအိုရဲ့ သမီးဖြစ်တဲ့ ရက်ခ်ဆာဟာနာဆိုတဲ့ မိန်း ကလေးကို လက်ထိတ်ခြေထိတ် တွေခတ်လျက်သားနဲ့ တွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပြီး မိန်းကလေးကြည့်ရတာ မူမမှန်ဖြစ်နေကာ အပြင်လောကနဲ့ လုံးဝအဆက်အဆံမရှိတဲ့ ပုံစံ မျိုးဖြစ်နေတာပါ။သ ေသွားတဲ့ အဘွားအိုအ တွက် ဓလေ့ထုံးတမ်းအတိုင်း သဂြုႋဟ်ပေးပြီးနောက်မှာတော့ အာနက်ဘ်ဟာ ရက်ခ်ဆာဟာနာ ကို သူ့အိမ်ကို ပြန်ပို့ပေးခဲ့ပါတယ်။ နောက်တော့ ပါမောက္ခကာဆင် အလီဆိုသူဟာ မိန်းကလေးရဲ့ သရုပ်မှန်ကိုသိတဲ့လူတွေနဲ့အတူ မိန်းကလေးကို ဖမ်းဆီးဖို့အတွက် ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာ ရက်ခ်ဆာဟာ နာဟာ ထွက်ပြေးခဲ့ပြီး အာနက်ဘ် ဆီကို ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ အာနက်ဘ်အိမ်မှာနေရင်း ရက်ခ် ဆာဟာအနားမှာ တစ်စုံတစ် ယောက်ရှိနေတဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ အ ခြောက်အလှန့်တွေ စတင်ကြုံ တွေ့ရပါတော့တယ်။ သေသွားတဲ့ အဘွားအိုနဲ့ ရက်ခ်ဆာဟာတို့က ဘယ်လို ဆက်စပ်မှုတွေရှိနေတာလဲ၊ အာ နက်ဘ်အိမ်မှာ တွေ့နေရတဲ့ ဒဏ်ရာတွေနဲ့ မိန်းကလေးက ဘယ်သူဖြစ်မလဲ၊ ရက်ခ်ဆာဟာ နာရဲ့ သရုပ်မှန်က ဘာဖြစ်မလဲဆို တာကိုတော့ ရင်ဖိုစိတ်လှုပ်ရှား ရင်း ဆက်ကြည့်လိုက်ဦးနော်။ပါဝင်ထားတဲ့ သရုပ်ဆောင် တွေကတော့ Anushka Sharma, Parambrata Chatterjee, Rajat Kapoor, Ritabhari Chakraborty တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အောက်တိုဘာ တဲ့ ရုပ်ရှင်နာမည်ကစွဲဆောင်မှုမရှိသလိုပါပဲ။ဒါပေမယ့် IMDB Rating 7.9 ရရှိထားပြီး Rotten tomato ကတော့ 86% ရရှိထားပါတယ်။Rating မြင့်သလောက်လဲဇာတ်ကားက အရမ်းစွဲဆောင်မှုရှိပြီး အဓိပ္ပါယ်ရှိပြီး ကြည့်ရတာတန်တဲ့ဇာတ်ကားတစ်ကားပါ အာမခံနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော့်အနေနဲ့ဆိုရင် ဆရာမြသန်းတင့်ရဲ့ လေလွင့်သူကို Romance Version နဲ့ဖတ်လိုက်ရသလိုခံစားရပါတယ်။လူငယ်တွေ ကြည့်ကိုကြည့်သင့်တဲ့ကားလို့ပြောရင်မလွန်ဘူးထင်ပါတယ်။ အပူအပင်မရှိတဲ့ ဟော်တယ်အလုပ်သင်ဝန်ထမ်း ၂၁ အရွယ် Dan တစ်ယောက် သူ့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်လည်းဖြစ်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အတူတူ အေးအတူပူအမျှပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေနေတုန်းမှာပဲ သူ့ရဲ့ဘဝဟာအကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။သူနဲ့နီးစပ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Shiuli တစ်ယောက်တိုက်ပေါ်ကကျပြီးကိုးမားဖြစ်သွားခဲ့တာပါပဲ။အဲဒီဖြစ်ရပ်ကို စိတ်ခံစားလွယ်တဲ့ Dan တစ်ယောက်ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရလဲဆိုတာကိုဇာတ်အိမ်ဖွဲ့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ ဒီဇာတ်ကားက အချစ်ဇာတ်လမ်းမဟုတ်ပါဘူး ဒါပေမယ့် အချစ်အကြောင်းကိုပြောပြထားတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။
mmbusticketMDb rating : : 5.5ဒီတစ်ခေါက်တော့. . .CM ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက် အမီတာဘဂျမ်းရဲ့ ဒရမ်မာ ကားကောင်းကောင်းလေး တစ်ကားနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါရစေ . . .ဒီကားကအသက်ခြောက်ဆယ်အရွယ်လူအိုကြီးတစ်ယောက်နဲ့ အသက် ၁၈ နှစ်အရွယ် ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကြားက ပက်သက်ဆက်နွယ်မှုကို လှလှပပနဲ့ ရိုက်ကူးပြထားတာပါOld But Gold ဇာတ်ကား တစ်ကားဖြစ်တာမို့. . .ဇာတ်လမ်းအညွှန်းအစားဒီကားကြည့်ပြီး ခံစားမိတာလေးကို ရေးပေးလိုက်ပါရစေ. . .တစ်ခါတစ်လေကျတော့ အချစ်ဆိုတာ ဆန်းကြယ်သားနော်. . . အသက် အရွယ်တစ်ခုရလာတဲ့လူတစ်ယောက်က အပျော်တွေနောက်ကို(ဝါ) ပျော်ရွှင်မှုနောက်ကို မလိုက်နိုင်တော့ဘူး. . .အနှောင်အဖွဲ့တွေ. . .နိစ္စဓူဝအလုပ်တွေ. . .ဗာဟီရတွေ. . .စားဝတ်နေရေးအတွက် ကြိုးစားရုန်းကန်နေရတာတွေ ကြားမှာကိုယ့်ရဲ့ ပျိုမြစ်နုနယ်မှုတွေ ပေးဆပ်လိုက်ရတယ်ဆိုတာ သတိထားမိလာတဲ့ တစ်နေ့. . .ဟိုးအရင်လို ကိုယ်ပြန်မငယ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတာ တစ်ထစ်ချ လက်ခံလိုက်တဲ့အချိန်ဟာ. . .ကလေးသူငယ်တွေ. . .နုပျိုငယ်ရွယ်သူတွေကို မနာလိုဖြစ်မိတဲ့အချိန်ပါပဲ တဲ့. . .အချစ်ဆိုတာကို အသက်အရွယ်တို့ . .အိမ်ထောင်ရှိခြင်း မရှိခြင်းတို့နဲ့လားလားမှ မသက်ဆိုင်ပဲ. . .နှလုံးသားက ဖြစ်တည်လာတဲ့အတိုင်းလေးလက်ခံယုံကြည်လိုက်ချိန်မှာ. . .မိမိမှာရှိတဲ့ အိမ်ထောင်ရေး. . .ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ လေးစားမှုမိမိရဲ့သားသမီးတွေနဲ့ ဇနီးသည်. . .ဒါတွေအားလုံး ကိုယ့်အနားက လွင့်စင် ပျောက်ကွယ်သွားတယ်ဇနီးသည်ကဒါဟာ ဖောက်ပြန်မှုတဲ့အိုကြီးအိုမနဲ့ ကိုယ့်သမီးအရွယ်ကိုမှကြံရက်လေခြင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကနွားအိုမြက်နုကြိုက်တဲ့. . .ချစ်ရသူ ကိုယ်တိုင်ကမိမိကို ကြောင်သူတော်ကြီးတဲ့အမျိုးမျိုး သမုတ်ကြလေရဲ့. . .အို. . .ဒီလောက် သန့်စင်တဲ့ အချစ်ကိုများအဓိပ္ပာယ်အမျိုးမျိုး ဖွင့်နေလိုက်ကြပုံ. . .တကယ်တော့ အချစ်ဟာသူ့အတိုင်းလေးဆို ဒီလောက်အထိလည်းအရောင့်မရင့်ပါဘူးဒီလောက်အထိလည်း အကျည်းမတန်ပါဘူးရိုးရိုးလေးပဲ မြင်ကြည့်လိုက်တော့. . .အချစ်ဆိုတာ. . .သူ ကိုယ့်အနားမှာ ရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေ. . .သူ့ရယ်သံလွင်လွင်လေးတွေ သူ့ရဲ့ ဖြူစင်တဲ့ ပုံရိပ်ကလေးတွေသူသွားတတ်တဲ့ နေရာလေးတွေနဲ့သူ့အငွေ့အသက် သင်းပျံ့နေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာနေဝင်ချိန်အထိ ပျော်ပျော်ကြီးထိုင်စောင့်ရင်း အချိန်ကုန်မှန်းမသိ ကုန်သွားရခြင်းနဲ့ပဲကျေနပ်နေမိတာမျိုးပါ. . .ဒီလို နူးညံ့လှတဲ့ အချစ်ကားတစ်ကားကိုလှပတဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့အရောင်အသွေးစုံလင်တဲ့ဖန်သားပြင်ထက်မှာ ခံစားအားပေးကြပါဦး..
2015 တုန်းကထွက်ခဲ့တဲ့ Baby ဇာတ်ကားရဲ့ Spin-off movieပါ။ ယုတ္တိရှိရှိရိုက်ထားတဲ့အက်ရှင်ကားပါ။ဘောလိဝုဒ်အသည်းစွဲမင်းသား Akshay Kumar လည်း ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။Baby ဇာတ်ကားရဲ့ Back story ပါ။Baby mission မတိုင်ခင်က အေးဂျင့်မလေး ရှဘနားရဲ့ဘဝအကြောင်းကိုပုံဖော်ရိုက်ကူးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ခက်ထန်ကြမ်းတမ်းလှတဲ့ဘဝကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ရှဘနားဆိုတဲ့မိန်းကလေးက သူ့ရဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံး ပျော်ရွှင်မှုကင်းမဲ့စွာ မရယ်မပြုံးပဲနေနေခဲ့ပါတယ်။သူငယ်ချင်းဖြစ်သူက ချစ်ခွင့်ပန်လာတဲ့အခါမှာတော့ ရှဘနားရဲ့မရယ်မပြုံးဘဲခက်ထန်နေရတဲ့အကြောင်းအရင်းကိုမမျှော်လင့်ပဲသိလိုက်ရပါတော့တယ်။သူငယ်ချင်းကောင်လေးကဖွင့်ပြောလိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ သူ့ဘဝရဲ့ပျော်ရွှင်စရာအလင်းရောင်ကိုသူမြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်။အပြန်လမ်းမှာ သူ့ရဲ့ဘဝကိုအလင်းပေးမယ့်ချစ်သူအသတ်ခံလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့ရှဘနားရဲ့စိတ်ဟာအကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတော့တယ်။ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်တည်ဆောက်ထားပုံလည်းတော်တော်လေးကောင်းပါတယ်။နောက်ထပ် Babyဇာတ်ကားရဲ့Spin-off movieတွေ ထပ်ထွက်စေချင်လောက်အောင်ကိုကောင်းတာပါ။အများကြီးညွှန်းနေရင် ဇာတ်လမ်းပေါ့သွားမှာစိုးလို့ ဇာတ်ကားကိုသာခံစားရင်းကြည့်လိုက်ကြပါ။ဘောလိဝုဒ်ပေါကားအက်ရှင်အပိုကားတွေထက်ပိုကောင်းတဲ့ဇာတ်ကားတစ်ကားမို့ ပရိသတ်ကြီးအကြိုက်တွေ့စေမှာအမှန်ပါပဲ
မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်ကို စံနမူ နာထား လေးစားအားကျရင်း ဘ၀ ရပ်တည်မှုအတွက် ကြိုးစားခဲ့တဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်အ ကြောင်း ဇာတ်အိမ်တည်ထားတာ ပါ။အကသမားတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ မိုက်ကယ်ဟာ မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်ကို လေးစားအားကျသူဖြစ်ပြီး တစ်ရက်မှာတော့ အလုပ်ထုတ်ခံလိုက် ရလို့ စတူဒီယိုကနေ ပြန်လာတုန်း လမ်းဘေးမှာ စွန့်ပစ်ခံထားရတဲ့ မွေးကင်းစကလေးလေးတစ်ဦးကို တွေ့ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကလေးကို မိုက်ကယ်ကခေါ်ယူမွေးစားခဲ့ပြီး မွန်နာလို့နာ မည်ပေးခဲ့ပါတယ်။ မွန်နာဟာ မိုက်ကယ်ရဲ့ခြေရာကို နင်းနိုင်သူ တစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့ပြီး အကမှာ သူမတူအောင်ထူးချွန်သလို သူက လည်းပဲ မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်ကို ရူးရူးမိုက်မိုက်ကို သဘောကျသူ ဖြစ်ပါတယ်။ မိုက်ကယ်ကတော့ မွန်နာကို အကသမားမဖြစ်စေချင်ဘဲ အဆင့်မြင့်တဲ့ အလုပ်အကိုင်ရစေ ချင်နေတာပါ။ ဒါပေမဲ့ မွန်နာ ကတော့ သူ့ရဲ့အကအဖွဲ့နဲ့အတူ ကလပ်တွေမှာ လိုက်ပြီးတခြား အဖွဲ့တွေ၊ စိန်ခေါ်ပွဲတွေ ယှဉ်ပြိုင် ရင်း ဝင်ငွေရှာခဲ့ပါတယ်။ တစ်ရက် မှာတော့ မိုက်ကယ်ကျန်းမာရေး မကောင်းဖြစ်ပြီး ဆေးရုံတက်ခဲ့ရ ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ မွမ်ဘိုင်းက အကကလပ်တွေဟာ မွန်နာနဲ့အဖွဲ့ကို အမည်ပျက်စာရင်းသွင်း လိုက်တဲ့အတွက် မွန်နာဟာဒေလီမှာ လမ်းကြောင်းသစ်ရှာဖို့ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒေလီကိုရောက်တဲ့အခါ မှာ ရန်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ရင်း မွန်နာဟာ မဟင်ဒါဆိုတဲ့ လူဆိုးဂိုဏ်းကလူ တစ်ယောက်နဲ့ဆုံခဲ့ပြီး အဲဒီလူက မွန်နာရဲ့ အကစွမ်းရည်ကို သဘောကျပြီး သူ့ကိုသင်ပေးဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။နောက်တော့ မဟင်ဒါနဲ့ မွန်နာတို့ဟာ မိတ်ဆွေတွေဖြစ်သွားခဲ့ ကြပြီး တကယ်တော့ မဟင်ဒါဟာသူချစ်နေတဲ့ အကဝါသနာပါတဲ့ ဒေါ်လီဆိုတဲ့မိန်းကလေး သဘောကျဖို့ အကသင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အကကိုပဲ တစိုက်မတ်မတ်စိတ် ဝင်စားတဲ့ မွန်နာကို ဒေါ်လီက သဘောကျသွားခဲ့သဖြင့် မဟင်ဒါနဲ့ ပြဿနာတွေဖြစ်သလို၊ မဟင်ဒါက မွန်နာရဲ့ အဖေမိုက်ကယ်ကို ဒေလီကိုခေါ်လာပြီး အသက် အန္တရာယ်ခြိမ်းခြောက်ကာ ဒေါ်လီနဲ့ အလဲအလှယ်လုပ်ဖို့တောင်း ဆိုလာတဲ့အခါမှာ ဘာတွေဖြစ်မှာလဲဆိုတာတော့ ဆက်ကြည့်လိုက်ဦးနော်။အကအလှတွေ၊ အက်ရှင် ဇာတ်ကွက်တွေနဲ့အတူ ကြည့်ရမယ့် ဒီဇာတ်ကားမှာ တိုက်ဂါးရှရော့ဖ်၊ ဆီဒါ့သ်နီဂမ်၊ နီဒီအဂါ ဝါလ်၊ ရိုနစ်တ်ရွိုင်း၊ နာဝါဇာဒင် ဆီဒီကွီ စတဲ့သရုပ်ဆောင်တွေ ပါဝင်ထားပါတယ်။
ဒီတစ်ခါတော့ ဘောလီဝုဒ် ပရိသတ်တွေအတွက် အလန်းစားတစ်ကား တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ဇာတ်ကားကကောင်းလွန်းတော့ ဘယ်လိုညွှန်းရမလဲ စဉ်းစားမရဖြစ်နေတယ်နိုင်ငံတကာ ရုပ်ရှင်အဆင့်သတ်မှတ်တွေအနေနဲ့လည်း IMDb 6.1/10 နဲ့ Rotten Tomatoes 83% တို့အထိရရှိထားပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံအတွင်းနေထိုင်တဲ့ မူစ်လင်(မ်) နှင့် အကြမ်းဖက်သမားကိစ္စကို ထောင့်စေ့အောင် သေချာလေးရိုက်ပြထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်သမားဆိုတာ ဘာလဲ ဘယ်အရာက အကြမ်းဖက်မှုမြောက်သလဲ စသည့်ဖြင့် မေးခွန်းပေါင်းများစွာကို လှလှပပ အဖြေပေးသွားတဲ့ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားပါအဓိကသရုပ်ဆောင်တွေအဖြစ် ဂန္တဝင်မင်းသားကြီး Rishi Kapoor နှင့် မင်းသမီးချော Taapsee Pannu တို့က ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပြီး တခြားအနုပညာရှင် အတတ်ပညာရှင်ပေါင်းစုံမှ အကောင်းဆုံး အားဖြည့်ပါဝင်ထားပါတယ်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ အသက် ၆၅ နှစ်အရွယ် မူရာဒ် အလီ မိုဟမ္မဒ် အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးပတ်ဝန်းကျင်မှာ လူလေးစားကြည်ညိုရတဲ့ ရှေ့နေတစ်ယောက်လူတိုင်းနဲ့ အဆင်ပြေပြီး ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ မိသားစုတစ်ခုပိုင်ဆိုင်ထားသူဂြိုဟ်ဆိုးဝင်ချင်တော့ သူနဲ့ တစ်အိမ်တည်းနေ သူ့အုပ်ထိန်းမှုအောက်မှာရှိတဲ့ သူ့တူဖြစ်သူ ရှာဟစ်(ဒ်)ဟာ ဗုံးဖေါက်ခွဲပြီး အပြစ်မဲ့လူ ၁၆ ယောက်ကို သေစေခဲ့ပါတယ်အကြမ်းဖက်သမားဖြစ်သွားတဲ့ ရှာဟစ်(ဒ်)ကြောင့် သူတို့တစ်မိသားစုလုံး ပြောင်းပြန်အခြေအနေကို ရောက်ရှိသွားခဲ့ကြတယ်မူရာဒ် အလီ မိုဟမ္မဒ်နဲ့ သူ့ညီ ဘေလား(လ်) မိုဟမ္မဒ်တို့ဟာ အကြမ်းဖက်ဝါဒ အားပေးမှုနဲ့ တရားစွဲဆိုခြင်း ခံခဲ့ရပါတယ်စွပ်စွဲချက်ပေါင်းစုံနဲ့ တရားရုံမှာ သူတို့အပြစ်မရှိကြောင်း ဘယ်လိုသက်သေပြကြမလဲသက်သေရော ပြနိုင်ပါ့မလားအားလုံးပဲ ဆက်လက်ရှု့စားကြည့်လိုက်ပါပေးရတဲ့အချိန် ထိုက်တန်ကြောင်း သိရပါလိမ့်မယ်(ဆက်ဆက်ထိမခံ ဘာသာရေး ပြဿနာကို ဒီလိုဇာတ်လမ်းရိုက်ရဲတဲ့ ဒါရိုက်တာကိုတော့ ချီးကျူမိပါတယ် ဘာသာရေး အသုံးအနှုန်းများကို အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားဘာသာပြန်ပေးထားပါတယ် အလွဲအမှားများပါခဲ့ပါက ဒီနေရာကပဲ ကြိုတောင်းပန်ထားပါရစေ)
mmbusticket Mujhse Dosti Karoge! (2002) မြန်မာစာတန်းထိုး ====================================“ငါနဲ့သူငယ်ချင်းလုပ်မလား”သူငယ်ချင်း၊ ရင်းနှီးမှု အချစ်ဆိုတာ ဘာပါလဲ“အချစ်ဆိုတာ ရင်နှီးမှုပါပဲ လူတစ်ယောက်ကို မရင်းနှီးဘဲနဲ့ ဘယ်လိုမှ မချစ်နိုင်သလို သံယောဇဉ်လည်း မတွယ်နိုင်ပါဘူး ကဲ့ ဒါကြောင့် ငါနဲ့ သူငယ်ချင်းလုပ်မလား ”ဒီဒိုင်ယာလော့လေးကတော့ နာမည်ကြီး ဂန္တဝင်အချစ်ဇာတ်ကား တစ်ကားဖြစ်တဲ့ Kuch Kuch Hota Hai (1998) ထဲကပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုမိတ်ဆက်ပေးမယ့် ဇာတ်ကားလေးကလည်း တခမ်းတနားနဲ့ အမှန်အကန်တင်ဆက်ထားတဲ့ ဘောလီဝုဒ်ကားကောင်း တစ်ကားပါပဲနာမည်ကြီး သရုပ်ဆောင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ Hrithik Roshan (ခ) လက်ပွားမင်းသား Rani Mukerji နှင့် Kareena Kapoor တို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ သုံးပွင့်ဆိုင် အချစ်ဇာတ်လမ်းလေး တပုဒ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်အခုလို မိုးရာသီဖွဲဖွဲလေးမှာ ဒီလို Romance, Dramaကား ခပ်ကောင်းကောင်းလေးကို တခါကြည့်ဖူးရုံနဲ့ ဇာတ်ဝင်တေးအားလုံးကလည်း တသက်လုံး မေ့လျော့နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူးဒီကားကို ကြည့်ဖူးတဲ့သူတွေရှိသလို လုံးဝမကြည့်ရသေးတဲ့သူတွေလည်း ရှိပါလိမ့်မယ် အခု CMက ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးထားတာကတော့ ရုပ်သံအကြည်လင်းဆုံးနဲ့ သီချင်းတွေကအစ မြန်မာမှုပြုပေးထားလို့ သိမ်းထားချင်သူတွေအတွက် နှစ်ခြိုက်စရာပါပဲဇာတ်လမ်းလေးကတော့ ရာ(ဂျ်)၊ တီနာနဲ့ ပူဂျာတို့ဟာ သိပ်ချစ်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းသုံးယောက်ပါ ဒီထဲမှာမှ ရာ(ဂျ်)က တီနာပေါ်မှာ ခင်မင်မှုပိုနေသလိုပါပဲအကြောင်းကြောင်းကြောင့် ရာ(ဂျ်)တို့ မိသားစု လန်ဒန်ကိုပြောင်းသွားတဲ့အခါ တီနာနဲ့ ပူဂျာကတော့ အိန္ဒိယမှာပဲ ကျန်ခဲ့ပါတော့တယ်ရာ(ဂျ်)အနေနဲ့ မသွားခင်မှာ သူလန်ဒန်ရောက်ရင် နေ့စဉ် အီးမေးလ်ကတဆင့် စာတွေရေးမှာဖြစ်လို့ သူ့ဆီကို စာပြန်ဖို့ တီနာကို မှာကြားခဲ့ပြီး နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ ရာ(ဂျ်)တယောက် စာတွေပို့တဲ့အချိန်မှာ တီနာကတော့ စိတ်မဝင်စားဘဲ အရေးတယူမလုပ်ခဲ့ဘူး ဒီအခြေအနေမှာ သူသိပ်ချစ်တဲ့ သူငယ်ချင်းကို ပူဂျာကပဲ စာတွေပြန်ရေးခဲ့ပါတယ် ဒါပေမဲ့ စာပြန်တဲ့အခါမှာ သူ့နာမည်မသုံးဘဲ တီနာ နာမည်ကိုသုံးလိုက်ပါတယ်၁၅ နှစ်တာ ကလေးဘဝကတည်းက တနေ့တာဖြစ်ခဲ့သမျှကို စာတွေရေးပြီး ရင်ဖွင့်ခဲ့ကြတဲ့ သူတို့နှစ်ယောက်မှာ သူငယ်ချင်းသံယောဇဉ်ထက် ပိုတဲ့အရာ တစ်ခုဖြစ်နေပါပြီ စာတွေရေးနေကြတဲ့ နှစ်ယောက်ဟာ တယောက်ကိုတယောက် မမြင်မတွေ့ဘဲ ချစ်မိနေကြပါပြီရာ(ဂျ်) ကသူ့ဆီစာတွေရေးနေတာ တီနာလို့ထင်မှတ်ပြီး တီနာကို ချစ်မိနေသလို ကလေးဘဝကတည်းက စာတွေရေးခဲ့တဲ့ ပူဂျာကလည်း ရာဂျ်အကြောင်း ကောင်းကောင်းကြီးသိခဲ့ပြီး ချစ်မိနေပါပြီရာ(ဂျ်) တစ်ယောက် လန်ဒန်ကနေ အိန္ဒိယကို ပြန်လာတဲ့အခါမှာတော့ ……..ရာ(ဂျ်)၊ တီနာနဲ့ ပူဂျာတို့ကြားက သုံးပွင့်ဆိုင် အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးက ဘယ်လိုတွေ ဆက်ဖြစ်ကြမလဲ …..မိတ်ဆွေတို့ကို ပြောချင်တာလေးကတော့ ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူတယောက်ယောက်ကို တွေ့ခဲ့ပြီဆိုရင် ဒီမေးခွန်းလေးပဲ အရင်မေးလိုက်ပါ“ငါနဲ့သူငယ်ချင်းလုပ်မလား”
2017 မှာထွက်ခဲ့သမျှ Bollywood ကားတွေမှာ အားရစရာ သိပ်မတွေ့ခဲ့ဘူး အထူးသဖြင့် တကယ့် ဂရိတ်ကြီးတွေရဲ့ ကားတွေ တော် မျှော်လင့်သလို ဖြစ်မလာခဲ့ဘူး (Akshay ရဲ့ Toilet တော့မကြည့်ရသေး)Badrinath Ki Dulhania လေးတော့ မဆိုးပါဘူး====================================================ဒီတစ်ခါ Bollywood ပရိတ်သတ်ကြီးကို တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ မင်းသမီးကြီး Sridevi ရဲ့ Mom ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားပါပဲ့ English Vinglish မှာ ထူးထူးခြားခြား သတိထားမိတာပါ ( တခြားကားတွေ မကြည့်ဖူး )ဒီကားထဲမှာလည်း သရုပ်ဆောင်သွားတာ သိပ်ကောင်းလွန်းလို့ မျက်ရည်ဝဲမိတဲ့ အထိပါပဲ့ အမေတစ်ယောက်ရဲ့ မေတ္တာ ဂရုဏာ ဒေါသ အားလုံးကို ကျွန်တော့်တို့ကို ချပြသွားနိုင်ပါတယ် မိခင် ဖြစ်ထားတဲ့ သူတွေ မိခင်ဖြစ်လာမည့် သူတွေ တွေ သမီးမိန်းကလေးတွေ သမီးရှင်တွေ လက်လွတ်မခံပဲ ကြည့်ထားသင့်တဲ့ ပညာပေး ဇာတ်ကား တစ်ကားပါ။IMDB 7.4/10 ထိ ရရှိထားတာဆိုတော့ ကောင်းမကောင်း ပြောမနေတော့ပါဘူးဒါ့အပြင် သဘာဝမင်းသားကြီး Nawazuddin Siddiqui ကလည်း အထူးသရုပ်ဆောင် အဖြစ်ပါဝင်ထားပါတယ်။ဇာတ်လမ်းလေးကို ပြောရမယ်ဆိုရင့်ဒေ့ဗ်ကီဆိုတဲ့ ကျောင်းဆရာမ တစ်ယောက်ဟာ ခင်ပွန်းနဲ့ သမီးလေး နှစ်ယောက်နဲ့ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ဘဝလေးကို ဖြတ်သန်းနေတာပါ။ ပြသနာ ရှိတာဆိုလို့ သမီးနှစ်ယောက်ဆိုတဲ့ အထဲမှာ သမီးအကြီးက လင်ပါသမီးပါ့ လင်ပါသမီး ဖြစ်ပေမယ့် ကိုယ့်သမီးအရင်းလို သဘောထားပြီး မေတ္တာတွေ ပေးခဲ့တယ့် ဘယ်တော့မှ ခွဲခြားခွဲခြား မဆက်ဆံခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ အာယာ့ အာယာကတော့ အဖေဖြစ်သူ နောက်မိန်းမယူလိုက်ပေမယ့် မိမိ အမေဖြစ်သူ့ကို အခုချိန်ထိ မမေ့နိုင်သေးပဲ အမေ့နေရာကို တခြား တစ်ယောက်ကို အစားထိုးလို့ မရနိုင်သေးဘူး” အမေတစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝမှာ သမီးတစ်ယောက်ဆိုတာ ရှိစမြဲပဲ့ ဒါပေမဲ့ သမီးတစ်ယောက်အတွက်တော့ အမေဆိုတာ အစားထိုးလို့ မရဘူး “====================================================အဆင်မပြေလှတဲ့ အာယာကို ကလေးမို့ အတတ်နိုင်ဆုံး လိုက်လျောပြီး တနေ့ အဆင်ပြေသွားမှာပါဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ ရှေ့ဆက်နေ့တဲ့ ဒေ့ဗ်ကီ တို့ ဘဝထဲကို မထင်မှတ်ထားတဲ့ ကံကြမ္မာဆိုးကြီး ကျရောက်လာပါတော့တယ့်အာယာ တစ်ယောက် ချစ်သူများနေ့ ပါတီပွဲကအပြန် အဓမ္မကျင့်ခံလိုက်ရပါတယ့်တရားခံတွေကို ဖမ်းမိပေမယ့် လူယုတ်မာတွေဟာ ခြေရာလက်ရာ ဖျောက်ကာ သက်သေတွေကို ဖျက်စီးခဲ့တဲ့အတွက် တရားဥပဒေအရ အပြစ်ပေးလို့ မရပါဘူး တရားသေ ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ရပါတယ့်ဒီအခါမှာတော့ အမေတစ်ယောက်က သမီးတစ်ယောက်အတွက် အကြွေးကို ကိုယ်တိုင် သိမ်းယူဖို့ ဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်” ဘုရားကို ယုံကြည်ပါ အစစအရာရာ အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ် ဘုရားက နေရာတကာမှာ ရှိမနေနိုင်ပါဘူးရှင် သိတယ်လေ ဒါကြောင့်ပဲ အမေတွေကို ဖန်ဆင်းထားတာပေါ့ “=====================================================
ဒီတစ်ခါတော့ ဘောလီဝုဒ်ဖန်တွေအတွက် ဟာသ ဒရာမာကားကောင်းလေးတစ်ကား တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရယ်ရယ်မောမောနဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးမို့ မိသားစုနဲ့အတူ ခွီလို့ကောင်းမယ့် ဇာတ်ကားတစ်ကားပါပဲနိုင်ငံတကာ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွေအရလည်း IMDb 7/ 10 အထိရရှိထားလို့ မဆိုးဘူးလို့ ပြောရပါမယ်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့အရှုံးသမား၊ ငတုံး ငအလို့ အသတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ ဂျေးဆိုတဲ့ကောင်လေးနဲ့ အရည်အချင်းရှိပြီး ထက်မြတ်တဲ့ အဗ်နီးဆိုတဲ့ကောင်မလေးတို့ဟာမိဘချင်းသဘောတူလို့ မင်္ဂလာကိစ္စနဲ့ မမျှော်လင့်ပဲ ဆုံတွေ့ခဲ့ကြတာပါတယ်သူတို့နှစ်ဦးစလုံးမှာလည်း အိပ်မက်ကိုယ်စီရှိကြတာမို့ အိမ်ထောင်ချပေးမယ့်အရေးကနေ သူတို့အိပ်မက်တွေကို ဘယ်လိုအကောင်ထည်ဖေါ်ကြမလဲဆိုတာ ဆက်လက်ကြည့်ရှု့လိုက်ကြပါဦး
IMDb rating : : 6.4/10 Google users : : 87% liked“ဟိမဝန္တာသစ္စာ”လို့ နာမည်ပေးရမလားပဲဗျာ။2019 ရဲ့ အစဒီလိုအခါသမယမှာပဲအိန္ဒိယတောင်ပိုင်းရုပ်ရှင်တွေထဲကနေရင်ထဲကို တိုးဝှေ့ တိုက်ခတ်သွားတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ရှိပါတယ်။. . .ဟုတ်ပါတယ်။အသစ်စက်စက် ထွက်ရှိလာတဲ့ Mehboora ဆိုတဲ့ အချစ်အက်ရှင် ဇာတ်ကားလေးပါ။ ပါဝင်တဲ့ မင်းသားမင်းသမီးတွေကအသစ်စက်စက်လေးတွေဆိုပေမယ့်သူတို့ရဲ့ ကျရာဇာတ်ရုပ်ကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သရုပ်ဆောင်သွားပုံက ရင်ကိုထိမှန်စေတဲ့ အားထုတ်မှုပါပဲ။ဒီကားမှာလေးဟာစစ်ရေးနဲ့ဘာသာရေးကို အဓိကထားပြီး အချစ်ရေးနဲ့ ရောသမကာ အကောင်းမွန်ဆုံး ဖွဲ့သီရိုက်ကူးထားတဲ့ ကားကောင်းလေး တစ်ကားပေါ့ ခင်ဗျာ။” ဇာတ်လမ်းအညွှန်း “ရိုရှန်းဆိုတဲ့ ကောင်လေးဟာညစဉ်အိပ်မက်ဆိုးတွေ မက်တယ်။အိပ်မက်ထဲမှာ သူ အသတ်ခံရသတဲ့။ထူးခြားနေတယ်လို့ ပြောရမလား. . .သူဟာ တစ်ခြားသူတွေနဲ့ မတူပဲသွားပုံလာပုံ နေပုံထိုင်ပုံတွေကစစ်သားတစ်ယောက်လိုပဲ။စရိုက်ကလည်း မတရားတာမြင်ရင်လက်ပိုက်ကြည့်မနေနိုင်တဲ့ စရိုက်မျိုး။တစ်ကြိမ်မှာ အာဖရင်းကို လူဆိုးလူရမ်းကားတွေလက်ကနေ သူကယ်ခဲ့ဖူးသေးတယ်။တောင်တက်ရတာကို ဝါသနာပါတဲ့သူ့မှာဟိမဝန္တာတောင်ကို တက်ချင်တဲ့ အိပ်မက်လည်း ရှိတယ်။စစ်သားလည်း ဖြစ်ချင်တော့ကျောင်းပြီးတာနဲ့ တပ်ထဲကို ဝင်လျှောက်တယ်။ကပ္ပတိန်အဖြစ် ရာထူးခန့်အပ်ခံရပြီးတာဝန်ကျရာ ဒေသကို မသွားရခင်လေးမှာ သူငယ်စဉ်က မက်ခဲ့ဖူးတဲ့ အိပ်မက်ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ ဟိမဝန္တာတောင်ကို တက်ဖို့ကြိုးစားတော့တာပဲ။သူ့အိပ်မက်ထဲမှာ ဟိမဝန္တက လူတစ်ယောက်ကိုပေးထားတဲ့ ကတိအကြောင်း ပါနေတာကိုး။အဲ့ဒီတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုပေးခဲ့တဲ့ ကတိက “ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်ငါအရောက်ပြန်လာခဲ့မယ်”တဲ့။ဒီလိုနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ နှင်းတွေကြားထဲကနေ ဟိမဝန္တာတောင်ကို တက်ခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီမှာ မမျှော်လင့်ထားတဲ့ အံ့အားသင့်စရာ တစ်ခုတွေ့မြင်လိုက်ရပါတော့တယ်။1971 ခုနှစ် အိန္ဒိယ – ပါကစ္စတန် စစ်ပွဲကာလကိုအခြေခံထားတဲ့ သနားစရာ အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ခုပေါ်ထွက်လာဖို့ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီနှစ်နိုင်ငံနှစ်ခု သဘောထားကွဲလွဲပြီးဘာသာရေးကစလို့ မီးခိုးကြွက်လျှောက်ပြသနာတွေတန်းစီတက်ရာကနေစစ်မီးကြီး ဟုန်းဟုန်းတောက်ခဲ့တဲ့ ကာလတစ်ခုမှာပေါ့။ ——————————-ပထမပိုင်းမှာ ဒီအကြောင်းကို ရိုက်ပြအပြီး ဒါရိုက်တာကစစ်ကြီးပြီးဆုံးသွားတဲ့ မျက်မှောက်ခေတ်ကို ရိုက်ပြပြန်တယ်။လောကကြီးထဲမှာ ထူးဆန်းတဲ့ အဖြစ်အပျက်ပေါင်းများစွာရှိတဲ့ အနက်က. . .တချို့သော အကြောင်းအရာတွေကို အခြေခံပြီးဇာတ်အိမ်တည်ထားပါတယ်။ဇာတ်လမ်းလေးကို အဆုံးထိကြည့်လိုက်ရင်တော့. . .ဒီဇာတ်လမ်းမှာ သနားစရာတွေ၊ဆို့နင့်ကြေကွဲစရာတွေ၊ဘာသာရေးနဲ့ ပက်သက်တဲ့မှားယွင်းတဲ့ အတွေးအခေါ်တွေ စတဲ့ အကြောင်းအရာများစွာကိုနားလည် ခံစားမိစေပါလိမ့်မယ်။
“သူငယ်ချင်းရာ ဒီလိုခေတ်ကာလကြီးမှာ တခြားအခြေနေတွေပေါ် ဦးတည်ပြီး စာရေးပါလားဘာဖြစ်လို့ ပြည့်တန်ဆာတွေအတွက် တွေးပူနေရတာလဲ”“ဘာလဲ အဲ့ဒိပြည်တန့်ဆာတွေက ငါတို့လူ့မှုပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ တစိတ်တဒေသမဟုတ်လို့လားသူတို့ဆီသွားနေကြတဲ့သူတွေက ဘုရားတရားသွားလုပ်တာလားသွားဖို့လာဖို့ကျတော့ လွပ်လွပ်လပ်လပ် သွားလာကြပြီး ရေးဖို့ကြတော့ လွပ်လွပ်လပ်လပ်ရေးခွင့်မရှိဘူးလား” တရားရုံးကို အိမ်ဦးနဲ့ကြမ်းပြင်သွားလာနေရလို့ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ တားသော်လည်း မန်တိုတစ်ယောက် လက်မခံချေမန်တိုဟာ နာမည်ရစာရေးဆရာ တစ်ယောက်ပါအထူးသဖြင့် ပြည်တန်ဆာတွေရဲ့ ဘဝနာမှုတွေ၊ ဒုက္ခတွေကို အသားပေးရေးဖွဲ့လေ့ရှိပြီး မဖွယ်မရာရေးသားမှုဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ အကြိမ်ကြိမ် အမှုတွေလည်း ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်ဒါပေမဲ့ မန်တိုကတော့ သူ့ယုံကြည်ချက်ကို မပြင်ဘဲ ရှေ့ပဲဆက်တိုးခဲ့ပါတယ်မူစ်လင်(မ်)တစ်ယောက် ဖြစ်သော်ငြားလည်း ဘာသာပေါင်းစုံမိတ်ဆွေတွေရှိပြီး နယ်ပယ်အစုံမှာ အောင်မြင် အဆင်ပြေနေသူတစ်ယောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံကြီး လွပ်လပ်ရေးမရခင် အဆင်ပြေခဲ့သမျှဟာ လွပ်လပ်ရေးရပြီးနောက် အားလုံးပျက်သုန်းသွားခဲ့ပါတယ်အိန္ဒိယ-ပါကစ္စတန် ၂ နိုင်ငံကွဲထွက်သွားပြီး အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ဖြစ်တဲ့ မန်တို ပါကစ္စတန်ကို ရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရပါတယ်ဒီဇာတ်ကားဟာ နာမည်ကျော် စာရေးဆရာ တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဆာဒတ် ဟဆန် မန်တိုရဲ့ ဘဝဇာတ်ကြောင်းကို ရိုက်ကူးထားတာ ဖြစ်ပြီး သူ့နာမည်ကျော် ဇာတ်လမ်းတိုတွေကိုလည်း သေသေချာချာ ပုံဖေါ်ပြထားပါတယ်Bio-History ကားတစ်ကားပီပီ အိန္ဒိယ-ပါကစ္စတန် နှစ်ခြမ်းကွဲခဲ့တဲ့ အခြေအနေတွေပါကစ္စတန်ဘက်က ဒုက္ခပြဿနာတွေနဲ့အိန္ဒိယရဲ့ သဘာဝမင်းသားကြီး နာဝါဇွဒ္ဒီးန်းတို့ရဲ့ ပေါင်းစပ်မှုနဲ့ ၂၀၁၈ ရဲ့ အိန္ဒိယဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားအဖြစ် သတ်မှတ်ရမှာပါပဲအားလုံးပဲ ကြည့်ရှု့ခံစားကြည့်လိုက်ကြပါဦး
မင်းသား Varun Dhawan နဲ့ မင်းသမီး Ileana D’Cruz , Nargis Fakhri တို့အဓိကပါဝင်ထားပြီး မင်းသားကြီး Salman Khan တို့နဲ့လဲ အားဖြည့်ထားတဲ့ Action, Comedy, Romance အမျိုးအစား Bollywood ဇာတ်ကားပါ။ဇာတ်လမ်းကတော့…….Sreenath Prasad (ခေါ်) Seenu ဟာ Ooty တစ်ဝိုက်မှာတော့ လူဆိုးလေးအဖြစ်နာမည်အကြီးဆုံးလူပေါ့။ သူဟာ ဘန်ဂလော ကောလိပ်မှာ ပညာဆက်သင်ဖို့အတွက် Ooty ကောလိပ်ကနေ ထွက်လာခဲ့တယ်။ ဒီရောက်တော့ Sunaina နဲ့ ချစ်သူဖြစ်သွားရော။ ဒါပေမယ့် Sunaina ဟာ ဒေသခံရဲအရာရှိဖြစ်သူ Angad (တကယ်တော့ သူက ကြောက်စရာပိုကောင်းတဲ့ ဂိုဏ်းစတားကြီး)နဲ့ လက်ထပ်ရဖို့ စီစဉ်ထားပြီးသား။ Seenu မှာ Ayesha ဆိုတဲ့ အသွင်နဲ့ ချစ်သူနောက်တစ်ယောက်ရှိသေးပေမယ့် သူကိုယ်တိုင်တောင် သတိမထား မိခဲ့ပါဘူး။ တစ်ခါက သူ့သူငယ်ချင်းတွေကို ကယ်လိုက်ကတည်းက Ayesha ဟာ သူ့အတွက်ပြီးပြည့်စုံတဲ့ေယောကျ်ားတစ်ယောက်တွေ့ပြီ ဆိုတာ ချက်ချင်းသိလိုက်တယ်။ Ayesha ရဲ့အဖေဟာ ဂိုဏ်းစတားကြီး တစ်ယောက်ဖြစ်တော့ Seenu ကို သူ့သမီးနဲ့ အတင်းအကျပ်လက်ထပ် စေဖို့အတွက် Suanaina ကို ပြန်ပေးဆွဲလိုက်တဲ့အခါ….။
18+ လို့ခေါင်းစဉ်တပ်ထားတိုင်း အပြာကားလို့မထင်စေချင်ပါဘူးရုပ်ရှင်ကားရဲ့ Age Rating အရဆို Adult Only ဆိုတော့ အရွယ်ရောက်ပြီးသူတိုင်း ကြည့်ရှု့လို့ရပါတယ်ရိုင်းစိုင်းတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေနဲ့ လိင်အသာပေးအခန်းတွေပါတာကြောင့် ကလေးသူငယ်တွေ၊ မိသားစုနဲ့ကြည့်ရှု့ဖို့ အဆင်မပြေပါဘူး)========================================ဟောဒီလောကမှာ အကျိုးအမြတ်နဲ့ အရှုံးဟာ ဆန့်ကျင်ဘက်ဆိုပေမယ့် အမြဲတမ်းပူးတွဲရှိနေတတ်ပါတယ်ဒီတော့ အမြတ်ရဖို့ဆိုရင် အရင်းအနှီးရှိရပါတယ်၊ ရင်နှီးနိုင်လျှက်ရှုံးရသည်က တကဏ္ဌပါ မရင်းနှီးနိုင်ရင်တော့ အကျိုးမြတ်မရနိုင်တာ လုံးဝအသေချာပါပဲဒီတော့ ရင်းနှီးဖို့ဘာလိုလာမလဲဆို ပိုင်ဆိုင်မှုလိုလာပါမယ်ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိရင် အရင်းအနှီးဟာ အကြွေးဘက်ကို ဦးတည်သွားတတ်လေတယ်ဒီခေတ်မှာ မရင်းနှီးနိုင်လို့ ရှုံးနေကြတာအများကြီးမရင်းနှီးနိုင်လို့ အကြွေးတင်နေကြတာအများကြီးပါအသိပညာချို့တဲ့ပြီး ဆင်းရဲချွတ်ခြုံကျနေတဲ့ မိသားစုတွေမှာ အရင်းအနှီးဆိုတာ ဘာဖြစ်လေမလဲ …၉၀ ရာခိုင်းနှုန်းကတော့ သူတို့သားသမီးပါပဲသားသမီးကို ကိုယ့်ပိုင်ဆိုင်မှု တစ်ခုလို့ယူဆပြီး အဲ့ဒီအပေါ်မှာ ရင်းနှီးလိုက်ကြပေမယ့် အကျိုးအမြတ်မရမယ့်အပြင် ဆုံးရှုံးသွားတာ ဒုနဲ့ဒေးပါတောရွာတွေမှာဆို ပညာသင်ရမယ့် အရွယ်ရောက်နေပေမယ့် လယ်ထဲဆင်းနေရတာ၊ မအေနဲ့ဈေးအတူရောင်းနေရတာတွေကိုယ့်အောက်က အငယ်ကိုထိန်းကျောင်းနေရတာတွေ မနည်းလှပါဘူးနောက်ဆုံး အဆင်မပြေမှုတွေများလာတဲ့အခါ ထွက်ပေါက်တစ်ခုက ဒီသားသမီးကို ရရာအလုပ်ခိုင်းတော့တာပါပဲ …အခုဇာတ်ကားလေးကလည်း ဒီလိုပါပဲဆင်းရဲလွန်းတဲ့ မိသားစုတစ်စု တပိုင်တနိုင် လယ်လေးတကွက်နဲ့ မိသားစုဝင်လေးယောက်နွားတောင် နှစ်ကောင်မပြည့်လို့ ဖအေဖြစ်သူကနွားတစ်ဖက်သူတစ်ဖက်ရုန်းနေရရှာတယ်ကူဖော်လောင်ဖက်လှည့်ကြည့်စရာကလည်း သမီးနှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်အဆင်မပြေမှုတွေများလာတဲ့အခါ ဒေါသပုံချစရာ သူတို့ပဲရှိတယ်အကြွေးကလည်ပင်းထိနေလို့ အကြွေးရှင်ကိုလည်း ဘယ်နည်းနဲ့မှ အကြွေးမဆပ်နိုင်ဖြစ်နေတော့ရှိတဲ့သမီးနှစ်ယောက်ထဲက အကြီးမဖြစ်သူ ပရီတီးကို မွန်ဘိုင်းမြို့ပေါ်မှာအလုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီး မိန်းမတစ်ယောက် ခေါ်ရာထည့်ပေးလိုက်ရပါတော့တယ်တွယ်တာစရာ ဒီညီအစ်မနှစ်ယောက်သာရှိတာဆိုတော့အချိန်တွေကြာလာပြီး ပရီတီးဆီက စာမလာသတင်းမကြားဖြစ်လာတဲ့ခါအိမ်ကိုအသိမပေးဘဲ အငယ်မဖြစ်သူ ဆိုနီယားလည်း သူ့အစ်မဆီပို့ပေးဖို့ သွားပြောပါလေရောသူ့အစ်မဆီပို့ပေးမယ်ဆိုပြီး ခေါ်ရာလိုက်သွားမိတဲ့ ဆိုနီယားတစ်ယောက် ဘာတွေကြုံတွေ့လာရမလဲ …ဖြစ်ရပ်မှန်ကို အခြေခံထားတာနဲ့အညီ ဇာတ်လမ်းကောင်းမေကာင်းကတော့ ညွှန်းနေစရာကို မလိုလောက်အောင်ပါပဲ …အဓိကသရုပ်ဆောင်နေရာမှာ မျက်နှာသစ်တွေသုံးထားပေမယ့် Richa Chadda Rajkummar Rao Manoj Bajpai တို့လိုဘောလီဝုဒ် နာမည်ကျော် သဘာဝသရုပ်ဆောင်တွေကပါ ပါဝင်အားဖြည့်ထားပါတယ်နိုင်ငံတကာ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွေအနေနဲ့ IMDb 7.3/10 နှင့် Rotten Tomatoes 83% တို့အသီးသီးရရှိထားပါတယ်
မို့ပြတစ်ခုမှာ နေရပြီဆိုရင် လူတိုင်း ကြောက်တဲ့၊ ဒါမှမဟုတ် ကြောက်ရတဲ့ အရာတစ်ခု ရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ နေစရာ အိမ်တစ်ဆောင်ပါ။ ဘာကြောင့် မြို့ပြမှာ နေချင်ရတာလဲ ဆိုတာတော့ အကြောင်းပြချက် အများကြီး ရှိပါတယ်၊ အဲဒီ အကြောင်းပြချက်တွေထဲမှာ အရေးကြီးဆုံး တစ်ချက်ကတော့ အမိုးအကာရှိတဲ့ အိမ်တစ်ဆောင်မှာ လုံလုံခြုံခြုံ ဇိမ်ကျကျနဲ့ နေရဖို့ပါပဲ။နေစရာ အိမ်အတွက် ပိုက်ဆံကလည်း မရှိမဖြစ် လိုတာပေါ့လေ။ ရေချိုးခန်း၊ အိမ်သာ၊ အိပ်ခန်းပါတဲ့ အိမ်ကို ငှားပြီးနေမယ်ဆိုရင် သာမန်လက်လုပ်လက်စားတွေအတွက် ရှာသမျှ အိမ်ရှင်ကိုပဲ ပေးရလို့ သမင်မွေးရင်း ကျားစားရင်း ဆိုသလို ဖြစ်နေတော့မှာလေ။ ဒီတော့ အဆောင်တွေမှာ စုတ်စုတ်ကပ်ကပ်နေရင်နေ၊ မနေရင် လူတွေအများကြီးပေါင်းနေမှ ပိုက်ဆံရှာတာ အဆင်ပြေပါတယ်။ ဝန်ထမ်းဆိုလည်း အစိုးရက ပေးထားတဲ့ အိမ်လေးမှာ ဖြစ်သလိုနေပြီး အလုပ်လုပ်ရတာပေါ့။ ဖွံ့ဖြိုးဆဲ နိုင်ငံတွေမှာ သာမန်လူတန်းစားတွေအဖို့ မြို့မှာနေမယ်ဆိုရင် ထောင်ကျကျ ပြားကျကျ နေမှပဲ ရနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါက အိမ်ငှားဖို့ပဲ ရှိပါသေးတယ်။ အိမ်ဝယ်ဖို့ဆိုတာတော့ စဉ်းစားလို့တောင် မရပါဘူး။ စဉ်းစားရင် စိတ်ကျရောဂါ ရဖို့ပဲ ရှိပါတယ်။ ဒီတော့ နေစရာအိမ်ဆိုတာ အိမ်မက်ဆိုးကြီး တစ်ခုပါပဲ။ဒီကိစ္စဖြေရှင်းဖို့ အစိုးရက တန်ဖိုးနည်းအိမ်ယာတွေကို အရစ်ကျစနစ်နဲ့ ဝယ်ခွင့်ပေးပါတယ်။ အဲဒီလိုဝယ်ဖို့အတွက် အရင်ဆုံး ပုံမှန်ဝင်ငွေရှိတဲ့ အလုပ်တစ်ခု လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါမှ ဘဏ်ကနေ ချေးငွေယူလို့ရပါတယ်။ ပြီးရင် ရတဲ့လစာထဲကနေ တစ်လတစ်ခါ ဆပ်သွားယုံပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ပြဿနာက ရှိပါသေးတယ်။ အဲဒါက လစာနည်းတဲ့ လူတွေကို ဘဏ်က ချေးငွေ အများကြီး မထုတ်ပေးပါဘူး။ လစာနည်းတဲ့လူတွေက အခုနပြောတဲ့ ကိုယ်ပိုင်ရေချိုးခန်း၊ အိမ်သာ၊ အိပ်ခန်း စတာတွေပါတဲ့ တိုက်ခန်းရဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ရမယ်ဆိုရင်လည်း မြို့ထဲမှာ မရနိုင်ပါဘူး။ မြို့ထဲမှာလည်း နေချင်တယ်၊ ခုနလို တိုက်ခန်းမှာလည်း နေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဘဏ်ကနေ ပိုက်ဆံများများ ချေးမှ ရပါမယ်။ ဒါပေမဲ့ ဝင်ငွေနည်းရင် ပိုက်ဆံ အများကြီး ချေးလို့မရပါဘူး။ အဲဒါက ဒီဇာတ်ကားရဲ့ အဓိက ပြဿနာပါပဲ။ဇာတ်လိုက်က မြို့ပြမှာ ဇိမ်ရှိတဲ့ တိုက်ခန်းလေးနဲ့၊ တီဗွီအပြားကြီး တစ်ခုနဲ့၊ အဲယားကွန်းနဲ့၊ ကိုယ်ပိုင် ရေချိုးခန်း၊ ကိုယ်ပိုင်အိမ်သာနဲ့၊ အတော်အတန် ကျယ်တဲ့ နေအိမ်မှာ နေချင်တာဆိုတော့ သူရတဲ့ လစာက၊ သူလိုချင်တဲ့ ပိုက်ဆံကို ချေးမပေးနိုင်ပါဘူး။ ဒီတော့ ဒီဇာတ်ကားထဲမှာ မင်းသားက အဲဒီ အိမ်ကိုရဖို့အတွက် ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာ ကောင်မလေးနဲ့တွေ့ပြီး ဘယ်လို အချစ်ဇာတ်လမ်းတွေကြားထဲကနေ တိုက်ခန်းကို ရအောင် ဘယ်လိုလုပ်ယူနိုင်မလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေကိုတော့ ဇာတ်ကားကြည့်ရင်းနဲ့ပဲ အဖြေရှာကြပါတော့လို့ တင်ပြရင်း ဒီဇာတ်ကားလေးကို ညွှန်းလိုက်ပါရစေ…။ဒီဇာတ်ကားနာမည်မှာ မေးထားပါတယ်။ တစ်စတုရန်းပေ အကျယ်မှာ အချစ်ဘယ်လောက်ရှိပါသလဲတဲ့?
ဒီဇတ်လမ်းလေးက မကြာသေးခင်ကမှ ရုံတင်သွားတဲ့ရုပ်ရှင်ကားပါ မကြာသေးခင်ကမှ ရုပ်ထွက်အကြည် ထွက်လာလို့CM Fan တွေ အတွက် တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်…ဇတ်လမ်းလေးကတော့ မန်ဆူး လို့ ခေါ်တဲ့ ကောင်လေးနဲ့မူကူး လို့ ခေါ်တဲ့ ကောင်မလေး တစ်ယောက် တို့ နဲ့ စတင်ထားတယ်…ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာဆို အထင်ကရ ကျိုက်ထီးရိုးဘုရား ကိုဘုရားဖူးတွေက လမ်းလျှောက်တက်ကြတယ်အသက်ကြီးသူတွေကတော့ ကားတို့ဆိုက်ကယ်တို့ နဲ့ အဆင်ပြေသလိုပေါ့ဒီဇတ်လမ်းထဲမှာလဲ အရှင်ရှီဗား ကို ဝတ်ပြု ကိုးကွယ်ဖို့ အတွက်လူတွေဟာ တောင်ပေါ်ကို ခြေလျင် တက်ကြတယ်အရှင်ရှီဗား ရဲ့ ဝတ်ကျောင်းဆောင်ကို ရောက်ဖို့ လမ်းလျှောက်တက်ကြသလိုအသက်ကြီးရွယ်အိုတွေကတော့ အထမ်းသမား နဲ့ တက်ရတယ်…အဲ့ဒီ အထမ်းသမားတွေထဲမှာ မန်ဆူး လို့ ခေါ်တဲ့ကောင်လေး တစ်ယောက်လဲ အပါပေါ့…အထမ်းသမားတွေဟာ မန်ဆူး ကို မြင်ရင် နှာခေါင်းရှုံ့သွားကြတယ်ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ဘုရားဖူးဖို့ လိုက်ပို့တဲ့ အထမ်းသမားကမွတ်စလာမ် ကောင်လေး ဖြစ်နေလို့ပါ…ဒါပေမဲ့ တောင်ပေါ် ရောက်တဲ့ အခါကျရင် မန်ဆူး ကို လူတွေကပိုပြီး ချစ်သွားကြတော့တာပဲ…ဘာသာတရားကို ပုံမန်လူတွေ သိတာ ကိုင်းရှိုင်းတာထက်ကိုမန်ဆူး က ပိုပြီး လေးစားတက် ကြည်ညို တက်ပါတယ်ဘုရားဖူးတွေကို ဘုရားစာတွေ တစ်လမ်းလုံးရွတ်ဖတ်ပြတယ်ဘုရားအကြောင်းတွေ ရှင်းပြတယ်…ဒီလို နဲ့ ဘုရားဖူးတွေကို စိတ်ချမ်းသာမှုအပြည့်ပေးတက်သူလေးပေါ့…အဖေ မရှိ တစ်ဦးထဲသော အမေကိုလုပ်ကျွေးနေတဲ့ အထမ်းသမားလေး မန်ဆူး ဟာအမေ့ကိုလဲ ပိုက်ဆံ အပြည့်အ၀ မပေးနိုင်ပါဘူးသူချစ်တဲ့ ဘုရားဖူးတွေဆို အမြဲ ဈေးလျှော့ပေးရတာနဲ့မုန့်ဝယ်ကျွေးရတာနဲ့ ပိုက်ဆံ အပိုကျန်တာ သူများထက်နည်းပါတယ် အမေ့ အဆူခံရတာလဲ အမြဲတမ်းပေါ့…ဒီလို လူရိုးလေး မန်ဆူး ဟာ တစ်ရက်မှာတော့စွာတေးမလေး မူကူး နဲ့ တွေ့တော့တာပဲမူကူးဆိုတာကလဲ ဘုရားလူကြီး ရဲ့ သမီးအငယ်ဆုံးမန်ဆူး နဲ့ဆို ဘာသာခြားတဲ့ အပြင် မူကူး တို့မိသားစု တွေက ဘာသာခြားဆို သိပ်ကြည့်လို့ရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပြန် ဒီတော့ကာ စွာတေးမလေး မူကူး နဲ့လူရိုးလေး မန်ဆူး တို့ ရဲ့ ဇတ်လမ်းကိုအဘဆရာသာရစ် က ဘာသာပြန်ပေးထားပြီးအညွှန်းကို Thit San Khant မှ ရေးပေးထားလို့ဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ကြပါအုံး….
mmbusticketBollywood ပရိသတ်တွေအတွက် မင်းသားကြီး အစ်ဖန်းခန်း(မ်)ရဲ့ ကားကောင်းတစ်ကားကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်IMDb 8/10 နှင့် Rotten 71%ထိရရှိထားပြီး အမှန်အကန် ဟာသ, ဒရာမာ ဇာတ်လမ်းကောင်း တစ်ပုဒ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ …အဗီနက်(ရှ်) ========= လောကမှာ ဆန္ဒနဲ့ဘဝတစ်ထပ်တည်းကျတယ်ဆိုတာ အင်မတန်ပြီးပြည့်ဆုံတဲ့ တောင်းဆုတစ်ခုမဟုတ်လားဒါပေမဲ့ ကံကြမ္မာမျက်နှာသာမပေးတဲ့အခါတွေမှာ ကိုယ့်ဆန္ဒတွေ ဝါသနာတွေကို ဘေးချထားပြီး ပျော်ရာမနေ တော်ရာမှာနေရတဲ့သူတွေ ဒုနဲ့ဒေးပါ ဝါသနာပါရာကိုလျှောက်လှမ်းခွင့်မပြုခဲ့တဲ့အဖေကြောင့်စိတ်မပါတဲ့အလုပ်တစ်ကိုလုပ်လူသာရှင်ပြီး ဘဝသေဆုံးသူတစ်ယောက် မျက်နှာအပျော်အပြုံးဆိုတာ မမြင်ရသလောက်ပဲတနေ့အလုပ်ကအပြန်မှာ ဖုန်းတစ်ခုဝင်လာခဲ့တယ်သူ့အဖေ ဘုရားဖူးသွားရင်း ယာဉ်မတော်တဆမှုကြောင့် ဆုံးသွားပြီတဲ့အလောင်းကို နီးစပ်ရာလေယာဉ်ကွင်းကာဂိုမှာ သွားထုတ်လိုက်ပါဆိုပြီး လှမ်းပြောခဲ့တယ် …—————————————————————————–ရှောကတ် ======= ပျော်ပျော်နေတတ်ပြီး ဘဝကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဖြတ်သန်းနေသူ အဗီနက်(ရှ်)ရဲ့ သူငယ်ချင်းသူ့အဖေသတင်းကို ရှောကတ်ကိုပြောပြပြီး ဗန်ကားလာဌားတဲ့ အဗီနက်(ရှ်)ကို မင်းအဖေက ငါ့အဖေပါပဲဆိုပြီး ကိုယ်တိုင် အလောင်းသယ်ဖို့ နှစ်ယောက်သား သွားခဲ့ကြတယ်——————————————————————————အဲဒီမှာပြဿနာတစ်ခုတက်တော့တာပဲအလောင်းသွားထုတ်တဲ့အချိန်မှာ အဗီနက်(ရှ်)အဖေရဲ့ အလောင်းမဟုတ်ဘဲ အမျိုးသမီးအလောင်းကြီး တစ်ခုဖြစ်နေတယ်အဗီနက်(ရှ်)အဖေရဲ့အလောင်းကမှားပြီး ကိုချီကိုရောက်သွားပြီး ကိုချီကအဖွားကြီးတစ်ယောက် အလောင်းက သူ့ဆီရောက်လာတယ်မှားသွားတဲ့အလောင်းအတွက် အလောင်းလဲလှယ်ရေးလုပ်ဖို့ အဗီနက်(ရှ်)နဲ့ ရှောကတ်တို့ ခရီးထွက်ခဲ့ကြတဲ့အခါမှာတော့ဘယ်လို အခက်အခဲတွေ၊ အလွဲလွဲတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ရဦးမလဲဆိုတာကိုတော့ ဆက်လက်ရှု့စားလိုက်ကြပါခင်ဗျတမူထူးခြားတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကို ဟာသ၊ ဒရာမာ အချိုးကျကျပေါင်းစပ်ထားတဲ့ ဘောလီဝုဒ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားရင်းနဲ့ပဲ …
ဒီတစ်ခါတော့ Bollywoodဖန်တွေအတွက် Hrithik Roshan ကို လက်ပွားမင်းသားဆိုပြီးကမ္ဘာတွင်မက မြန်မာပါကျော်စေတဲ့ Kaho Naa Pyaar Hai ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဇာတ်ကား ဘယ်လောက်နာမည်ကြီးလဲဆိုတာ ပြောစရာ မလိုလောက်အောင်ပါပဲ့ သရုပ်ဆောင် အသစ်တွေသုံးပြီး ပွဲဦးထွက် ရိုက်ခဲ့တဲ့ ဒါရိုက်တာကြီး Rakesh Roshan ရဲ့ အစွမ်းကတော့ ၂၀၀၀ခုနှစ်မှာ ရုပ်ရှင်ကားထွက်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၀၁မှာတော့ Best Actor Best Male Debut Best Female Debut Best Film Best Music Director Best Director အစရှိတဲ့ ဆုပေါင်းများစွားနဲ့ အိန္ဒိယမှာကော နိုင်ငံတကာမှာပါ အောင်ပွဲခံနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ ရိုးသားကြိုးစားပြီး အောင်မြင်တဲ့ အဆိုတော် တစ်ယောက် ဖြစ်ဖို့ အိပ်မက်နဲ့ လူငယ်တစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့ ရိုဟစ်ဟာ ကြီးကြီးတက်ချမ်းသာပြီး လိုလေသည့်မရှိ သူဌေးသမီး တစ်ဦး ဖြစ်သူ ဆိုနီယား နှင့် မထင်မှတ်ပဲ ဆုံတွေ့ပြီး ချစ်သူတွေ ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဆင့်တန်းကွာခြားမှုကြောင့် သူတို့ချစ်ခရီးဟာ မဖြောင့်ဖြူးခဲ့ပါဘူး ရိုဟစ် အောင်မြင်တဲ့ အဆိုတော် တစ်ယောက် ဖြစ်ခါနီးမှ ကံကြမ္မာဆိုး တစ်ခုနဲ့ ကြုံတွေ့လာရသောအခါ့ #တေးသီချင်း အလန်းစားတွေနဲ့ ဇာတ်လမ်း ဇာတ်အိမ် ခိုင်ခိုင်နဲ့ ပီတီဖြာစရာ အခန်းလေးတွေဆို ကိုယ်တိုင် ပြုံးမိသလို တချို့တချို့ လွမ်းခံလေးတွေကလည်း မျက်ရည်ဝဲစေလောက်ပါတယ်။ (မိုးအေးအေးလေးမှာ ကော်ဖီခါးခါ တစ်ခွက်နဲ့ ခံစားကြည့်လိုက်ကြပါဦး ခင်ဗျ)
ဒီတခါတော့ Bollywood ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက် Hangover Trilogy, Superbad အစရှိတဲ့ကားတွေလိုပဲ Black Comedy ကားကောင်းတကားကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်Saif Ali Khan နဲ့အတူ တခြားသရုပ်ဆောင်ပေါင်းများစွာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ကားကောင်းတကားပါဇာတ်လမ်းလေးကတော့အစာအိမ်ကင်ဆာရောဂါကျွမ်းနေလို့ သုံးလလောက်သာ နေရတော့မယ်လို့သိလိုက်ရတဲ့ ရီလန်ဒါပေမဲ့ တအိမ်လုံးကတော့ ညီဖြစ်သူမင်္ဂလာဆောင်ကြောင့် သူ့ဝမ်းနည်းမှုကိုမသိနိုင်ဘဲ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာသူကိုယ်တိုင်လည်း မပြောပြတော့ဘဲ တသက်နဲ့တခါ လုံးဝမသုံးဖူးတဲ့ မူးယစ်ဆေးသုံးပြီး စိတ်ထွက်ပေါက်ရှာပါတော့တယ် မင်္ဂလာဆောင်ခါနီးနီး ရည်စားဟောင်းက ပြန်ဆက်သွယ်လာလို့ ခိုးတွေ့ဖို့ကြံနေတဲ့ အန်ဂတ်အမေရိကန်ကို ပညာတော်သင်သွားဖို့ပြင်ဆင်ပြီးနေမှ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ မွေးနေ့ပွဲကိုသွားရင်း မူးယစ်ဆေးဝါးဝင်စစ်တဲ့ရဲတွေကြောင့် ကလပ်ထဲပိတ်မိနေတဲ့ တရာ၁၅ နှစ်တာ ရာဇာဘိုင်ဆိုတဲ့ဂိုဏ်းစတားခိုင်းသမျှလုပ်ခဲ့ကြပြီးဒီတကြိမ်မှာတော့ ကွက်ကျော်ရိုက်ဖို့ကြံနေတဲ့ လူဆိုးနှစ်ကောင်ဒီလိုမတူညီတဲ့ အခြေအနေတွေဟာ ဘယ်ကိစ္စကြောင့် ထိပ်တိုက်တွေ့ဖို့ ကံဖန်လာခဲ့ပါသလဲဘာတွေဘယ်လိုဆက်ဖြစ်ကြမလဲဆိုတာကိုတော့ …..( ရုပ်ရှင်ကားက Adults Rated ဖြစ်တဲ့အတွက် စကားလုံးအသုံးနှုန်းတွေ ကြမ်းတမ်းသည်ကို သတိပြုပါခင်ဗျာ )
Judwaa မြန်မာလိုတော့အမြွှာပေါ့အခု Varun Dhawan(Diwale ကားထဲက Sharukh Khan ရဲ့ညီ) ဒီမင်းသားရိုက်ထားတာတော့ Judwaa2ပေါ့အခု Judwaa 1 ကိုတော့ Salman Khan က မင်းသမီး ၂လက်နဲ့ သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်မင်းသားကြီး Salman Khan ဆို အပျိုအအိုကအစကြိုက်ကြတယ်ဆိုတာ ကျနော်ရဲရဲကြီးအာမခံရဲတယ်Salman Khan ၂ ကိုယ်ခွဲပါ ဒီကားထဲမှာဆိုရင်ဖြင့် Salman Khan ငယ်ငယ်တုန်းက အကတော်တာကိုမြင်တွေ့ရမှာပါ..သီချင်းတွေအများကြီးပါ..ခံစားပါခုက Body ကြီးသွားတော့ ကတာအရင်လောက်မလှတော့ပါဘူးဇာတ်လမ်းက ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လေးပါပဲ မိသားစုနဲ့ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ အမျိုးအစားပါ…ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ရဲအုပ်မယ်လ်ဟိုတျားတစ်ယောက် လူဆိုးကြီးရာတန်ကို ဖမ်းမိပြီးတော့ထောင်ဒဏ်သေဒဏ်ပေးလိုက်တာ လူဆိုးရုတ်တရက်တိုက်ခိုက်လို့ ရဲကခြေထောက်ကိုသေနတ်နဲ့ပစ်ရာမှ ဆေးရုံရောက်သွားတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ထိုရဲရဲ့မိန်းမကလည်း သားဖွားခါနီး ထိုဆေးရုံးကိုတင်ရပါတယ် လူဆိုးကလည်း ဆေးကုပြီးအပြီး ရဲတွေကိုပြန်ခုခံလေရောထိုအချိန်မှာ ရဲအုပ် မယ်လဟိုတျားမိန်းမ အမြွှာလေးမွေးပြီးတော့လူနာခန်းထဲရောက်နေချိန်ပေါ့အဲ့မှာလင်မယား၂ယောက်ကြည်နူးနေချိန် ရာတန်ဝင်လာပြီးတော့ တိုက်ခိုက်တော့တာပေါ့ကလေးတစ်ယောက်ကိုရဲကချီထားပြီး နောက်တစ်ယောက်ကိုတော့ လူဆိုးက မိခင်လက်ထဲကလုကာ ဓားစာအဖြစ်ခေါ်သွားပါတယ်ပြီးတော့လူဆိုးကိုလိုက်ဖမ်းတဲ့အခါ လူဆိုးကကလေးကိုရထားပြေးလမ်းအပေါ်ပစ်သွားတယ်ရဲတွေကမတွေ့လိုက်ဘူးပေါ့ရာတန်ကိုဖမ်းမရတော့ ပစ်ခတ်လိုက်ရာမှာ အဆောက်အဦးမီးလောင်သွားပါတယ်ရဲကလည်း သူ့ကလေးပါသွားပြီအထင်နဲ့ ပူဆွေးတာပေါ့ကလေးမိခင်ကတော့ သားဇွဲနဲ့ ရှင်လျက်သေသွားတယ်ရထားလမ်းပေါ်ရောက်နေတဲ့ကလေးက သေမလား ရှင်မလား?မိခင်ကရော ကျန်းမာရေးအခြေအနေပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားမှာလား အမြွှာညီအစ်ကို၂ယောက်ပြန်ဆုံမှာလားဆိုတာကိုတော့ရှပ်ရှင်ထဲမှာပဲ ဟာသလေးတွေရော အကလေးတွေရောကို စီးမျောပြီး ကိုချစ်ရတဲ့သူတွေနဲ့ခံစားလိုက်ပါဗျာ